gonadal hormone ပေါ်ပေါက်လာခြင်းသည်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်တွင် dopaminergic လုပ်ဆောင်မှုကိုလွှမ်းမိုးသည် (၂၀၁၀) - Your Brain On Porn
အပျိုဖော်ဝင်စစဉ်အတွင်း dopaminergic function ကိုအပေါ် gonadal ဟော်မုန်းလွှမ်းမိုးမှု၏ပေါ်ပေါက်ရေး (2010)
Horm ပြုမူနေ။ 2010 ဇွန်; 58 (1): 122-37 ။ EPub 2009 နိုဝင်ဘာ 10 ။
Kuhn က C, Johnson က M ကို, သောမတ်စ်တစ်ဦးက, Luo အဘိဓါန် B ကို, ရှိမုနျကိုလုပ် SA, zhou, G, Walker က QD.
ဆေးဝါးဗေဒနှင့်ကင်ဆာဇီဝဗေဒ, Duke တက္ကသိုလ်ဆေးပညာစင်တာ, Durham, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား 27710, အမေရိကန်နိုင်ငံစီးဌာန။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကလေးငယ်များအရွယ်ရောက်-ဥာဏ်ရည်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဟော်မုန်းနှင့်လူမှုရေးအရဖြစ်လာသည့်ကာလအတွင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာယုဂ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရေးပါသောဒေသများရှိဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်ပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်အသစ်အဆန်း-ရှာဖြစ်ကြပြီးသူတို့လျော့နည်းလူကြီးများထက် ပို. အကြီးအကျယ်အပြုသဘောအတွေ့အကြုံများအလေးချိန်နှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံများ။ ဤသည်မွေးရာပါအမူအကျင့်ဘက်လိုက်မှုမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေတူသောအန္တရာယ်များအပြုအမူတွေကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ အများစုမှာမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အစောပိုင်းမူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေစဉ်အတွင်း start မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်မှီခိုတစ်ခုတိုးလာမှုနှုန်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အပျိုဖော်ဝင်များ၏ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဉာဏနှင့်လူမှုရေးအပြောင်းအလဲများမှကူညီသည်။ ဤရွေ့ကားဟော်မုန်းဖြစ်ရပ်များရုံမျိုးဆက်ပွား function ကို၏ရငျ့နှင့်အလယ်တန်းလိင်ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်ရေးဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။ သူတို့ကအဖြစ်ကောင်းစွာ Non-မျိုးဆက်ပွားအပြုအမူတွေအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု၏အသွင်အပြင်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပြုအမူတွေအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုအဆုံးစွန်သောအကြားရှိပါတယ်။ မိန်းကလေးများပထမဦးဆုံးသုံးစွဲခြင်းကနေမှီခို (တယ်လီစကုပ်) ကိုလျင်မြန်စွာတိုးတက်မှုဖွံ့ဖြိုးနေချိန်တွင်ခြုံငုံမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်အထီးအများစုနေထိုင်ပြီး, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့အဆုံးအားဖြင့်ပေါ်လာသောအမျိုးသမီး-တဖက်သတ်အားနည်းချက်ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပါအဝင်အများအပြားအပြုအမူတွေအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုလူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအချက်များမှစွပ်စွဲခဲ့ကြသည်။ ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအကြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်တစ်ဦးကကျဉ်းကွာဟမှုကဒီစာတမ်းထောက်ခံပါတယ်။ သို့သော်စွဲအားနည်းချက်အချို့လိင်ကွဲပြားမှုစွဲတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်ဆားကစ်အတွက်ဇီဝဗေဒကွဲပြားမှုကိုထင်ဟပ်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်ရွယ်ချက်မှာခေတ္တမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းစွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သောဦးနှောက် dopaminergic လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက်, အမူအကျင့် neurochemical နှင့်ခန္ဓာဗေဒအပြောင်းအလဲများကိုအနှစ်ချုပ်ရန်နှင့်ဆက်သရန်, reinforcement ဖို့အရေးပါဖြစ်ကြောင်း dopamine စနစ်များတက်၏ function ကိုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုများ၏အလှူငွေအနှစ်ချုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည် မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း dopaminergic function ကိုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုများပေါ်ပေါက်လာအကြောင်းကိုတွေ့ရှိချက်အသစ်များ။
မူပိုင် 2009 Elsevier Inc ကို All rights reserved ။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စွဲလမ်းကရောဂါများအတွက်အရေးပါဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာယုဂ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လုံးဝနီးပါးတိုင်းမူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူသူသို့မဟုတ်သူမ၏ပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်။ (တစ်ဦးစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေး (ပုံမှန်အားဖြင့်ဆေးလိပ်, အရက်သို့မဟုတ်ဆေးခြောက်) အသက်အရွယ် 21 မတိုင်မီနီးပါးအမြဲဖြစ်ပေါ်လျက်, အစောပိုင်းကပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုစတင်၏ပထမဦးဆုံးပုံမှန်အသုံးပြုခြင်း, ပိုမိုမြန်ဆန်ကဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ပိုမိုပြင်းထန်သည်Estroff et al ။ 1989; Myers နှင့် Andersen က 1991; Clark က et al ။ 1998; ဘရောင်း et al ။ 2008; Windle et al ။ 2008) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုအချိန်ဖြစ်ပါသည် - ကလေးများရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်လူမှုရေးအရဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းနေကြသည်။ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာအလွန်အရေးပါဇာတ်စင်မှတဆင့်သွားနှင့်အပျိုဖော်ဝင်များ၏ဟော်မုန်းများနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်ကြသည်။ ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါဆုံးဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါအပြုအမူအတွက်ဆယ်ကျော်သက်အပြောင်းအလဲများနှင့် neurobiological ယန္တရားများမှအပျိုဖော်ဝင်များ၏အလှူငွေအမှာစကားပြောကြား။ ကျနော်တို့မဟုတ်ဘဲပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမှမျှဝေသူအဖြစ်ကျား, မအခန်းကဏ္ဍနှင့်သက်တူရွယ်တူလွှမ်းမိုးမှုကဲ့သို့လူမှုရေးအကြောင်းရင်းများထက်ဇီဝအချက်များ (တိကျတဲ့အာရုံကြောဆားကစ်၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ) အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ။ အဆုံးစွန်သောအကြောင်းကိုကျယ်ပြန့်စာပေ (ပြီးသားရရှိနိုင်ပါသည်Dakof 2000; Waylen နှင့် Wolke 2004) ကျား, မ-တိကျတဲ့အားနည်းချက်များသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းဇီဝအချက်များအများကြီးလျော့နည်းဆွေးနွေးတင်ပြနေစဉ်။ ကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်သတင်းအချက်အလက်များမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းစွဲဖို့တိုးမြှင့်အားနည်းချက်အဓိကအားဖြင့်ကျားမ-လွတ်လပ်သောဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုရောင်ပြန်ဟပ်နှင့် pubertal ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့အဆုံးအားဖြင့်ပေါ်လာသောစွဲအမျိုးမျိုးရှုထောင့်အဘို့အကျား, မ-တိကျတဲ့အန္တရာယ်များပေါ်ပေါက်ရေးဖျန်ဖြေကြောင်းကိုပြသသည်။
ကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအားနည်းချက်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှုပြန်လည်သုံးသပ်မည်အောက်ပါကဏ္ဍများအတွက်, တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှာဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသောအရေးကြီးသော endocrine ပြုပြီ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးစွဲအန္တရာယ်တိုးမြှင့်ကြောင်းအပြုအမူများ၏ ontogeny, အ dopaminergic အာရုံခံ၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု Basal ganglia နှင့်တိုကျရိုကျ innervating မူးယစ်ဆေးအားဖြည့် mediates နှင့်အပျိုဖော်ဝင်စကဤလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုဘယ်လောက်အရာ cortex ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း dopaminergic function ကိုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုများပေါ်ပေါက်လာအကြောင်းကိုသစ်ကိုပဏာမဒေတာများကိုပါလိမ့်မယ်။ အခန်းအပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းမူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အရေးပါပေမယ့်အတော်လေး uncharacterized နေသောအလုပ်အမှုဆောင် function ကို, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-sensitivity ကိုအပါအဝင်အများအပြားအရေးပါ neurobehavioral လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏အကျဉ်းဖော်ပြချက်နှင့်အတူအဆုံးသတ်ထားသည်။ ဤရွေ့ကားအနာဂတ်သုတေသနအတွက်အရေးပါသောပစ်မှတ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
အပိုင်း 1: လူကြီးများအတွက်လိင်, Gonadal Steroid တစ်မျိုးနဲ့စွဲ
မူးယစ်ဆေး sensitivity ကိုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပုံစံများနှင့်ဤကွဲပြားခြားနားမှုအတွက်မျိုးဆက်ပွားဟော်မုန်းများ၏အခန်းကဏ္ဍမှာ Volume ထဲမှာယခင်ဆောင်းပါးများအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြပြီးဒါသည်ဤသာအကျဉ်းချုံးကဒီမှာအကျဉ်းချုပ်ပါလိမ့်မည်။ တသမတ်တည်းအစီရင်ခံဖြစ်ကြောင်းလူ့လူဦးရေအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှစ်ခုလိင်ကွဲပြားမှုရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာပိုမိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားအရက်, psychostimulants နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအပါအဝင်အရှိဆုံးမူးယစ်အတန်း, (အနှံ့အမျိုးသမီးထက်သုံးစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးအလွဲသုံးစားNHSDUH 2007; Tetrault et al ။ 2008) ။ သို့သျောလညျးအမြိုးသမီးမြား (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုသမိုင်းကနဦးအသုံးပြုခြင်းနှင့်မှီခိုအရက်အပါအဝင်အရှိဆုံးမူးယစ်ဆေးအဘို့, psychostimulants နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအကြားတစ်ဦး "တယ်လီစကုပ်" သရုပ်ပြပိုမိုလျင်မြန်စွာစွဲဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်စိတ်ရောဂါရောဂါတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ပွားမှုတွေ့ကြုံခံစားရော့စ် et al ။ 1988; Brady et al ။ 1993; Brady နှင့် Randall 1999; ဗန် Etten et al ။ 1999; Brecht et al ။ 2004; Diala et al ။ 2004) ။ လူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအချက်များပြောင်းလဲနေတဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြုအမူယူပြီးမူးယစ်ဆေးကိုသြဇာလွှမ်းမိုးအဖြစ်သို့သော်ဤကွဲပြားခြားနားမှု, လျှင်မြန်စွာလျော့ကျလာနေကြသည်။ စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာငြင်းခုန်ပေမယ့်ဒီဖြစ်ရပ်တစ်ခုခုအတွက်ဇီဝအချက်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကြောင်းကိုနည်းနည်းကွန်ကရစ်သတင်းအချက်အလက်ရှိပါသည်။
စွဲမှအားနည်းချက်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပိုပြီးကျယ်ပြန့်သွင်ပြင်လက္ခဏာပါပြီ။ ဤရွေ့ကားလည်းဒီ volume ထဲမှာယခင်ဆောင်းပါးများအတွက်အကျဉ်းချုပ်ပြီဒါမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှသက်ဆိုင်ရာနေသောကိုသာအဓိကပြဿနာများကိုကဒီမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံး Non-လူ့မျောက်ဝံများအပေါ်အကျဉ်းချုပ်ကိုစာပေဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်ကြွက်မော်ဒယ်များကိုအသုံးပြုထားတဲ့ထို့နောက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စာပေပါလိမ့်မယ်။
Non-လူ့မျောက်ဝံများအတွက်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုအပေါ်စာပေကျဲဖြစ်ပါတယ်နှင့် (တခြားနေရာပြန်လည်သုံးသပ်Lynch et al ။ 2002; ကာရိုး et al ။ 2004), သို့သော်အချို့ပျေါလှငျကဒီမှာတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်မူးယစ်ဆေးနှင့်စမ်းသပ်ဆဲပါရာဒိုင်းအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနား။ Non-လူ့မျောက်ဝံများအတွက်ကောက်ယူအများအပြား Self-အုပ်ချုပ်ရေးလေ့လာမှုများယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းနှစ်ဦးစလုံးပါဝင်သည်နေစဉ်, အနည်းငယ်လိင်ကွဲပြားမှု detect ဖို့လုံလောက်တဲ့ကြီးမားတဲ့ဘာသာရပ်နံပါတ်များကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချ။ အီသနောအဘို့အတွေ့ရှိချက်အထူးသဖြင့်ဆန့်ကျင်ကြသည်။ အီသနော-မိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု (Non-လူ့မျောက်ဝံများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြသည်မဟုတ်Grant ကနှင့် Johanson 1988) ။ အမျိုးသမီး (Operations အခြေအနေများအောက်တွင်အခမဲ့-အရက်သောက်အခြေအနေများအောက်တွင်ပိုပြီးအီသနောပေမယ့်ဒီထက်အီသနောသောက်အစီရင်ခံခဲ့ကြရေ့စ်နှင့် Barrios က de Tomasi 1999; Vivian et al ။ 2001) ။ ထိုးအပေါ်အခြေခံပြီးကင်း၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ခြားနားချက်များသတိထားထည့်သွင်းစဉ်းစား, လိင်နှင့်ရာသီစက်ဝန်းအဆင့်အမျိုးသမီး cynomolgous မျောက်သံသရာ၏ follicular အဆင့်စဉ်အတွင်းတိုးတက်သောအချိုးအစားအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားချိုးအချက်များမှအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုပြတော်မူပြီ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ရင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုတုံ့ပြန်ကြောင်း အလားတူ (Mello et al ။ 2007) ။ အမျိုးသမီးမျောက် (ယောက်ျားထက် ပို. phencyclidine လောင်အစီရင်ခံခဲ့ကြသည်ကာရိုး et al ။ 2005) ။ ယေဘုယျအားဖြင့် non-လူ့မျောက်ဝံများအတွက်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုများ၏လေ့လာမှုမဆိုပြတ်သားစရိုက်လက္ခဏာတွေပေးမလုံလောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြွက် & Models အတွက်စွဲလမ်းအားနည်းအတွက်လိင်ကွာခြားချက်များ
Non-လူ့မျောက်ဝံများနှင့်အတူကြီးထွားလာစာပေလည်းမရှိပေမယ့်လိင်ကွဲပြားမှုရှာဖွေစူးစမ်းလေ့လာမှုအများစုကြွက်ကိုအသုံးပြုပါ။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုများတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ locomotor activation နှင့်၎င်း၏ sensitive က conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) နှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးပါဝင်သည်။ Locomotor activation စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် forebrain မှထုတ်လုပ်တဲ့ dopaminergic အာရုံခံ၏ activation မှ sensitivity ကိုခန့်မှန်းပေမယ့်အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏တိုက်ရိုက်တိုင်းတာပေးမထားဘူး။ CPP ကမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏တစ်ဦးထက်ပိုတိုက်ရိုက်အကဲဖြတ်ပေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမိမိဆန္ဒအလျောက်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏လက်ရှိ "ရွှေကိုစံ '' ပေးပါသည်။ ဤအရာအားလုံးသည်ကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ကိုက်ညီလိင်ကွဲပြားမှု, ဤအစီအမံအားလုံးအတှကျတည်ရှိသောကြောင့်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်ကြောင်းစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုများပေါ်ပေါက်လာသို့အချို့သောထိုးထွင်းသိမြင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။
Locomotor ဆွ, locomotor sensitive ကချင်းတိုးတက်ရေးပါတီနှင့် psychostimulants ၏မိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူ, မူးယစ်ဆေးဝါး, နီကိုတင်းနှင့်အီသနောနိမ့်ဆေးများမှာပိုမိုမြန်ဆန်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အထီးထက်အမျိုးသမီးအတွက်ပြင်းအားအတွက် သာ. ကြီးမြတ်များမှာ (Donnie et al ။ 2000; ကာရိုး et al ။ 2004; ဟူ et al ။ 2004; Chaudhri et al ။ 2005; ယာဉ် 2008; Yararbas et al ။ 2009) ။ တိုတောင်းသော access ကိုစဉ်အတွင်း fixed အချိုးတုံ့ပြန်, အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းများ၏နှိုင်းယှဉ်ပမာဏ (ကာဣန et al ။ 2004) ။ အထီးထက်သုဉ်းနေစဉ်အတွင်းပိုပြီးသို့သော်အမျိုးသမီးတစ်ဦးတိုးတက်သောအချိုးအောက်မှာ psychostimulants အဘို့အခက်ခဲအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ပိုမြန်အသုံးပြုမှုမြင့်လာနှင့်ဘားစာနယ်ဇင်း (Lynch et al ။ 2002; ကာရိုး et al ။ 2004; Lynch 2006; Quinones-Jenab 2006; Becker က Hu က 2008) ။ အဆုံးစွန်သောတွေ့ရှိချက်မူးယစ်ဆေးဝါးများယူလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးသမီးအတွက်အားကောင်းကြောင်းညွှန်ပြဘတ်ပါပြီ။ သူတို့ cue-သွေးဆောင် relapse (စဉ်အတွင်းလျော့နည်း reinstatement ပြနေချိန်တွင်ကင်းမိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်ရေးမှပြန်သွားကြသည်စဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးကိုကင်းပြီးနောက်ယောက်ျားမှနှိုင်းယှဉ်များမှာFuchs et al ။ 2005) ။ ဤရွေ့ကားအဆုံးစွန်သောလက္ခဏာများ (ရိုးရှင်းသော Self-အုပ်ချုပ်မှုထက်လူ့စွဲများအတွက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းမူးယစ်ဆည်းပူးနေဝိသေသလက္ခဏာများ၏ပိုကောင်းတဲ့မော်ဒယ်ဖြစ်ဖို့ထင်နေကြတယ်Vanderschuren နှင့် Everitt 2004) ။ Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတော်ကြာ nonpharmacological ထိန်းချုပ်မှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုလည်းအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ နီကိုတင်း၏ self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုပိုမိုအထီးထက်အမျိုးသမီးများတွင် Non-မူးယစ်ဆေးလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ထိခိုက်နှင့်အချိန်ထွက်ကာလစဉ်နှင့်မျိုးသုဉ်းနေစဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်တာဖြစ်ပါတယ် (ယောက်ျားထက်မိန်းမဦးအတွက် သာ. ကြီးမြတ်များမှာChaudhri et al ။ 2005) ။ ဤရွေ့ကားကွဲပြားခြားနားမှု operating အပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်လိင်ကွဲပြားမှုကိုထင်ဟပ်နိုင်ဘူး။ အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်ဆေးလိပ်သောက်သူနဲ့ဆက်စပ် Conditions တွေကိုပိုပြီးထိခိုက်မခံဖြစ်သတင်းပို့ကြသည်အဖြစ်နီကိုတင်းနှင့်အတူတွေ့ရှိချက် (လူသားအထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်သည်Perkins et al ။ 1999) ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးလူသားတွေအတွက်မှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်အများကြီးအဖြစ်, ပိုမြန်စွဲ၏ compulsive အဆင့်သို့ကူးပြောင်းအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်အပြုအမူတွေကိုဖော်ပြတယ်။
စွဲလမ်းမှုအပေါ် Gonadal steroids သွဇာ
Gonadal steroids လူသားတွေဟာအတွက်သွဇာနှင့် Non-လူ့မျောက်ဝံများ
သားအိမ် steroids အမျိုးသမီး, ဒါပေမယ့်မကြာခဏသိမ်မွေ့နည်းလမ်းစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့စဉ်းစားနေကြသည်။ ဤအသက်ရောက်မှုကိုသရုပ်ပြရန်အသုံးပြုခဲ့တစ်ခုမှာနည်းလမ်းရာသီစက်ဝန်းကိုဖြတ်ပြီးမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများသို့မဟုတ်စားသုံးမှုကိုတိုင်းတာရန်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (ထိုရာသီစက်ဝန်း၏ follicular အဆင့်စဉ်အတွင်းအများအပြားစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးပိုမိုပုဂ္ဂလဒိဋ္ဆိုးကျိုးများတွေ့ကြုံခံစားTerner နှင့်က de ကျေး 2006) ။ သို့သော်အီသနောတို့အပါအဝင်တချို့ထင်ရှားတဲ့ခြွင်းချက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္သက်ရောက်မှုမဟုတ်သလိုစားသုံးမှုမပါ (ရာသီစက်ဝန်းနှင့်အတူကွဲပြားရသောအဘို့, ရှိပါတယ်Sofuoglu et al ။ 1999; Holdstock နှင့်က de ကျေး 2000; အီဗန် et al ။ 2002) ။ ချို့ယွင်းသောအားဖြင့်ကိုကင်း၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္သက်ရောက်မှုများနှိမ်နင်းရေး (တော်တော်များများလေ့လာမှုများအစီရင်ခံထားသည်Sofuoglu et al ။ 2002; Sofuoglu et al ။ 2004; အီဗန် 2007) ။ ယင်းတွေ့ရှိချက်သံသရာ၏ luteal အဆင့်စဉ်အတွင်းလျော့နည်းသွားပုဂ္ဂလဒိဋ္သက်ရောက်မှုဖျန်ဖြေစေခြင်းငှါ, ရာအဓိကချို့ယွင်းများအတွက်တတ်နိုင်သမျှကုထုံးကိုအသုံးပြုခြင်း၏လေ့လာမှုများ, အစပျိုးခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်တခြားနေရာကဒီ volume ထဲမှာအရှည်မှာဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ကြွက် & Models အတွက်ကိုစှဲအပြုအမူအပေါ် Gonadal steroids သွဇာ
ကြွက်များတွင်ကောက်ယူလေ့လာမှုများအနေဖြင့်တစ်ဦးထက်ပိုသောကျယ်ပြန့်စာပေများစွာကိုမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် estradiol များအတွက် facilitatory အခန်းကဏ္ဍနှင့်အဓိကချို့ယွင်းများအတွက်ဖိနှိပ်အခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါတယ်။ အီစထိုဂျင် (ကတိုးတက်သောအချိုးအောက်မှာတုံ့ပြန်ဝယ်ယူ, တိုးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်နှင့်အပျက်သဘောအစီရင်ခံစာများတည်ရှိပေမယ့်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် relapse စဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်ပိုကောင်းစေပါတယ်Grimm နှင့်ကြည့်ရှု 1997) ။ ဆနျ့ကငျြ, ချို့ယွင်းသော (ဤတူညီတဲ့အပြုအမူဖိနှိပ်Feltenstein နှင့်ကြည့်ရှု 2007; Feltenstein et al ။ 2009) ။ testicular steroids ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလျော့နည်းယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်ပါတယ်။ အထီးကြွက် Castrating (စိတ်ကြွဆေးပြီးနောက် psychostimulant-တိုးမြှင် dopamine လွှတ်ပေးရန်သို့မဟုတ်အလှည့်အမူအကျင့်မပြောင်းပါဘူးBecker က 1999) သို့မဟုတ်ကင်းမိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်ရေးကိုပြောင်းလဲ (ဟူနှင့် Becker က 2003; ဟူ et al ။ 2004) ။ သို့သော်အခြားသောလေ့လာမှုများ (အထီးကြွက်၏သင်းကင်း-နှိုးဆွရွေ့လျားအတွက်နှောင့်နှေးတိုးဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်းပြသLong က et al ။ 1994; ဗန် Luijtelaar et al ။ 1996; Walker က et al ။ 2001) ။ ယေဘုယျအားဖြင့်သားအိမ် steroids သိသိသာသာစွဲလမ်း-related အပြုအမူတွေ modulate: အဓိကချို့ယွင်းတူညီတဲ့အပြုအမူဖိနှိပ်နေချိန်မှာအီစထိုဂျင်တသမတ်တည်း, စွဲဖို့သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းကြွက်များတွင်အပြုအမူတွေကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။ testosterone တူညီတဲ့အပြုအမူဖိနှိပ်မလှုပ်မရှားသို့မဟုတ်အနည်းငယ်ဖြစ်စေဖြစ်ပါတယ်။
စွဲလမ်းမှုမှသက်ဆိုင်ရာ Dopaminergic Functions များအပေါ် Gonadal steroids အကျိုးသက်ရောက်မှု
မူးယစ်ဆေးမိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်ရေးအပေါ် Gonadal Steroid တစ်မျိုးသက်ရောက်မှု dopaminergic အာရုံခံအပေါ်သက်ရောက်မှုအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ substantia nigra နှင့် ventral tegmental ဧရိယာကနေ caudate နျူကလိယမှစီမံကိန်းနျူကလိယ accumbens (dorsal နှင့် ventral striatum) နှင့်တိုကျရိုကျ cortex သာမန်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိရိစ္ဆာန်များအတွက်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ Initiative နှင့်ဖြစ်ကောင်းအသွင်ကူးပြောင်းရေးနှစ်ခုစလုံးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သော dopaminergic အာရုံခံ (လေ့အသုံးပြုမှုသို့သည် Le Moal ရှိမုန် 1991; Kalivas နှင့် O 'Brien 2008; Carlezon နှင့်သောမတ်စ် 2009; Dalley နဲ့ Everitt 2009) ။ အားလုံး Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလူကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ (ကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့အနီကိုတင်း, အရက်, opiates နှင့် psychomotor စိတ်ကြွဆေးအပါအဝင်ဤ dopaminergic အာရုံခံကိုသက်ဝင်di Chiara et al ။ 2004) ။ အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများနှင့် substantia nigra နှင့် ventral tegmental ဧရိယာကနေစီမံကိန်းကိုပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်၏အာရုံဖြစ်လတံ့သော dopaminergic အာရုံခံအပေါ် gonadal Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု။ gonadal steroids ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဟော်မုန်းလွှတ်ပေးရန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (ထိန်းညှိပေးသော hypothalamic dopaminergic အာရုံခံ modulate ပေမယ့်Hull et al ။ 1999; ဗင်္ယောနသန်နှင့် Hnasko 2001; Dominguez နှင့် Hull 2005), မူးယစ်ဆေးစွဲဤအာရုံခံများ၏အလှူငွေကျယ်ကျယ်လေ့လာခဲ့ရသေးကြောင့်ဒီနေရာမှာဆွေးနွေးကြမည်မဟုတ်။
လူသားတွေဟာနှင့် Non-လူ့မျောက်ဝံများအတွက် Dopaminergic ရာထူးအမည်အတွက်လိင်ကွာခြားချက်များ
dopaminergic function ကိုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု (ဒီ Volume ထဲမှာကို Jill Becker ကအားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ် (ဖွယ်ရှိမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုကိုအထောက်အကူပြုပေးသောတည်ရှိများနှင့်လည်းကြည့်ရှုBecker က 1999; Becker က Hu က 2008; Morissette et al ။ 2008) ။ လူသားများနှင့် Non-လူ့မျောက်ဝံများနှင့် ပတ်သက်. အဆိုပါရရှိနိုင်ပါသည်စာပေကြွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, ပထမဦးဆုံးဆွေးနွေးထားတယ်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာဓာတုဗေဒနှင့် forebrain dopaminergic အာရုံခံဆဲလ်များ၏အာရုံကြောဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများကိုလူသားများနှင့်လူသားမဟုတ်သောမျောက်များတွင်အသေးစိတ်လေ့လာခြင်းမရှိသော်လည်းအချို့သောအထောက်အထားများအရလိင်ကွာခြားမှုများရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ အခြေခံကျသောအချက်အလက်များသည်ရောဂါအန္တရာယ်လေ့လာမှုမှရရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည်ပါကင်ဆန်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနည်းပါးသည်။Baldereschi et al ။ 2000; Wooten et al ။ 2004) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေ Basal ganglia ၏ dopaminergic innervation အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့သော်ဤမေးခွန်းကို၏နည်းနည်းခန္ဓာဗေဒလေ့လာမှုရှိခဲ့သည်။ dopamine လွှတ်ပေးရေး imaging လေ့လာမှုများရောထွေးနေသောခေါင်းစဉ်: (အချို့လေ့လာမှုများအမြိုးသမီးမြား psychostimulants တုံ့ပြန် သာ. ကြီးမြတ် dopamine လွှတ်ပေးရန်ပြကြောင်းပြသနှင့်အခြားယောက်ျားအဲဒီလိုကြောင်းပြသMunro et al ။ 2006; Riccardi et al ။ 2006) ။ ထို့ကြောင့်စာပေလူသားတွေအတွက် dopaminergic function ကိုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု၏သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်. အပြီးအပြတ်ကောက်သည်။
ကြွက်များတွင် Dopaminergic ရာထူးအမည်အတွက်လိင်ကွာခြားချက်များ
presynaptic function ကို (dopamine ၏လွှတ်ပေးရန်) နှင့် postsynaptic function ကို (dopamine receptors ၏စကားရပ်များနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း) နှစ်ဦးစလုံးအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုကျယ်ကျယ်သွင်ပြင်လက္ခဏာပါပြီ။ ဤရွေ့ကားကြွက်များတွင်အများဆုံးကျယ်ပြန့်လေ့လာခဲ့ပါပြီ။ ဒါဟာ Basal dopamine လွှတ်ရာပေါင်းစည်းမှု, dopamine လွှတ်ပေးရေးနှင့်အဲဒီ receptor sensitivity ကိုလှုံ့ဆော်ဖို့စွမ်းရည်အမျိုးသမီး၏တိုးမြှင် dopamine တုံ့ပြန်မှု (အထောက်အကူပြုကြောင်းအဆိုပြုပြီးပါပြီCastner နှင့် Becker က 1996) အနေနဲ့တိုးမြှင့်အပြုအမူ reactivity ကို (စကြောင်းBecker က Hu က 2008) ။ Basal dopamine လွှတ်ပေးရန်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက်ကွာခြားပါဘူး: အစာရှောင်ခြင်းစကင်ကိုသိသိ voltammetry နှင့်အတူ microdialysis သို့မဟုတ်အနိမ့်အကြိမ်ရေဆွအသုံးချဖို့လေ့လာမှုများ (သူတို့ gonadally နဂိုအတိုင်းအခါယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း extracellular dopamine ၏အကြမ်းဖျင်းနှိုင်းယှဉ်အဆင့်ဆင့်ရှိသည်ကိုပြသBecker ကနှင့် Ramirez 1981b; Castner et al ။ 1993; Walker က et al ။ 2000; Walker က et al ။ 2006) ။ အလားတူပင် dorsal နှင့် ventral striatum အတွက် D1 နှင့် D2 receptors များ၏နံပါတ်များကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက်တရားမျှတစွာဆင်တူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တဦးတည်းလေ့လာမှုပင် (ယောက်ျားအတွက် သာ. ကြီးမြတ် D1 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်Becker ကနှင့် Ramirez 1981b; Festa et al ။ 2006) ။ သို့သျောလညျးအမြိုးသမီး dorsal striatum အတွက်လျှပ်စစ်ဆွသို့မဟုတ် psychostimulants တုံ့ပြန်တသမတ်တည်းပိုမိုမြင့်မား dopamine လွှတ်ပေးရန်ပြသပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်း (ထက်နှစ်ဆနီးပါးယောက်ျားအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်း, အမျိုးသမီးအတွက် dorsal striatum အတွက်လျှပ်စစ်စိတ်ကြွဆေး dopamine လွှတ်ပေးရန်ကြောင်းအကျယ်ချဲ့ပြတော်မူပြီWalker က et al ။ 2000) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်စိတ်ကြွဆေး proestrous အမျိုးသမီးအတွက်အကြီးမြတ်ဆုံး c ကို-fos တုံ့ပြန်မှု (အကျူးနဲ့ post-Synaptic ဆွနှစ်ဦးစလုံး၏ပေါင်းလဒ်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်ဟုချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇတုံ့ပြန်မှု) (ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သောအစီရင်ခံစာနှင့်ကိုက်ညီများမှာCastner နှင့် Becker က 1996) ။ တခြား endocrine ပြည်နယ်များရှိယောက်ျားအဖြစ်အမျိုးသမီးကျော်လွန်ကြောင်း pharmacologic လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုမြင့်သောအီစထိုဂျင်ပြည်နယ်ပြပွဲ dopaminergic တုံ့ပြန်မှုအတွက်အမျိုးသမီးကြွက်ကြောင့် postulated ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုကကျယ်ပြန့်စာပေနှစ်ခုလုံးကိုအကျူးများနှင့် postsynaptic dopaminergic function ကိုတိုးပွားလာအတွက်အီစထိုဂျင်များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါတယ်။ အီစရိုဂျင်, dopamine လွှတ်ပေးရန်ကြီးထွားများပြားစေ (အဲဒီ receptor ပျက်စီးခြင်းနှုန်းထားများနှေးကွေးခြင်းဖြင့် D1 နှင့် D2 နှစ်ဦးစလုံးအဲဒီ receptor အရေအတွက်ကိုတိုးပွါးနှင့် DAT ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်Morissette et al ။ 1990; Levesque နှင့် Di Paolo 1991; Morissette နှင့် Di Paolo 1993; Morissette နှင့် Di Paolo 1993; Becker က Hu က 2008; Morissette et al ။ 2008) ။ အကွိမျမြားစှာယူဆချက်အီစထိုဂျင် dopaminergic function ကိုကြီးထွားများပြားစေပုံကိုရှင်းပြဖို့အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ တဦးတည်းအယူအဆ (estradiol dopaminergic ဆိပ်ကမ်း၏ဂါဘမြို့သား-mediated တားစီးမှုကိုလျော့နည်းစေကြောင်းဟူ et al ။ 2006) ။ ဆနျ့ကငျြ, အရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားအများစုလေ့လာမှုများ (testosterone ဟော်မုန်း dorsal သို့မဟုတ် ventral striatum အတွက် dopaminergic function ကိုထိန်းညှိမထားဘူးကြောင်းအကြံပြုBecker က 1999; Becker က 2009) ။ သို့သော်အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုများနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်များအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းတိုကျရိုကျ cortex dopaminergic ဆားကစ် (အန်ဒရိုဂျင်များကလွယ်ကူချောမွေ့လျက်ရှိသည်Adler et al ။ 1999; Kritzer 2000; Kritzer et al ။ 2001; Kritzer 2003; Kritzer et al ။ 2007), နှင့်ဤဖြစ်စဉ်များစွဲအားနည်းချက်မှသိသိသာသာအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ထိုအဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်အန်ဒရိုဂျင်လုပ်ရပ်များစွဲလမ်းအပြုအမူတွေအပေါ် gonadal Steroid တစ်မျိုးဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာအတွက်အရေးပါသောကွာဟချက်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
Dopamine စနစ်များ၏ခန္ဓာဗေဒအပေါ် Gonadal steroids အကျိုးသက်ရောက်မှု
Gonadal steroids ဟော်မုန်းလူသားတွေဟာအတွက် Dopamine စနစ်များ၏ခန္ဓာဗေဒအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် Non-လူ့မျောက်ဝံများ
Gonadal steroids အဆိုပါ dopaminergic အာရုံခံ၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အဖြစ် key ကို dopaminergic ပရိုတိန်း၏စကားရပ်နှင့် dopamine လွှတ်ပေးရေး afferent စည်းမျဉ်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ ဒီဖြစ်နိုင်ချေကိုထောက်ပံ့ယုံကြည်စိတ်ချသက်သေအထောက်အထား (အမျိုးသမီးမျောက်ဝံများ၏ ovariectomy estradiol အစားထိုးခြင်းဖြင့်တားဆီးနိုင်သော substantia nigra အတွက် dopamine ဆဲလ်အရေအတွက်အမြဲတမ်းကျဆင်းစေသောသောအစီရင်ခံစာခဲ့သည်Leranth et al ။ 2000) ။ (မျောက်ဝံများ, estradiol နှင့်အဓိကချို့ယွင်းအတွက်နှစ်ဦးစလုံး dorsal striatum ရဲ့ dorsolateral (အာရုံခံအသင်းအဖွဲ့ဒေသများ) အဖြစ်တိုကျရိုကျ cortex အပါအဝင်အချို့သောဒေသများရှိ dopaminergic အာရုံခံ၏ terminal ကို Arbore ၏သိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်Kritzer နှင့် Kohama 1998; Kritzer et al ။ 2003) ။ Estradiol လည်းမျောက်တွေကို dopamine လွှတ်ပေးရေးအပေါ်အလုပ်လုပ်တဲ့သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်: Parkinsonian မျောက်များ၏ estradiol အစားထိုးပင်အီစရိုဂျင်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့တဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလပြီးနောက် dopamine လွှတ်ပေးရန်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ် (Morissette နှင့် Di Paolo 2009).
ကြွက်များတွင် Dopaminergic စနစ်၏ခန္ဓာဗေဒအပေါ် Gonadal steroids ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု
မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများ (အထူးသဖြင့် neurotoxic ဒဏ်ရာတုံ့ပြန်အတွက် estradiol dopaminergic အာရုံခံထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် trophic အခန်းကဏ္ဍရှိကြောင်းအကြံပြုMorissette et al ။ 2008) ။ (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ခွဲခန်းကနေလတ်တလောလေ့လာမှုများအမျိုးသမီးကြွက်ဟာ substantia nigra နှင့် ventral tegmental ဧရိယာနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပိုပြီး dopaminergic အာရုံခံရှိသည်ပြသကြနှင့် estradiol အဓိကအားအီစရိုဂျင် receptor beta ကိုအပေါ်လုပ်ရပ်များမှတဆင့်ကြွက်နှင့်ကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက် dopamine ဆဲလ်အရေအတွက်ကိုထိန်းသိမ်းထားဂျွန်ဆင် 2009a) ။ အထီးကြွက်၏သင်း dopaminergic အာရုံခံ၏နံပါတ်တစ်ခုမမျှော်လင့်ဘဲတိုးမှုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုများလည်း (ဤဖြစ်ရပ်ဆန်းအတွက် testicular steroids များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခဲ့ကြဂျွန်ဆင် 2009b) ။ သည်အခြားလေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သောခြားနားချက်အစီရင်ခံကြပြီမဟုတ်ပေမယ့် (Dewing et al ။ 2006; မက်က်အာ et al ။ 2007), အဆုံးစွန်သောလေ့လာမှုများလယ်ပြင်၌အရှိဆုံးတိကျခိုင်မာစွာစံသောဘက်မလိုက် stereologic ရေတွက် employ ခဲ့ပါဘူး။ dopaminergic အာရုံခံ၏နံပါတ်တွင်ဤကွဲပြားခြားနားမှု gonadal Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းပမာဏ၏ခြယ်လှယ်ပြီးနောက် dopaminergic function ကိုအစီရင်ခံကွဲပြားခြားနားမှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သည် dorsal နှင့် ventral striatum ၏ dopaminergic innervation အတွက်လိင်ကွဲပြားမှုအစီရင်ခံထားကြပြီမဟုတ်။ သို့သော်တိုကျရိုကျ cortex ၏ dopaminergic innervation ကိုလေ့လာခဲ့ပြီး, နှင့်အန်ဒရိုဂျင်ဤဒေသတွင်သိသိသာသာအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။ Kritzer (အန်ဒရိုဂျင်ကြွက်၏ Cortex အတွက် terminal ကိုသိပ်သည်းဆကိုလျော့နည်းစေကြောင်းပြသAdler et al ။ 1999; Kritzer 2000; Kritzer 2003).
testosterone ဟော်မုန်းအားဖြင့် estradiol နှင့်ကျိုးနွံစည်းမျဉ်းအားဖြင့်ခိုင်မာတဲ့စည်းမျဉ်း၏တည်ရှိမှု dopaminergic အာရုံခံအတွက် gonadal Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း receptors ၏အစီရင်ခံစကားရပ်နှင့်အတူ Concorde ဖြစ်ကြသည်။ သာသေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းနှစ်ခုအဓိက estradiol receptors (ERαနှင့်ERβ) ၏တစ်ခုခုကိုဖော်ပြနေစဉ် midbrain အတွက် dopaminergic အာရုံခံ၏သိသာထင်ရှားသောရာခိုင်နှုန်း, အန်ဒရိုဂျင် receptor များဖော်ပြ (Kritzer 1997; Creutz နှင့် Kritzer 2002; Creutz နှင့် Kritzer 2004; Kritzer နှင့် Creutz 2008) ။ ဤရွေ့ကားခန္ဓာဗေဒကွဲပြားခြားနားမှု dopaminergic function ကိုအပေါ်ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု၏အရေးပါသောအလားအလာဖျန်ဖြေကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သူတို့ကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများပြုပြီအဖြစ်အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
estradiol အားဖြင့် forebrain အတွက် dopaminergic function ကို၏တိုးမြှင့်ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု (ကိုအထောက်အကူပြုရန်သောအယူအဆထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်Lynch et al ။ 2002; ကာရိုး et al ။ 2004; Lynch 2006; Becker က Hu က 2008) ။ ဒီတွေ့ရှိချက်၏ဘုံလှုံ့ဆျောမှုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက်မျိုးဆက်ပွားပြည်နယ်မှချည်ထားသောမည်သို့၏အခြေခံအကျဆုံးအဖွဲ့အစည်းကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။ သူတို့မြေသြဇာကောင်းသောအခါအမျိုးသမီးသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ထွက်ရှာကြလိမ့်မည်နေချိန်မှာသားအိမ်သော်လည်းမ testicular steroids အားဖြင့် forebrain မှထုတ်လုပ်တဲ့ dopaminergic အာရုံခံ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, အထီးသည့်အချိန်တွင်မဆို (ဒီ dopaminergic system ကိုသုံးပြီး) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ထွက်ရှာအံ့သောငှါခွင့်ပြုပါရန်ခနျ့မှနျး (Becker ကနှင့်တေလာ 2008) ဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်တိကျသောပြန်ပါလာမည်မဟုတ်ပေမယ့်နှုန်း se (သိပ်မရှိပါဘူးနှင့် Agmo 2004).
(အခြားလိုငွေပြမှုများအကြား) လိင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့် dopaminergic agonists များနှင့်ကုသစဉ်မသင့်လျော်သောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများပေါ်ပေါက်လာခြင်းက dopamine သည်လူသားများတွင်ဤအပြုအမူများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဆိုသည်။Meco et al ။ 2008) ။ သို့သော်သီးခြား gonadal steroids ၏ဆွေမျိုးအလှူငွေလူသားတွေအတွက်နာမည်ဆိုးမျိုးစိတ်-တိကျတဲ့နှင့်မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများယောက်ျားအတွက် function ကို hypogonadism အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအာရုံချို့ယွင်း, ဒါပေမယ့်ကြောင်း testosterone ဟော်မုန်းပွနျလညျထူထောငျကွောငျးဖျောပွခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့် estradiol အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဒါမလုပ်ခဲ့ဘူး (Czoty et al ။ 2009) ။ ထို့အပွငျ dopamine dorsal အတွက်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်လူသား၏ ventral striatum ၏လေ့လာမှုများကိုက်ညီမှုလိင်ကွဲပြားမှုကိုပြသ။ dopamine လွှတ်ရာနှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်တွေ့ရှိချက်များကိုသတင်းပို့ထားတဲ့လူသားတွေအတွက်ထုတ်ဝေခဲ့ကြပြီတဦးတည်း (ကအမျိုးသမီးအတွက် သာ. ကွီးမွတျကွောငျးကိုလွှတ်ပေးရန်ယောက်ျားအတွက်ကြီးကြောင်းသတင်းပေးပို့နှင့်အခြားMunro et al ။ 2006; Riccardi et al ။ 2006)
Non-ဟော်မုန်း (လူမှုရေး) တွေကိုသိသိသာသာအခန်းကဏ္ဍပေမယ့် Gonadal steroids လည်း (မျောက်ဝံများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုထိန်းညှိဝေါ်လဲန်နှင့် Zehr 2004) ။ အမျိုးသမီး Non-လူ့မျောက်ဝံများမြင့်မားသောကလေးမွေးဖွားနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းရာသီစက်ဝန်း၏အချိန် (နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်သံသရာ) (နဲ့အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုသြဒိနိတ်Bonsall et al ။ 1978) ။ မကြာသေးခင်ကပေလေ့လာမှု Basal DA လွှတ်ပေးရန် Non-လူ့မျောက်ဝံများ (ထဲမှာ follicular အဆင့်ထက် luteal ကာလအတွင်းအနိမ့်စေခြင်းငှါပြသအဖြစ်ထို့အပြင် dopamine လွှတ်ပေးရန်, Non-လူ့မျောက်ဝံများအတွက်သားအိမ် steroids နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်စေခြင်းငှါSchmidt က et al ။ 2009).
အပိုင်း 2: ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်စွဲလမ်းမှု
လူသားတွေဟာအတွက်စွဲလမ်းများအတွက် Developmental ယုဂ်ဝေဖန်အဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (လူကြီးဖို့အကူးအပြောင်းခြေတစ်လှမ်းအရာနောက်ဆုံးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာယုဂ်တစ်ခုဖြစ်သည်လှံကို 2000; Windle et al ။ 2008) ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်ရွယ်ချက်, ငါတို့အဲဒီနှစျခုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ လူသားမြားသညျမှာ, နှစ်ပေါင်း 10-25 ကနေအကြမ်းဖျင်းအထိချဲ့ကာ။ ဤသည်အသက်အပိုင်းအခြားပုံမှန်အားပေးသောထက်ပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်မကြာသေးမီဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (ဦးနှောက်နှစ်လယ်ပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်သည်အထိအပြည့်အဝရင့်ကျက်မရကြောင်းအကြံပြုLenroot နှင့် Giedd 2006).
ဦးနှောက်နှင့် somatic ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ပြီးစီးကလေးများရွယ်တူချင်းရန်မိသားစုထံမှသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကသူတို့နယ်ပယ် shift အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်သည့်သိသာထင်ရှားသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမှုရေးအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူအပြန်အလှန်။ မကြာမီကလေ့လာမှုများဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံကဤကာလအတွင်းအပြီးသတ်ရငျ့လျှက်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ မီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆ (တစ်ဦးချင်းစီကဦးနှောက်ဒေသများများအတွက်လမ်းကြောင်းကွဲပြားသော်လည်းဖြစ်ကောင်း myelin အတွက် offset တိုးထင်ဟပ်ကျရောက်Isralowitz နှင့် Rawson 2006; pause et al ။ 2008; Giedd et al ။ 2009) နှင့် Synaptic သိပ်သည်းဆ (အနည်းဆုံး Non-လူ့မျောက်ဝံများအတွက်နှောင်းပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဖြည်းဖြည်းကျရောက်Bourgeois et al ။ 1994).
ဦးနှောက် function ကိုလည်း (နှောင့်နှေးဆန္ဒပြည့်တူသောအရာအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုစဉ်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အရေးပါသောနောက်ဆုံးအဆင့်ပြီးပါကဖြစ်ပါတယ်ကာဇီ et al ။ 2000; Steinberg et al ။ 2008; Astle နှင့် Scerif 2009) နှင့်ဆုလာဘ်များနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့အဆုံးမှာနောက်ဆုံးတော့ရင့်ကျက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်လှုံ့ဆော်မှုရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ (Ernst et al ။ 2006; Ernst နှင့် Mueller 2008; Ernst နှင့် Fudge 2009) ။ အဆိုပါ dopaminergic စနစ်ဖြင့်နှင့်အပြုအမူတားစီးကြောင်း cortical ဆားကစ်၏ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ကျက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်စွဲအားနည်းချက်များအတွက်အထူးသဖြင့်ဝေဖန်ကြသည်။ လူသားတွေအတွက် imaging လေ့လာမှုများ (အပြုအမူထိန်းညှိပေးသောတိုကျရိုကျ cortex ဆားကစ်လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နုကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်, ဆုချဖို့ပိုပြီးထိခိုက်မခံတဲ့ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုမှလျော့နည်းထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်မှုတားစီးဖို့လျော့နည်းနိုင်မည်အကြောင်းအကြံပြုအမှုထမ်းများနှင့် Boettiger 2009; Geier နှင့် Luna 2009) ။ Impulse နှင့်အာရုံခံစားမှုရှာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းမြင့် (လှံကို 2000; Steinberg et al ။ 2008) ။ ထိုအမူအကျင့်စရိုက်များသို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်မူးယစ်ဆေးမှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအန္တရာယ်အချက်များအဖြစ် "neurobehavioral disinhibition" ကဲ့သို့ဆက်စပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Construction, (မှတစ်ဦးကသိသိသာသာစာပေအချက်များDawes et al ။ 2000; သင်္ဘောသား et al ။ 2007; Everitt et al ။ 2008; ပယ်ရီနှင့်ကာရိုး 2008; အမှုထမ်းများနှင့် Boettiger 2009; Volkow et al ။ 2009) ။ အကျဉ်းချုပ်မှာတော့ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ပြည်နယ်အများအပြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများအတွက်အန္တရာယ်မှာမြီးကောင်ပေါက်နေရာဖြစ်နိုင်သည်: သူတို့လူကြီးများ, သူတို့ကအတော်လေးလျှော့စျေးအနာဂတ်ရလဒ်များမှဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုဆွေမျိုးထက်ပိုလှုံ့ဆော်မှုဆုချီးတုံ့ပြန်စေခြင်းငှါ, သူတို့အာရုံရှာကြံနှင့်ထကြွလွယ်သောနေကြသည်။ ဒီဧရိယာထဲမှာအများအပြားအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သုံးသပ်ချက်များ (ရှိပါတယ်သင်္ဘောသား et al ။ 2007; ဘရောင်း et al ။ 2008; Windle et al ။ 2008).
ကြွက်များတွင်စွဲများအတွက် Developmental ယုဂ်အဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်
ကြွက်များတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (PN25 စောစောလူကြီးဖို့ postnatal နေ့က (PN) 60 ကနေအထိချဲ့လှံကို 2000) ။ ဤအချိန်ဘောင်လည်းပါဝင်သည်ပေမယ် pubertal ဖွံ့ဖြိုးမှုကန့်သတ်မထားပါ။ လူသားမြားသကဲ့သို့ပင်, ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအချိန်ကိုဘောင်၏အဆုံးတိုင်အောင်အဆက်နှင့် PN60 အရွယ်ရောက်ပြီးသူကဦးနှောက် function ကိုရှိကွောငျးအစောဆုံးအချိန်အဖြစ်ရှုမြင်ထားရမည်, ထိုသို့နောက်ဆုံးပေါ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲလုပ်ငန်းဆောင်တာဒီလိုမင်းထက် cutoff (အပြီးတွင်အတန်ငယ်ရင့်ကျက်ကြောင်းဖွယ်ရှိသည်ဆန်နှင့် Baron 2000; McCutcheon နှင့် Marinelli 2009).
အမူအကျင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ်စာပေလျော့နည်းပေါများပေမဲ့သင့်လျော်သော postnatal အသက်အရွယ်စဉ်းစားသည်အခါ, အလားတူအပြုအမူဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းကြွက်နှင့်လူသားကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့သညျလူသားတို့အတွက်ဖြစ်သကဲ့သို့အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်အာရုံခံစားမှုရှာ (ကြွက်များတွင်မြင့်လှံကို 2000; Laviola et al ။ 2003) ။ တစ်ဦးကသေးငယ်ပေမယ့်ထွန်းသစ်စတိရိစ္ဆာန်စာပေမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှု (ကျော်ကြိုး၏တူညီသောကြီးစိုးထောက်ခံပါသည်Laviola et al ။ 2003; Schramm-Sapyta et al ။ 2009) ။ ဤအဖြစ်စဉ်များ၏ဘုံကြွက်မော်ဒယ်များစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းဦးနှောက်ကိုယန္တရားများရှာဖွေစူးစမ်းများအတွက်အသုံးဝင်သော tool ကိုပေးနိုငျကွောငျးကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပြင်းထန်စွာပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်းတော်တော်များများအပြုအမူတွေကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွား။ မြီးကောင်ပေါက်ဖြစ်နိုင်သည်အားဖြည့်ဖို့ပိုပြီးထိခိုက်မခံတဲ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အနာဂတ်ရလဒ်များအပေါ် အခြေခံ. တုံ့ပြန်မှုတားစီးဖို့လျော့နည်းစွမ်းရည်ကိုပြသအဖြစ်အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့ဆုလာဘ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဆားကစ်အဖြစ်အပြုအမူတားစီးကြောင်းအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိန်းချုပ်သောသူတို့စွဲဖို့ဆယ်ကျော်သက်အားနည်းချက်မှအများဆုံးသက်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်သည်။
တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များလူသားများတွင်စမ်းသပ်လေ့လာမှုများ Ethics impermissible ဖြစ်သကဲ့သို့, စွဲ-related အပြုအမူတွေကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းပြောင်းလဲသွားပုံကိုသို့အရေးပါထိုးထွင်းသိမြင်သည်နှင့်သဘာဝလေ့လာမှုများအလေးအနက်ထားပစ္စုပ္ပန်၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ကြောင်းတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုအပ်ကြောင်း, လူမှုစီးပွားရေးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မျိုးရိုးဗီဇရှုပ်ထွေးနေဖြင့်အရှက်ကွဲလျက် ပြန်လည်သုံးသပ်။ ဒီလေ့လာမှုတွေများ၏အများစုကြွက်များတွင်ကောက်ယူခံပြီ ဒီလေ့လာမှုတွေကိုအောက်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မည်။
မြီးကောင်ပေါက်ရင့်ကျက်အဖြစ်အများအပြားစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဝိသေသအမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများကိုပြောင်းလဲရန်, နှင့်အပြောင်းအလဲများယေဘုယျအားပေးထားသောအပြုအမူများအတွက်မူးယစ်ဆေးဖြတ်ပြီးတသမတ်တည်းဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီး locomotor တုံ့ပြန်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုအတန်ငယ်မူးယစ်ဆေးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိပါတယ်အဖြစ်တဦးတည်းချွင်းချက်, locomotor လှုပ်ရှားမှုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေ Schramm-Sapyta (နေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည်Schramm-Sapyta et al ။ 2009) ။ ကိုကင်းများက locomotor ဆွလူကြီးထက်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း သာ. ကြီးမြတ်သည်နေချိန်မှာဖက်တမင်းဆေးပြားနှင့်စိတ်ကြွဆေး, လူကြီးများထက်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်အတွက်လျော့နည်းရွေ့လျားလှုံ့ဆော်ခြင်း။ နီကိုတင်းလေ့လာမှုအောက်တွင်ဆေးထိုးသို့မဟုတ်မျိုးစိတ်ပေါ် မူတည်. တစ်ဦးကြီးထွားတိကျတဲ့လမ်းအတွက်ရွေ့လျားလျော့သို့မဟုတ်တိုးမြှင့်ဖို့သတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ (ကြွက်နီကိုတင်းကုသမှုအနေဖြင့်ရွေ့လျားရလဒ်အတွက်လျော့နည်းစေ, ဤကျဆင်းခြင်းမြီးကောင်ပေါက်အတွက်လျော့နည်းလိုပက်ဇ် et al ။ 2003) ။ ကြွက်များတွင်နီကိုတင်းရွေ့လျားတိုးမြှင့်ဖို့ကဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်မြီးကောင်ပေါက် (ကပိုထက်ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းအထိခိုက်မခံများမှာဖြစ်ပါတယ်Faraday et al ။ 2001).
အစောပိုင်းစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုကာလအတွင်း neuroplastic ဖြစ်ရပ်များကိုထင်ဟပ်ဖို့ထင်သော Locomotor sensitive ကတဖြည်းဖြည်းစိတ်ကြွဆေး, ကိုကင်းသို့မဟုတ် methylphenidate နှင့်အတူကုသမှုပြီးနောက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးတိုးပွါး: ာင်းကုသ perinatal ကာလအတွင်းစတင်သောအခါနိမ့်သည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပိုပြီးကြံ့ခိုင်ဖြစ်လာပေမယ်အတွက် သာ. ကြီးမြတ်သည် မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ထက်လူကြီး (Kolta et al ။ 1990; McDougall et al ။ 1994; Ujike et al ။ 1995; Bowman et al ။ 1997; Laviola et al ။ 1999; Tirelli et al ။ 2003; Frantz et al ။ 2007) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းလူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆယ်ကျော်သက်အတွက်ပိုကောင်း Single-ထိုးာင်းလေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်အဖြစ်တစ်ခုမှာခြွင်းချက် (တစ်ခုတည်းမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုကအောက်ပါာင်းဖြစ်နိုင်သည်Caster et al ။ 2007) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားများထက်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးအတွက်နှစ်ဦးစလုံး သာ. ကြီးမြတ်ခဲ့ကြလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးဖို့ပေမယ့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကြွက်များ၏ကုသမှုကိုထုတ်လုပ်နီကိုတင်းာင်း (အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ကုသမှုပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိထက်လျော့နည်းCollins နှင့် Izenwasser 2004; Collins et al ။ 2004; Cruz et al ။ 2005; McQuown et al ။ 2009).
နီကိုတင်း, ကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးအပါအဝင်အများဆုံးစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းတိုးမြှင့်နေသည်Vastola et al ။ 2002; Belluzzi et al ။ 2004; Badanich et al ။ 2006; Kota et al ။ 2007; တောရက်စ် et al ။ 2008; Brenhouse နှင့် Andersen က 2008a; Schramm-Sapyta et al ။ 2009; Shram နှင့် Le 2009; Zakharova et al ။ 2009) ပဋိပက္ခဖြစ်တွေ့ရှိချက်ကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအအစီရင်ခံခဲ့ကြပေမယ့် (Adriani နှင့် Laviola 2003; Tirelli et al ။ 2003; Schramm-Sapyta et al ။ 2004) ။ ပဋိပက္ခဖြစ်ဒေတာ (ကြွက်နှင့်ကြွက်များတွင်အီသနောချင်းတိုးတက်ရေးပါတီများအတွက်တည်ရှိPhilpot et al ။ 2003; Dickinson et al ။ 2009) နှင့် cannabinoid agonist WIN5512-2 (ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များထက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်အနိမ့်ဆေးများမှာ CPP ကဖြစ်ပေါ်စေသည်Pandolfo et al ။ 2009) ။ ာင်းလူကြီးများအဖြစ်ကုသများထက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် psychostimulants နှင့်အတူအထပ်ထပ်ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လျော့နည်းနေချိန်တွင်အချုပ်ထဲမှာ, CPP ကလူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ပိုမိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားမတူကွဲပြားရလဒ်များကိုယခင်ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများနေစဉ်အဆုံးစွန်သောလူကြီးများမှဆွေမျိုးလျော့စေခြင်းငှါမြီးကောင်ပေါက်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်ခြင်းနှင့် neuroplastic သက်ရောက်မှုနှစ်မျိုးလုံးကိုတွေ့ကြုံခံစားကြောင်းအကြံပြုပေမယ့်။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်အများဆုံးစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏တိုးမြှင့်အားဖြည့်ဆိုးကျိုးများကြောင့်အထက်အစီရင်ခံဆုချဖို့တိုးမြှင့်တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ကိုက်ညီဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုလုံးလူသားများနှင့်ကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်။
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စွဲတာဝန်ယူမှုကိုအကဲဖြတ်များအတွက်စံ Self-အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအတွက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးစတင်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်ရသောတိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအချို့သောဆေးဝါးများတသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်လြှော့, ဒါပေမယ့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်ဆနျ့ကငျြတွေ့ရှိချက်ပါပြီ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အီသနော၏မိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူ (ဆယ်ကျော်သက်အတွက်တသမတ်တည်းပိုမြန်ခေါင်းလောင်း et al ။ 2003; Brunell နှင့်လှံ 2005; Doremus et al ။ 2005; ခေါင်းလောင်း et al ။ 2006; Vetter et al ။ 2007) ။ နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိုမိုမြန်ဆန်ဝယ်ယူလူကြီးများ (အဖြစ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုစတင်ကြောင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြီးကောင်ပေါက်အစီရင်ခံထားသည်ချန် et al ။ 2007; Levin et al ။ 2007) နှင့်ဆယ်ကျော်သက်ပေမယ့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမဟုတ်ကြွက်ဆန္ဒအလျောက် (နီကိုတင်းပါဝင်သောဖြေရှင်းချက်သောက်ကြလိမ့်မည်Adriani et al ။ 2002) ။ သို့သျောလညျး, (တောင်းဆိုနေတာအားဖြည့်အချိန်ဇယားအပေါ်လူကြီးများထက် Self-စီမံခန့်ခွဲလျော့နည်းနီကိုတင်း adolescents နှင့်လူကြီးများထက်ပိုမြန်သုဉ်းခြင်းနှင့်လျော့နည်း relapse ပြသShram et al ။ 2008; Shram et al ။ 2008) ။ မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအတွက်နီကိုတင်းမိမိကိုယ်ကို -administration ၏အစီရင်ခံစာများတွင်ဤရှေ့နောက်မညီအချို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်မှာဆုလာဘ်များနှင့်ဆုတ်ခွာ၏ဆွေမျိုးအရေးပါမှုကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။ မြီးကောင်ပေါက် (အထကျကိုကြည့်ပါ) နီကိုတင်း၏အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုထိခိုက်မခံတဲ့ဖြစ်လေ့နေစဉ်, သူတို့ (လျော့နည်းသိသာမှီခိုပြလေ့O'Dell et al ။ 2004; O'Dell et al ။ 2006; Wilmouth နှင့်လှံ 2006; O'Dell et al ။ 2007; Shram et al ။ 2008) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကင်း၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူတွေ့ရှိချက်အရှိဆုံး equivocal ခဲ့ကြပြီ။ Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိုမိုမြန်ဆန်ဝယ်ယူအနိမ့် saccharin preference ကိုအတူတိရစ္ဆာန်များအဘို့အနည်းဆုံးလေ့လာတွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်သော်လည်း (ပယ်ရီ et al ။ 2007), အခြားလေ့လာမှုများတည်ငြိမ် Self-အုပ်ချုပ်ရေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့မဟုတ်လူကြီး (ကာလအတွင်းစတင်ရှိမရှိအပေါ်အခြေခံပြီးကွဲပြားပါဘူးကြောင်းပြသကြFrantz et al ။ 2007; Kantak et al ။ 2007; Kerstetter နှင့် Kantak 2007; လီများနှင့် Frantz 2009) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေအများစုဟာ (တင်းမာမှု regimen အားဖြင့်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း compulsive နှင့်တင်းမာမှုလျှော့ချဖို့ key ကိုအကူးအပြောင်းမှုအတွက်စမ်းသပ်ရန်မထားတဲ့ရိုးရာ fixed-အချိုးအချိန်ဇယား employVanderschuren နှင့် Everitt 2004) ။ ယေဘုယျအားဖြင့်စာပေမြီးကောင်ပေါက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများပိုမိုထိခိုက်မခံမည်အကြောင်းအကြံပြု, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမဒေတာမြီးကောင်ပေါက်ပိုမြန်လူကြီးများထက် compulsive အသုံးပြုမှုကိုမှအသုံးပြုခြင်းနှင့်တိုးတက်မှုအရှိန်မြင့်လာတယ်ရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့သေးတည်ရှိ။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စဉ်အတွင်း Forebrain Dopaminergic ရာထူးအမည်၏ရင့်ကျက်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအားဖြည့်အတွက် dopaminergic အာရုံခံ၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအစပျိုးသောအရေးကြီးသော pubertal ဖြစ်ရပ်များအပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်း dopaminergic အာရုံခံအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအားနည်းချက်တစ်ခုသော့ချက်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အထက်တွင်ကိုးကားအဆိုပါလေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးများအပါအဝင်စစ်ကူအားဖြင့် dopaminergic အာရုံခံ၏ activation လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း သာ. ကြီးဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ လာမယ့်အပိုင်းမှာတော့ကျနော်တို့ dopaminergic အာရုံခံခြင်းနှင့် dopaminergic function ကိုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုများပေါ်ပေါက်လာအကြောင်းကိုလက်ရှိအသစ်သောအချက်အလက်များ၏ ontogeny အကြောင်းကိုလူသိများသည်အဘယ်အရာကိုပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဖြစ်သည်။
လူသားတွေဟာအတွက် Forebrain Dopaminergic ရာထူးအမည်၏ရင့်ကျက်
non-လူ့မျောက်နှင့်လူ့ dopaminergic စနစ်များအလားတူဖွံ့ဖြိုး။ ရုံ Non-လူ့မျောက်ဝံများ (ခုနှစ်တွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်ကျဆုံးမီ Dopamine အကြောင်းအရာ, tyrosine hydroxylase နှင့်အထွတ်အထိပ်မှတိုကျရိုကျ cortex မြင့်တက်၏ dopaminergic innervation ၏ခန္ဓာဗေဒအစီအမံGoldman-Rakic ​​နှင့်ဘရောင်း 1982; Rosenberg ကနှင့် Lewis က 1994; Rosenberg ကနှင့် Lewis က 1995; နိုင်ကြောင်း et al ။ 1998) ။ လူသားတွေအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှတဆင့် Striatal dopamine အကြောင်းအရာတိုး (Haycock et al ။ 2003) ပဲမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့အစမှာ tyrosine hydroxylase, အ vesicular Transporter (VMAT2) နှင့် plasma အမြှေးပါး Transporter (DAT) အထွတ်အထိပ်အပါအဝင်ပေမယ့်အခြားအ Synaptic အမှတ်အသားများ (Meng et al ။ 1999; Haycock et al ။ 2003).
dopaminergic ဂီယာများအတွက် neurochemical "စက်ယန္တရား" ၏ပေမယ့်ရှိသမျှတို့, မကြာမီကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းသိသိသာသာ dopaminergic function ကိုပြောင်းလဲမှု၏ညွှန်းကိန်းတစ်ခုအရေအတွက်ကိုလက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကညွှန်းကိန်းနှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်မှတစ်ဦးကျဆုံးသဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အစောပိုင်းလူကြီးကာလအတွင်းထုတ်ဖော်အထွတ်အထိပ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိဖို့။ postsynaptic receptors အတွက်အပြောင်းအလဲများအများဆုံးနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဖော်ပြထားပါပြီ။ အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် D1 နှင့် D2 receptors ၏ Overexpression နှင့်နောက်ဆက်တွဲ လျှောက်လျော့နည်း မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအများအပြားလေ့လာမှုများ (အစီရင်ခံခဲ့ကြMeng et al ။ 1999; Seeman 1999) ။ လူသားများတွင်တစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (စဉ်အတွင်း presynaptic အမှတ်အသားများ၏အလားတူအရှုံးပြသHaycock et al ။ 2003).
ကြွက်များတွင် Forebrain Dopaminergic ရာထူးအမည်၏ရင့်ကျက်
dopaminergic အာရုံခံ၏ ontogeny ကြွက်များတွင် forebrain Non-လူ့မျောက်ဝံများနှင့်လူသားများအတွက်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်ဖို့အတော်လေးဆင်တူသည် innervating ။ နောက်ဆုံးမှာကြွက်များတွင် dorsal နှင့် ventral striatum နှင့်တိုကျရိုကျ cortex innervate ရာ Dopaminergic အာရုံခံ (Mid-ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်း၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးဌာနခွဲခံယူLauder ကနှင့် Bloom 1974) ။ dopaminergic အာရုံခံအားလုံးသည်မော်လီကျူးအမှတ်အသားများမမွေးခင်သိသိသာသာအဆင့်ဆင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပေမယ် forebrain ၏ dopamine innervation ၏ပေါက်ကွဲကြီးထွားကြွက်များတွင်မွေးဖွားပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ dopamine အကြောင်းအရာ, tyrosine hydroxylase အပါအဝင် PN5 PN40 မှအများစုအမှတ်အသားများ မှစ. D1 နှင့် D2 receptors နှင့် dopamine Transporter ဎ, striatum အတွက်သိသိသာသာတိုးမြှင့်။ accumbens နှင့်တိုကျရိုကျ cortex (ကွိုင်းနှင့် Axelrod 1972; Porcher နှင့် Heller 1972; Nomura et al ။ 1976; Kirksey နှင့် Slotkin 1979; Giorgi et al ။ 1987; Gelbard et al ။ 1989; Broaddus နှင့် Bennett က 1990; Broaddus နှင့် Bennett က 1990; Rao က et al ။ 1991; Coulter et al ။ 1997; Tarazi et al ။ 1999) ။ ဤအ dopaminergic အမှတ်အသားများ၏အားလုံးအတွက်တစ်ဦးကသိသိသာသာမြင့်တက်လာမယ့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မတိုင်မီ postnatally နှစ်ခုမှသုံးပတ်ကြာအကြားဖြစ်ပေါ်, ဒါပေမယ့်ရငျ့ကအနည်းဆုံး PN60 သည်အထိဆက်လက်။ ကြွက်များတွင်တိုကျရိုကျ cortex innervation (အားလုံးနီးပါး dopaminergic innervation PN60 အားဖြင့် postnatally ရောက်ရှိလာနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်ရရှိအတူအနည်းငယ်ပိုပြီး caudal ဒေသများ၏နောက်ကွယ်မှကျန်ရစ်Kalsbeek et al ။ 1988).
ကြောင်းသညျလူသားတို့အစီရင်ခံတူသောကြွက်များတွင် Dopamine receptors (ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုတံစဉ်များကိုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်တစ်ဦးမြင့်တက်ခံယူHuttenlocher 1979; Giorgi et al ။ 1987; Gelbard et al ။ 1989; Teicher et al ။ 1995; ဂူ et al ။ 1999; Tarazi et al ။ 1999; Andersen က et al ။ 2000; Tarazi နှင့် Baldessarini 2000; Andersen က et al ။ 2002) ။ presynaptic အမှတ်အသားများ၏တခုတ်တရတံစဉ်များကိုကျဉ်းမြောင်းတဲ့ပြတင်းပေါက် (မသုံးကွောငျးတစျခုကြွက်လေ့လာမှုမှာလေ့လာတွေ့ရှိမခံခဲ့ရပေမယ့်Tarazi et al ။ 1998) ဤလေ့လာမှုများ (GBR12935) တွင်အသုံးပြုသည့် radioligand WIN 35,428, စည်းနှောင်ခြင်းနှင့်လွန်ကဲတားစီးအကြားပိုကောင်းတဲ့ဆက်စပ်မှုကိုပြသသော radioligand (ထက် DAT တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောလမ်းအတွက်ချည်နှောင်Xu et al ။ 1995) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကလူကြီးမှနို့ကနေဝေဖန်ဆက်သွယ်မှု၏ pruning အပြုအမူအပြောင်းအလဲများအတွက်အခန်းကဏ္ဍနိုင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်လျှောက်လုံးဖြစ်ပေါ်ကြောင်း innervation သိပ်သည်းဆအတွက်အစီရင်ခံတိုး Parallel ။ voltammetry သို့မဟုတ် microdialysis ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် Basal extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်လူကြီးထက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းအနိမ့်များမှာ (Gazzara et al ။ 1986; Stamford 1989; Andersen ကနှင့် Gazzara 1993; Laviola et al ။ 2001).
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စဉ်အတွင်း Forebrain Dopaminergic အာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်ချက်
ယခင်ဖော်ပြချက်ပြန်တိရိစ္ဆာန်များအပြည့်အဝအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်လာအဖြစ်အချို့သော "တံစဉ်များကို '' အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, အကြာတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့ဖြစ်လာ, forebrain ပစ်မှတ်၏ dopaminergic innervation အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်လစ်လပ်သောအထင်အမြင်ပေးပါသည်။ သို့သော် dopaminergic အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှု၏အတိုင်းအတာသည်ဤအာရုံခံဤအချိန်ဘောင်အတွင်းမှာအလွန်အမင်းတက်ကြွဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ functional လေ့လာမှုများအခြိနျအကြောင်းကိုလှုံ့ဆော်-သွေးဆောင်အမူအကျင့်ကို Activation ထိပ်မှာ, dopaminergic အာရုံခံအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း function ကိုနီးပါးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်အောင်မြင်ရန်ဖော်ပြသည်။ Dopaminergic အာရုံခံ (ကိုယ့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မတိုင်မှီသို့မဟုတ်စဉ်အတွင်း autoreceptor function ကိုနှင့်ပစ်ခတ်ရန်၏စိမ်းဖြင့်ပုံစံအပါအဝင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပစ်ခတ်ရန်ပုံစံများမှီPitt et al ။ 1990; Tepper et al ။ 1990; လင်းနှင့် Walters က 1994; ဝမ်နှင့် Pitt 1995; Marinelli et al ။ 2006; McCutcheon နှင့် Marinelli 2009) ။ Microdialysis နှင့် neurotransmitter လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်လေ့လာမှုများ (axon transection, gamma hydroxybutyrate နှင့် psychomotor စိတ်ကြွဆေးကောင်းစွာနို့မတိုင်မီ dopaminergic အာရုံခံကိုသက်ဝင်နိုင်သောပြခဲ့ကြErinoff နှင့် Heller 1978; Cheronis et al ။ 1979) ။ အဆိုပါပစ်ခတ်မှုနှုန်းကလျော့နည်း autoreceptor တားစီးနေဖြင့်စဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ကောင်းသောကွောငျ့, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းပိုမိုမြင့်မားကြောင်း dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်ပြပွဲ၏လူပျိုယူနစ်လေ့လာမှုများ (Marinelli et al ။ 2006) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်း (ထိုကင်း-သွေးဆောင် dopamine လျတ် (terminal ကိုစတိုးဆိုင်များထင်ဟပ်) ကိုအကျယ်ချဲ့ dopamine လွှတ်ပေးရန်သိသိသာသာလျော့နည်းသော်လည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များထက်ဆယ်ကျော်သက်အတွက် dorsal striatum အတွက် သာ. ကြီးမြတ်သည်ကိုပြသထားပါတယ်Walker ကနှင့် Kuhn 2008) ။ HVA / DA အချိုး၏အစဉ်အလာလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်အတိုင်းအတာကိုလည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များထက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုသိသိသာသာမြင့်မား (ကြည့်ရှု ပုံ 1) ။ အလားတူတွေ့ရှိချက် 18, 30 နှိုင်းယှဉ်ကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုအစီရင်ခံခြင်းနှင့် 110 နေ့ကအဟောင်းကြွက် (ပါပြီTeicher et al ။ 1993) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာအားလုံးစွဲဖို့သက်ဆိုင်ရာပစ်မှတ် forebrain မှပရောဂျက်တစ်ခုကို dopaminergic အာရုံခံ innervation ၏ပြီးပြည့်စုံသော, အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်ရှိသည်မဟုတ်စေခြင်းငှါအကြံပြုပေမယ့်ဘာမှအာရုံခံသွင်းအားစုဖို့ပိုတုံ့ပြန်မှုများမှာပါ။
HVA: ကြွက်များတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီး dorsal striatum တွင် DA အချိုးအစား။ N ကို = 10-12 / အုပ်စုတစ်စု။ ANOVA အသက်၏သိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက် P <.01 ဖော်ပြသည်။ ဦး နှောက်နယ်မြေများကိုအေးခဲစေပြီး DA နှင့် metabolites များကို HPLC မှအကဲဖြတ်သည်။
အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် dopaminergic အာရုံခံ၏ Enhanced တက်ကြွစွာနှောက် cortex innervate သော dopaminergic အာရုံခံမှတိုးချဲ့မည်မဟုတ်ပါ။ ကြွက်ဦးနှောက်အချပ်အတွက်လေ့လာမှုတစ်ခုကြော့စီးရီး D1 excitatory နှင့် interneuron function ကိုအပေါ် D2 inhibitory လွှမ်းမိုးမှုနှစ်ဦးစလုံး (အထကျဖျောပွထားကြောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုး၏တူညီသောအဆင့်စဉ်အတွင်း cortex အတွက်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြကြောင်းပြသTseng နှင့် O'Donnell ၂၀၀၅; Tseng နှင့် O'Donnell ၂၀၀၅) ။ သို့သော်ဤလေ့လာမှုများတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမော်ဒယ်စနစ်ကအလုပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်အဆုံးမှတ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း dorsal သို့မဟုတ် ventral striatum အတွက်အကဲဖြတ်ကြပြီမဟုတ်။ ဒါဟာ cortical dopaminergic သွင်းအားစုအတွက် striatal သွင်းအားစုထက်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောအရှိန်အဟုန်မှာရင့်ကျက်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။
အပိုင်း 3: ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များတွင်လိင်, Gonadal Steroid တစ်မျိုးနဲ့စွဲ
လူသားမြားသဖွငျ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပေါ်လာပါသည်။ အမျိုးသမီးများနှင့်မြင့်မားသောဤတွေ့ရှိချက်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးသည်အခြားအချက်များများအတွက်လူမှုရေးအခန်းကဏ္ဍပြောင်းလဲနေတဲ့လွှမ်းမိုးမှုသို့သော်မျိုးဆက်ဆောင်များတွင်ဆိုးကျိုးများ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်စတင်နီးပါးယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ (အတွင်းဂိုးထားပါတယ်Johnston et al ။ 2007; NHSDUH 2007) ။ Young ကဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီး, အရက်မသောက်ရမှအဖြစ်များပါတယ်ဆေးခြောက်နှင့်အခြားတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသုံးပါနှင့်အမျှငယ်ရွယ်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေး (မျိုးစုံကိုမူးယစ်ဆေးဝါးများသုံးစွဲဖို့Johnston et al ။ 2007; NHSDUH 2007; Palmer က et al ။ 2009) ။ ဆေးရွက်ကြီး, အရက်, ဆေးခြောက်နှင့်အခြားတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုမှုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက်အပြိုင်လမ်းအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီး linearly တိုးပွားစေပါသည်။ အထီးမီးခိုးမှမှီခိုနှင့်အမျိုးသမီးအရက် (be မှအနည်းငယ်ပိုများပါတယ်အခါသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု, အကြာတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ပေါ်ထွက်လာလူငယ်တို့ et al ။ 2002; Cropsey et al ။ 2008) ။ အသက်ကြီးသောဆယ်ကျော်သက်များပါ ၀ င်သည့်အခြားလေ့လာမှုများအရယောက်ျားများသည်ဆေးခြောက်နှင့်အခြားတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည်အမျိုးသမီးများထက်များနေသည် (တယ်ရီ-McElrath et al ။ 2008အလိုက်ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်အချို့လေ့လာမှုများအတွက်ပေမယ့်), ဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်းများကဲ့သို့ပင် "ခက်" မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း (ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက်နှိုင်းယှဉ်များမှာGerra et al ။ 2004) ။ ယေဘုယျအားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်နှစ်ခုအဓိကလိင်ကွဲပြားမှု (အမျိုးသမီးအတွက်အလွဲသုံးစားယောက်ျားနှင့်အသုံးပြုမှုကနေတိုးတက်မှု၏ "တယ်လီစကုပ်" ကပိုပြီးမကြာခဏမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့အဆုံးအားဖြင့်ပေါ်လာ (Nolen-Hoeksema 2004; Ridenour et al ။ 2006).
အပျိုဖော်ဝင်စအပေါ်သို့ superimposed နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကဤဤအပိုင်း၌စည်းဝေးဆွေးနွေးကြလိမ့်မည်ဟုလူသားတွေအတွက်လေ့လာမှုများ, အတူဒါ Concorde ဖြစ်ကြသည်။ လူသားမြားသညျတှငျ, pubertal ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ဦးချင်းစီ၏တိုင်းရင်းသားနောက်ခံ, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ်မူတည်ပြီးကျယ်ပြန့်အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားအတွင်းဖြစ်ပေါ်ပေမယ့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးကမ္ဘာမှာအတွက်မိန်းကလေးငယ်များယေဘုယျအားဖြင့်အသက်အရွယ် 14-15 (သူတို့ menstruating ကြသောအခါ) နှင့်ယောက်ျားလေးများအားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ estradiol နှင့်အဓိကချို့ယွင်းအဆင့်ဆင့်မှီ အသက်အရွယ် 16-17 (အသုံးပြုပုံတစ်နှစ်အကြာတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုမှီStyne နှင့် Grumbach 2008) ။ အထီး PN35 အကြောင်းကိုသည်အထိ PN25 ထံမှ testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခုကှနျ့တိုးတွေ့ကြုံခံစားနေချိန်မှာသူတို့က, သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံး estrus တွေ့ကြုံခံစားလာသောအခါအလားတူပင်ကြွက်များတွင်အမျိုးသမီးအကြောင်းကို postnatal နေ့က PN60 အားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသိသိ gonadal Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းပမာဏရှိသည်။ ဒီအသက်အရွယ်မှာအပျိုဖော်ဝင်လေ့လာခြင်းနှင့်တိရိစ္ဆာန်များနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်ပြည့်စုံ၏ (မျိုးပွားမှုရင့်ကျက်များမှာLee က et al ။ 1975; Korenbrot et al ။ 1977; Ojeda et al ။ 1980; Ojeda et al ။ 1986).
gonadal steroids ၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အဖွဲ့အစည်းသက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံးအပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုပြောင်းလဲဖို့သိသိသာသာအထောက်အကူဖြစ်စေ။ အပျိုဖော်ဝင်စစဉ်အတွင်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းနှစ်ဦးစလုံးထို့နောက်တစ်ဦးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအခြေခံပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်ကိုထိန်းညှိပေးသောမျိုးဆက်ပွားဟော်မုန်း၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်မှီ: ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်တစ်ဦးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောနှင့် Reversible လုပ်ဖက်ရှင်အတွက်ဦးနှောက် function ကိုထိန်းညှိပေးသော gonadal steroids ၏လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်သက်ရောက်မှုများပေးစွမ်းသည်။ သို့သော်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမဦးနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်း gonadal steroids ၏မြင့်တက်နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ဖြစ်စဉ်များထွက်လာပါတယ်အားဖြင့်ဦးနှောက်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများပြီးစီးမှအထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်ကြီးထွားလာနျဖိုးထားလည်းမရှိ - gonadal steroids ၏စည်းရုံးရေးသက်ရောက်မှု (ကှတျချ et al ။ 1998; Becker က et al ။ 2005; Schulz et al ။ 2009).
အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းပေါ်ထွက်လာကြောင်းဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာလိင် dimorphisms လည်း gonadal steroids ကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်။ တကယ်တော့လူ့ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံပင်ကလေးမွေးဖွားမှာလိင် dimorphic ဖြစ်ပါတယ် (Gilmore et al ။ 2007) နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်အပြောင်းအလဲ၏လမ်းကြောင်းကောင်းစွာအပျိုဖော်ဝင်မတိုင်မီမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသည်။ မိန်းကလေးများ (ယောက်ျားလေးများမတိုင်မီအထွတ်အထိပ်မီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆ 1-2 နှစ်ပေါင်းမှီGiedd et al ။ 2006) ။ ဒါကလမ်းကြောင်းနောက်ထပ် (pubertal ဇာတ်စင်ကလွှမ်းမိုးနေသည်de ဝမ်း et al ။ 2001) ။ amygdala နှင့် hippocampus အပါအဝင်တချို့ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်အပြောင်းအလဲများကို pubertal ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏စင်မြင့်ကိုထင်ဟပ်ခြင်းနှင့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအပြောင်းအလဲများကို (ယောက်ျားလေးများအတွက်မိန်းကလေးများနှင့် testosterone ဟော်မုန်းအတွက် estradiol ပျံ့နှံ့နေတဲ့အပေါ်မူတည်Peper et al ။ 2009) ။ ကြွက်များတွင်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphisms ကောင်းစွာဖော်ပြထားနှင့်ကောင်းစွာပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်များမှာပါပြီ။ အများအပြားကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သုံးသပ်ချက်များ (တည်ရှိMacLusky နှင့် Naftolin 1981; ကှတျချ et al ။ 1998; မောရစ် et al ။ 2004; Ahmed က et al ။ 2008).
အပျိုဖော်ဝင်စစဉ်အတွင်း gonadal ဟော်မုန်း၏တိုးမြှင့်လျှို့ဝှက်ချက်အပြုအမူရငျ့အဖြစ်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုအထောက်အကူပြု။ အမျိုးသမီးမှာတော့ estradiol နှင့်အဓိကချို့ယွင်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက် pubertal တိုးအမျိုးသမီးအပြုအမူတွေကိုအပြည့်အဝအဖြည့်များ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်အဘို့နှင့်ယောက်ျားပေါင်းအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည် testosterone ဟော်မုန်း၏မွှေးကြိုင်ထံမှဖွဲ့စည်းခဲ့ Testosterone နဲ့ estradiol နှစ်ဦးစလုံးသက်ရောက်မှု activational နှင့်အဖွဲ့အစည်းကိုအထောက်အကူပြု။ gonadal steroids အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းမျိုးဆက်ပွား function ကိုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမည်သို့အတော်ကြာမကြာသေးမီပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းထုတ်ဝေခဲ့ကြ (Romeo et al ။ 2002; Romeo 2003; Sisk et al ။ 2003; Sisk နှင့် Zehr 2005; Schulz နှင့် Sisk 2006) ။ Testicular နှင့်သားအိမ် steroids အဆိုပါ sex- သင့်လျော်သောလူမှုရေးအပြုအမူ, ကျူးကျော်, မိဘအပြုအမူများစတင်ခြင်းအဖြစ်မျိုးပွားအပြုအမူတွေကိုခွင့်ပြု။ ဤအအချက်အလက်များ၏အများစုကြွက်, ကြွက်နှင့်ကြွက်များတွင်စုဆောင်းခဲ့ကြပေမယ့်အလားတူတွေ့ရှိချက်အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ် ပတျသကျ. အပျိုဖော်ဝင် ((တွေ့ကြုံခံစားသောသူသညျလူသားတို့အစီရင်ခံခဲ့ကြSisk နှင့် Zehr 2005).
စွဲဖို့သက်ဆိုင်ရာသောအပြုအမူအတွက်ကျားမကွဲပြားမှုလည်း (အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းပေါ်ထွက်လာWindle et al ။ 2008) ။ Sensation ရှာ (ပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့်မကြာခဏပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်အမျိုးသမီးတွေထက်အမျိုးသားများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်Butkovic နှင့် Bratko 2003; Nolen-Hoeksema 2004) ။ Sensation ရှာ (အနေနဲ့အစောပိုင်းက pubertal ဇာတ်စင်မှာအလားတူ-အသက်ကလေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်နှစ်လယ်ပိုင်း / နှောင်းပိုင်းတွင်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်Quevedo et al ။ 2009) ။ ထို့အပွငျ pubertal ဟော်မုန်းပမာဏကဤဖြစ်ရပ်များကိုအထောက်အကူဖြစ်စေ။ testosterone အပြုသဘော (နှစ်ဦးစလုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားအတွက်အာရုံခံစားမှု-ရှာဆက်နွယ်နေကြောင်းသိရသည်Coccaro et al ။ 2007) နှင့်ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေး (မာတင် et al ။ 2004) မွငျ့မား estradiol (အာရုံရှာ၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်စဉ်Baladas et al ။ 1993) ပေမယ့် pubertal ပြောင်းလဲမှုများကိုအစီရင်ခံထားကြပြီမဟုတ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်း testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အပြုသဘော (အာရုံရှာခြင်းနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြတယ်မာတင် et al ။ 2002ဒါကြောင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမဦးနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဟော်မုန်းဖြစ်ရပ်များစွဲ-အရေးပါအပြုအမူတွေအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုများပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အထောက်အကူကြောင်းဖွယ်ရှိပေမဲ့) ဤအရေးပါသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များအပေါ် pubertal လွှမ်းမိုးမှု၏လေ့လာမှုက၎င်း၏နို့စို့အရွယ်၌တည်ရှိ၏
အထက်ပြန်လည်သုံးသပ် estradiol အားဖြင့် dopaminergic function ကို၏ကောင်းမွန်စွာထူထောင်ဆွ estrous သိသိစတင်ခြင်းနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်ကြောင်း estradiol အတွက်မြင့်တက်လာကာ dopamine လွှတ်ရာတိုးနဲ့စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်ဖြစ်ပေါ်သင့်တယ်အကြံပြုထားသည်။ တကယ်တော့မျိုးစုံစွဲ-related အပြုအမူတွေအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုကြွက်များတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းနှင့်တည်ရှိကြောင်းမျောက်လေ့လာမှုများ၏အလွန်သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ပေါ်လာပါဘူး။ သို့သော်သက်သေအထောက်အထားထွန်းသစ်သားအိမ်နှင့် testicular steroids နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤအပြောင်းအလဲများကိုအထောက်အကူပြုအံ့သောငှါဖော်ပြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်း ((ဂ-fos activation ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်), ငယ်ရွယ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအထီးကြွက်များထက် သာ. ကြီးမြတ်သောကင်း-နှိုးဆွရွေ့လျားပြသော dorsal striatum အတွက်မြစ်အောက်ပိုင်းအချက်ပြလမ်းကြောင်းပိုမို activation ပြသနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူထက် locomotor အပြုအမူပိုမို Single-ထိုးာင်းသိရပါတယ်Caster et al ။ 2005; Caster et al ။ 2007) ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက်ကိုကင်း-နှိုးဆွရွေ့လျား၏နှိုင်းယှဉ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကင်းမှအလားတူကိုတုံ့ပြန်ကြောင်းပြသထားပါတယ်, နှင့်ကိုကင်း-နှိုးဆွရွေ့လျားအတွက်လိင်ခြားနားချက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပေါ်လာ။ အဆိုပါလိင်ခြားနားချက်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ယောက်ျားအတွက်ကိုကင်း-stimulation လှုပ်ရှားမှုအတွင်းကျဆင်းမှုအဖြစ်အမျိုးသမီးအတွက်ကိုကင်း-နှိုးဆွရွေ့လျားတစ်ခုတိုး (ထင်ဟပ်Parylak et al ။ 2008) ။ methylphenidate ဖို့ locomotor တုံ့ပြန်မှုအတွက်တစ်ဦးနှင့်ဆင်တူဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုအစီရင်ခံထားပါတယ်: ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းမြီးကောင်ပေါက်နှိုင်းယှဉ် locomotor ဆွပြနေစဉ်, methylphenidate (ယောက်ျားထက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးများတွင်သိသိသာသာပိုပြီး locomotor လှုပ်ရှားမှုနှိုးဆွပေးWooters et al ။ 2006) ။ မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် locomotor ဆွဟာအတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံပြဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးအရွယ်ရောက်အမျိုးသားများထက် ပို. locomotor ဆွပြပေမယ့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားပေါင်းနှင့်ညီမျှခဲ့ကြ - (လူကြီးတစ်ဦးလိင်ခြားနားချက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းရှိခဲ့သော်လည်းမအဖြူရောင် et al ။ 2008) ။ အမျိုးသမီးမှနီကိုတင်းဆွေမျိုးများကရွေ့လျား၏တားစီးဖို့အထီးကြွက်များ၏ သာ. ကြီးမြတ် sensitivity ကို (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပြီးနောက်ပေါ်လာသောလိုပက်ဇ် et al ။ 2003ဆယ်ကျော်သက်မျောက် (အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်လာအဖြစ်အီသနောတိုး၏အနိမ့်ဆေးများနှင့်အတူဆက်နွယ်) နောကျဆုံး locomotor ဆွSchwandt et al ။ 2007).
ာင်းအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုလည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်လာကြသည်။ နီကိုတင်းနှင့် psychostimulants ကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးအကြား cross-sensitive အမျိုးသမီးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များထက်အထီးအတွက် သာ. ကြီးမြတ်များမှာ (Collins နှင့် Izenwasser 2004; Collins et al ။ 2004) ။ ထိုကွဲပြားမှုအပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းပေါ်ထွက်လာကြောင်းအကြံပြုလိင်အလားတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်ပြီကြွက်တွေမှာအီသနောာင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုပေမယ့်ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်မဟုတ်ကြွက်, (Itzhak နှင့်အန်ဒါဆင် 2008) ။ အမျိုးသမီးသော်လည်းမအထီး Non-လူ့မျောက်ဝံများအတွက်အီသနော-သွေးဆောင် locomotor ာင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအစီရင်ခံထားသည် (Schwandt et al ။ 2008).
စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်ဆိုးကျိုးများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုလည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပေါ်လာပါသည်။ ကိုကင်းချင်းတိုးတက်ရေးပါတီမှအမျိုးသမီးများ၏ သာ. ကြီးမြတ် sensitivity ကို (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပေါ်ထွက်လာZakharova et al ။ 2009) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူမဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးကြွက် (အသက်-လိုက်ဖက်အထီးထက်ကင်းဖို့ သာ. ကြီးမြတ် CPP ကတွေ့ကြုံခံစားBalda et al ။ 2009) ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါတစ်ခုမှာလေ့လာမှုမော်ဖင်းအကိုက်သို့မဟုတ်ကင်း CPP ကဖြစ်စေမလိင်ခြားနားချက်ကဖော်ပြခဲ့သည်ပေမယ့်စမ်းသပ်ဘာသာရပ်များ၏နံပါတ်က (အလွန်ကြီးမားခဲ့မဟုတ်လျှင်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောခြားနားချက် detect လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့အလုံအလောက်ငယ်ကမ့်ဘဲလ် et al ။ 2000).
အများအပြားစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပေါ်လာပါသည်။ ကျနော်တို့ကအရွယ်ရောက်ပြီးသူပြသခဲ့ကြပေမယ့် prepubertal အမျိုးသမီးကြွက်များထက်ပိုကင်းနှစ်ယောက်ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးစွဲမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းကင်းမိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်ရေးပိုမိုမြန်ဆန်ဝယ်ယူ၏အသွင်အပြင် (ဖော်ပြခဲ့သည်မပယ်ရီ et al ။ 2007; ကာရိုး et al ။ 2008; Lynch 2008; Walker က et al ။ 2009) ။ ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်နှစ်ဦးစလုံးပိုမိုမြန်ဆန်လူကြီးများထက်နီကိုတင်းမိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်ရေးဆည်းပူးနေချိန်တွင်သူတို့လူကြီးဝင်အဖြစ်အမျိုးသမီးစားသုံးမှု၏အဆင့်ဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားစဉ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်ဆင့်ကတကယ်တော့ (အထီးလဲLevin et al ။ 2003; Levin et al ။ 2007) ။ အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအောက်တွင်နှိုင်းယှဉ်နီကိုတင်းမိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်ရေးပြပေမယ့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့အဆုံးအသုံးပြုပုံအမျိုးသမီး (ယောက်ျားထက် ပို. နီကိုတင်းယူLynch 2009) ။ လူကြီးများထက် oxycodone ၏နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နည်းပါးလာဆေးများ, ဒါပေမဲ့သူတို့မိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်ရေး၏အဆုံး (မှာ ventral striatum အတွက် dopamine အတွက်ပုံကြီးချဲ့တိုးသရုပ်ပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရလဒ် dopaminergic neurotransmitter အပေါ် oxycodone ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပိုမို sensitivity ကိုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့သည်Zhang က et al ။ 2009).
တိကျသောလိင်ကွဲပြားမှုမျိုးစိတ်အပျေါမှာမူတည်ပေမဲ့အရက်ကိုစားသုံးမိအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုများပေါ်ပေါက်လာ, ကြွက်နှင့် Non-လူ့မျောက်ဝံများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ (အမျိုးသမီးကြွက်အထီးကြွက်များထက်ပိုပြီးအရက်သုံးစွဲ, ဤလိင်ခြားနားချက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပေါ်လာသောLancaster နှင့် Spiegel 1992; Lancaster et al ။ 1996) ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း, ဤလေ့လာမှုများအတွက်အီသနော၏တန်းတူပမာဏမျိုချမိပါကြောင်းပြပွဲရှိကွောငျးတမျောက်လေ့လာမှု (Schwandt et al ။ 2008).
စိတ်ကြွဆေးမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုလေ့လာခဲ့ကြပြီဒါသည်ဤသီးခြားစီဖော်ပြထားသောအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကှာခွား။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်နှစ်ဦးစလုံးပိုမိုမြန်ဆန် Shabazi (ကလေ့လာမှုမှာလူကြီးများထက်စိတ်ကြွဆေးမိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူShahbazi et al ။ 2008) ။ ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးအဟောင်းတွေအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးထက်ပိုယူစဉ်ကဒီလေ့လာမှုမှာဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေး, အရွယ်ရောက်အမျိုးသားများထက်တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအောက်တွင်လျော့နည်းစိတ်ကြွဆေးကိုယူ။ အခြားလေ့လာမှုမှာတော့ဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးဖြစ်စေအသက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးသို့မဟုတ်အထီးထက်စိတ်ကြွဆေးပိုမိုာင်းပြ, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမလိင်ကွဲပြားမှုစာပေကနေ diverges သောဤလေ့လာမှုမှာဖြစ်စေစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ရွေ့လျားသို့မဟုတ်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ, (အတွင်းကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြMathews နှင့်မက်ကော်မစ် 2007) ။ တစ်ခုမှာအုပ်ချုပ်ရေးစိတ်ကြွဆေးဇီဝြဖစ် testosterone ဟော်မုန်းအားဖြင့်တိုးမြှင့်ကြောင်းပင်ဖြစ်သည်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြွဆေးအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုပြန်ဆိုအတွက်အရေးကြီးသောအတွက်အသိပေးချက်များနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီး, အရှင်ဖွယ်ရှိအပြောင်းအလဲများကို (Meyer နှင့် Lytle 1978; Becker က et al ။ 1982; Milesi-Halle et al ။ 2005).
ဆယ်ကျော်သက်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုနှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းအချက်အလက်အချို့မှတ်သားလောက်ကွာဟချက်ရှိပါသည်။ cannabinoids ၏အားဖြည့်ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုနည်းနည်းသတင်းအချက်အလက်ရှိပါသည်။ Higuera-မာတာ (PN1-55,940 ထံမှ CB28 agonist CP38 နှင့်အတူယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကြွက်ကုသများ၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအကျိုးဆက်များစုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်အမျိုးသမီးတိုးမြှင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြသကြောင်းပြသHiguera-မာတာ et al ။ 2008; Higuera-မာတာ et al ။ 2009) ။ catalepsy, hypolocomotion, analgesia နှင့် hypothermia ၏အဖြစ်အထပ်ထပ် THC အောက်ပါသည်းခံစိတ်အရေးကြီးတဲ့: Wiley နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကစူးရှသည့် cannabinoid tetrad အပေါ် THC ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပွီ။ ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးအရွယ်ရောက်အမျိုးသားများထက်ရွေ့လျား၏တားစီးဖို့ပိုအထိခိုက်မခံခဲ့ကြစဉ်သူတို့ (အမျိုးသမီးမြီးကောင်ပေါက် catalepsy, antinociception နှင့် hypothermia မှအမျိုးသမီးလူကြီးများထက်လျော့နည်းထိခိုက်မခံကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်နည်းသည်းခံစိတ်ပြသရန်တော်မှာWiley et al ။ 2007) ။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့, အီသနောများအတွက်အစီရင်ခံနှစ်ခုဖယ်ထုတ်ပြီး Non-လူ့မျောက်ဝံများအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏လုပ်ရပ်များအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုမရှိလေ့လာမှုများရှိပါသည်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အတွက်ကိုစှဲမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်လိင်ကွာခြားချက်များ၏ပေါ်ထွန်းရေးအတွက် Gonadal steroids အခန်းက္ပ
မျိုးပွား၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုအဖြစ်မဟုတ်တဲ့မျိုးဆက်ပွားအပြုအမူတွေ၏လေ့လာရေးအပျိုဖော်ဝင် gonadal steroids ၏စည်းရုံးရေးသက်ရောက်မှု (အထကျကိုကြည့်ပါ) လိင်က dimorphic ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုအပေါ်နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်သက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်တစ်စက္ကန့် "အရေးပါကာလ" ကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ gonadal steroids ၏ Active ဆိုးကျိုးများလည်းအပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းစတင်ဖို့, ဒါကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်စဉ်များမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းစွဲမှအားနည်းချက်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphisms ပေါ်ပေါက်ရေးအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုတွေကမွေးဖွားစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏လုပ်ရပ်များအပေါ် gonadal steroids ၏စည်းရုံးရေးသက်ရောက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ window ကိုဖွင့်မီနှင့်အပြီးဖော်ပြသည်။
အမူအကျင့်လေ့လာမှုများစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုအတွက်သားအိမ်နှင့် testicular steroids များအတွက်အခန်းကဏ္ဍထောကျပံ့ပေးပေမယ့်စည်းရုံးရေးနှင့်လှုပ်ရှားမှုများသက်ရောက်မှု၏ဆွေမျိုးအလှူငွေဝေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းထံမှဖြစ်ပါတယ်။ အများအပြားကလေ့လာမှုများစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုအပေါ် gonadal steroids ၏စည်းရုံးရေးသက်ရောက်မှုများအတွက်အခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါတယ်။ ညာဘက်မွေးပြီးအန်ဒရိုဂျင်ကုသမှုအားဖြင့်အမျိုးသမီးကြွက်ခွေးများ၏ Ovariectomy သို့မဟုတ်ပုလ်စိတ်ကြွဆေး၏ locomotor လှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှုမှအမျိုးသမီးများ၏တိုးမြှင့်တုံ့ပြန်မှု၏အသွင်အပြင်တားဆီး (Forgie နှင့် Stewart က 1993; Forgie နှင့် Stewart က 1994) ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ရက်ပေါင်း 11-18 စဉ်အတွင်းအနည်းထိတွေ့မှု (အမျိုးသမီးသားစဉ်မြေးဆက်အတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် CPP ကနှိမ်နင်းအဖြစ်အားနည်းအီစရိုဂျင်အနည်း၏တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းလေ့လာမှုပင်ကိုယ်ဝန်ထိတွေ့ dopaminergic အာရုံခံ၏ ontogeny သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ကြောင်းပြသLaviola et al ။ 2005).
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေလတ်တလောလေ့လာမှုများအပျိုဖော်ဝင် gonadal steroids ၏စည်းရုံးရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများသြဇာလွှမ်းမိုးထားတဲ့ကာလအတွင်းတစ်ဦးအပိုဆောင်းဝင်းဒိုးကိုကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုစီးရီးထဲမှာအကြှနျုပျတို့အကျူးနဲ့ post-pubertal ovariectomy သို့မဟုတ်သင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပွီ။ လူကြီးဒါမှမဟုတ်အပျိုဖော်ဝင်နှိမ်နင်းကင်း-နှိုးဆွရွေ့လျားမတိုင်မီဖြစ်စေ Ovariectomy ။ သို့သော် postpubertal အကျူးသော်လည်းမသင်းသိသိသာသာ (ယောက်ျားအတွက်ကိုကင်း-နှိုးဆွရွေ့လျားတိုးလာKuhn et al ။ 2001; Walker က et al ။ 2001; Parylak et al ။ 2008) ။ pre-pubertal ခွဲစိတ်ဦးနှောက်အဖွဲ့အစည်းအပေါ် Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းသက်ရောက်မှုများကောင်းစွာဖော်ပြထား perinatal အထိခိုက်မခံကာလပြီးနောက်, PN25 အပေါ်ကောက်ယူခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာနှစ်ဦးစလုံးအမျိုးသမီးအတွက်သားအိမ်ဟော်မုန်းတစ်ခုအခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပေမယ့်လည်းအန်ဒရိုဂျင်၏ယခင်ကအသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရစည်းရုံးရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုယောက်ျားအတွက်ကိုကင်း-နှိုးဆွအပြုအမူအတွက်သာမန်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကျဆုံးခြင်းမှလှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် gonadal steroids အမျိုးသမီးအတွက်စွဲ-related အပြုအမူတွေကိုတိုးပွားခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းယောက်ျားအတွက်သူတို့ကိုဖိနှိပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စဉ်အတွင်း Dopaminergic ရာထူးအမည်အတွက်လိင်ကွာခြားချက်များ၏ပေါ်ပေါက်ရေး
အထက်ပြန်လည်သုံးသပ်အဆိုပါအပြုအမူလေ့လာမှုများ locomotor activation, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်ရေးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းကြွက်များတွင်လိင် dimorphic ဖြစ်လာကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဤအလိင်ကွဲပြားမှုအတွက် dopaminergic အာရုံခံ၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် activation ၏သရုပ်ပြအရေးပါမှုပေးထားသောကြောင့် dopaminergic function ကို၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုသည်ဤသက်ရောက်မှု mediates ကြောင်းအဆိုတင်သွင်းဖို့ယုတ္တိဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ forebrain မှ dopaminergic စီမံကိန်း၏ခန္ဓာဗေဒအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုကြွက်များတွင်မွေးဖွားမီပေါ်ပေါက်လာကြသည်။ Ovtsharoff (Ovtscharoff et al ။ 1992) အမျိုးသမီးမွေးဖွားမီအဆိုပါ caudate အတွက် dopaminergic ဖိုင်ဘာ innervation မြင့်မားသိပ်သည်းဆရှိသည်ပြသခဲ့သည်။ ဒါဟာနောက်ထပ် (အစားပျံ့နှံ့နေတဲ့ဟော်မုန်းပမာဏထက်မျိုးရိုးဗီဇလိင်အမျိုးသမီးကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ dopaminergic အာရုံခံသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအကြံပြုထားသည်Beyer et al ။ 1991; Kolbinger et al ။ 1991) ။ အဆိုပါ testis-အဆုံးအဖြတ်ဗီဇ sry ကဟော်မုန်းပမာဏ၏လွတ်လပ်သော tyrosine hydroxylase စကားရပ်ကိုထပ်မံ dopaminergic အာရုံခံ၏လိင်-တိကျတဲ့စည်းမျဉ်း (တည်ရှိသောဖြစ်နိုင်ခြေကိုထောက်ခံပါတယ်ထိန်းညှိစေခြင်းငှါအဘယ်အရပ် dopaminergic အာရုံခံအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြောင်းအဆိုပါဆန္ဒပြပွဲDewing et al ။ 2006), ဒီနည်းနည်းဒေတာနဲ့ထွန်းသစ်စဧရိယာဖြစ်ပေမယ့။
အစောပိုင်း postnatal နှင့် pubertal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတစဉ်အတွင်းအရေးပါကာလအတွင်းမှာ dopaminergic function ကိုအပေါ် gonadal steroids ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. သေးအနည်းငယ်သာသက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ သို့သျောလညျးအမူအကျင့်ဒေတာ (Becker ကများကမကြာသေးမီပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရှု (အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းအီစထိုဂျင်မှအန်ဒရိုဂျင် perinatally ဖို့ဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီး၏အပျိုဖော်ဝင်နှင့်ထိတွေ့မှုကာလအတွင်းယောက်ျား၏ထိတွေ့မှုအတွက်အရေးပါဟော်မုန်းတွေကိုပေးအကြံပြုBecker က 2009)) ။ တစ်ခုတည်းသောတည်ဆဲလေ့လာမှု gonadal steroids D2 receptors (များ၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုတံစဉ်များကိုအထောက်အကူပြုမဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပါတယ်Andersen က et al ။ 2002).
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စဉ်အတွင်း Dopaminergic ရာထူးအမည်အပေါ်အပြောင်းအလဲများမှ Gonadal Steroid တစ်မျိုးဖြည့်ပံ့ပိုး
ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းအပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းစွဲအားနည်းချက်ပြောင်းလဲနေတဲ့မှ dopaminergic function ကို၏အလားအလာအလှူငွေနားလည်နိုင်ရန်အတွက်လိင်အဆိုပါ substantia nigra နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopaminergic ဆဲလ်အသေကောင်အတွက်ကွဲပြားမှုနှင့်၎င်းတို့၏ Terminal ကိုစီမံကိန်းများပေါ်ပေါက်လာသွင်ပြင်လက္ခဏာများစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်တွေ့ရှိချက်ကိုကင်းသည့် dorsal striatum အတွက် dopamine လျတ်တိုးမြှင့်ကြောင်းပြသ3အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များထက်ငယ်ရွယ်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ပိုမိုမြင့်မားခေါက်နေသည်။ ကနျူကလိယ accumbens ၏အဓိကများတွင်ဖြစ်ပေါ်ပါဘူးအတိုင်းဤဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာခြားနားချက် (ဒေသတွင်းရွေးချယ်ဖြစ်ပါသည်Walker ကနှင့် Kuhn 2008) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူလေ့လာမှုများမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးအတွက် estrous သိသိစတင်ခြင်းအမျိုးသမီးအတွက်ကိုကင်း-နှိုးဆွ dopamine လျတ်အတွက်အလားတူဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကျဆင်းခြင်းတားဆီးအံ့သောငှါခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
ယခင်ကနှစ်ဦးစလုံးမြီးကောင်ပေါက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဤဖြစ်နိုင်ခြေစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, ငါတို့အစာရှောင်ခြင်း-scan ကသိသိ voltammetry သုံးပြီးဆယ်ကျော်သက် (နေ့က 10) နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် (28 / ကီလိုဂရမ် mg) ကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုအပြီးအမျိုးမျိုးသောအချိန်များတွင် (နေ့က 65) ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်စိတ်ကြွဆေး dopamine လျတ်တိုင်းတာ နှင့်လူကြီးများ (Walker က et al ။ 2000; Walker က et al ။ 2006; Walker ကနှင့် Kuhn 2008). ပုံ220 Hz မှာအခြေခံဆွဖို့ dopamine ဆွေမျိုးထဲမှာရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ပြသထားတယ်။ ကိုကင်း-နှိုးဆွ dopamine လျတ်လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်း၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်ကြီးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအချင်းချင်းနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ ကိုကင်း-နှိုးဆွ dopamine လျတ်နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်း၏မြီးကောင်ပေါက်ထက်လူကြီးအတွက်လျော့နည်းခဲ့ပေမယ့်, အမျိုးသမီးအတွက်လူကြီးဖို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေကျဆင်းမှု (ယောက်ျားအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာထက်လျော့နည်းခဲ့သည်Walker က et al ။ 2000; Walker က et al ။ 2006) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် dopaminergic function ကိုတစ်ဦးလိင်-တိကျတဲ့လမ်းအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းကျရောက်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့သော်ဤလေ့လာမှု dopamine လွှတ်ပေးရန်တွင်ဤအပြောင်းအလဲများကိုမှ gonadal steroids ၏စည်းရုံးရေးသို့မဟုတ် Active သက်ရောက်မှု၏အလှူငွေမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး။
ဆယ်ကျော်သက် (PN28) သို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (PN65-75) အထီးနှင့်မိန်းမကြွက်များတွင်ကိုကို - သွေးဆောင် dopamine လျှံ၏အချိန်သင်တန်း။ အချက်အလက်များအရကိုကင်းပြီးနောက် (၁၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) အကြိမ်ပေါင်းများစွာတွင် extracellular dopamine တိုးပွားမှုနှုန်းကိုပြသသည်။ N ကို = 10-5 / အုပ်စုတစ်စု။ ANOVA: P <.9 ညွှန်ပြ ...
လူကြီးများအတွက်စာပေ estradiol ၏လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်သက်ရောက်မှုများအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် dopaminergic function ကိုအပေါ်အဓိက gonadal Steroid တစ်မျိုးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူဒေတာ (Parylak et al ။ 2008) သားအိမ်သို့မဟုတ် testicular steroids ၏အရေးကြီးသောအဖွဲ့အစည်းသက်ရောက်မှု endocrine function ကိုအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအထောက်အကူပြုအံ့သောငှါညွှန်ပြ။ ဒီဖြစ်နိုင်ခြေအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကျနော်တို့ PN25 အပေါ် prepubertal သင်းသို့မဟုတ် ovariectomy ကောက်ယူ, ငါတို့အရင်အမူအကျင့်လေ့လာမှုများကိုက်ညီရန်, 30 ရက်အကြာတွင်ကင်း-နှိုးဆွ dopamine လျတ်အကဲဖြတ်။ ဤအစမ်းသပ်ချက်၏ရလဒ်များကိုမှာပြနေကြသည် ကိန်းဂဏန်းများ3နှင့် and4 ။4။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း prepubertal ovariectomy (ကိုကင်း-နှိုးဆွလျတ်လျော့နည်းသွားပုံ 3) ။ အံ့သြစရာကောင်းတာက prepubertal သင်း (ကိုကင်း-နှိုးဆွ dopamine လျတ်အတွက်သိသိသာသာတိုးစေသောပုံ 4) ။ dopaminergic function ကိုအပေါ် estradiol များ၏ကောင်းမွန်စွာဖော်ပြထားဆိုးကျိုးများပေးထားသောကြောင့်အမျိုးသမီးများတွင်ရလဒ်များကိုမှတက်ကြွစွာနှင့်အဖွဲ့အစည်းသက်ရောက်မှု၏ဆွေမျိုးအလှူငွေခွဲခြားရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်အရွယ်ရောက်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် dorsal striatal dopamine လွှတ်ပေးရေးအပေါ်အန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှုမရှိခြင်းသရုပ်ပြစာပေ၏အလေးချိန်အန်ဒရိုဂျင်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်း dopaminergic လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအပေါ်ယခင်က undescribed စည်းရုံးရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ ဤရလဒ် prepubertal သော်လည်းမအရွယ်ရောက်သင်းပြီးနောက်ကင်း-နှိုးဆွအပြုအမူတစ်ခုသိသိသာသာတိုးပွားသရုပ်ပြထားတဲ့ကျွန်တော်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအမူအကျင့်တွေ့ရှိချက်, တိုက်စစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်ကင်း-နှိုးဆွ dopamine လျတ် prepubertal (နေ့က 1) အတုအယောင်သို့မဟုတ်တက်ကြွ ovariectomy ပြီးနောက် 25 လ။ ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအချက်အလက်ကောက်ယူခဲ့သည် ပုံ 3။ N ကို = 4-5 / အုပ်စုတစ်စု။ ANOVA အချိန်နှင့် p <.001 တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက် P ကို ​​<.001 ညွှန်ပြ ...
အထီးကြွက်များတွင်ကင်း-နှိုးဆွ dopamine လျတ် prepubertal (နေ့က 1) အတုအယောင်သို့မဟုတ်တက်ကြွသင်းပြီးနောက် 25 လ။ ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအချက်အလက်ကောက်ယူခဲ့သည် ပုံ 3။ N ကို = 4-5 / အုပ်စုတစ်စု။ ANOVA အတွက်အချိန်တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက် p <.001 နှင့် p <.001 ညွှန်ပြ ...
သားအိမ်နှင့် testicular နှစ်ဦးစလုံး steroids မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီး dopaminergic function ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရာအားဖြင့်ယန္တယားလူသိများကြသည်မဟုတ်။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီက estradiol dopaminergic အာရုံခံဆဲလျအရေအတွက်ကိုထိန်းသိမ်းနေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက် psychostimulants မှ dopaminergic တုံ့ပြန်မှုကိုကြီးထွားများပြားစေကြောင်းပြသကြပြီးကတည်းကကျနော်တို့ dopaminergic အာရုံခံဆဲလျအရေအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုအပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းပေါ်ထွက်လာခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်တစ်ဦးရှေ့ပြေးလေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒီဖြစ်နိုင်ခြေအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကျနော်တို့ PN21, 28, 42 နှင့် 65 အပေါ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များ၏လိုက်ဖက်အလိုက်သေဆုံးပြီးဘက်မလိုက် stereology သုံးပြီး substantia nigra နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopaminergic အာရုံခံဆဲလျအရေအတွက်က, အ forebrain မှ dopamine စီမံချက်များပေါ်ထွန်းရာကနေအရေးပါ, ရေတွက် ။
တိရစ္ဆာန်များနက်ရှိုင်းစွာထုံဆေးနဲ့ transcardially 10% ကြားနေ buffered formalin နှင့်အတူ perfused ခဲ့ကြသည်။ perfusion ပြီးနောက်တစ် 10% sucrose cryoprotectant ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာ equilibrated နှင့် 30 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထား, 4% formalin ထဲမှာ, ဦးနှောက်ထုတ်ယူခဲ့ကြခြင်းနှင့်နေ့ချင်းညချင်း Post-fixed ။ serial Coronal အပိုင်း (30 μm) ဆလိုက်ပေါ်ကိုဒီအတိုင်းအရည်ပျော်အောင်-တပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့် 37 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာနေ့ချင်းညချင်းအခြောက်လှန်း, တစ်ဦး cryostat အပေါ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ကဏ္ဍများ PBS နှင့်ဆေးနှင့် 0.3 မိနစ် 30% ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်-Methanol နွေးထွေးစွာရှိနေပြီး, အခန်းအပူချိန်မှာ 0.5 မိနစ် 0.3% BSA + 100% ထရီ X-15 နှင့်ဆေးနှင့်ပိတ်ဆို့ခဲ့သညျ။ နေ့ချင်းညချင်း 1 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ: (10000, Immunostar, Inc, Hudson, WI 4) ပိတ်ဆို့ခြင်းပြီးနောက်ကဏ္ဍများကိုကြားခံပိတ်ဆို့ခြင်းအတွက်ရောလျက်မူလတန်း antibody ကိုနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ အခန်းအပူချိန်မှာ 1 နာရီများအတွက်: (1000, Vector Labs က, Burlingame,, CA 1) နောကျနေ့, အပိုင်းတစ် biotinylated မြင်း Anti-mouse ကိုအလယ်တန်း antibody ကိုနှင့်ဆေးနှင့်နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါကဏ္ဍများထို့နောက် DAB (Vector Labs က) ဖြင့်ဆေးနှင့်အစွန်း, အခန်းအပူချိန်မှာ 1 နာရီများအတွက် avidin-ဓါတ်ရှုပ်ထွေးသောနှင့်ဆေးနှင့်နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ ကဏ္ဍများ, ဆေးအဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောအယ်လ်ကိုဟောကတဆင့်ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်း, cresyl ခရမ်းရောင်နှင့်အတူ counterstained, တပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့် coverslipped ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ SNpc နှင့် VTA အတွက် TH-မှာ IR နှင့် TH-IN ဆဲလ်အသေကောင်များ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်၏ဘက်မလိုက် stereological ခန့်မှန်းချက်ဟာ optical အစိတ်အပိုင်းနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့သည် (အနောက် et al ။ 1991) ။ တစ်ဦးက Nikon Optiphot-2 ဏုင်တစ်ဦးကကွန်ပျူတာရေတွက်စနစ်, ကင်မရာ (Dage) နှင့်စက်တပ်ဇာတ်စင် (Ludl) ဆဲလ်များ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကခန့်မှန်းရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီကလာပ်စည်းအသေကောင်ရေနံနှစ်မြှုပ်ခြင်းမှန်ဘီလူး (ဂဏန်းကို aperture = 100) ×တစ် 1.3 နှင့်အတူမြင်ခဲ့ကြသည်။ လုံလောက်အောင်ဆဲလ်တွေ 0.10 ≤ခဲ့အမှားတစ်ခုကိန်းအောင်မြင်ရန်ရေတွက်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကအပူ-mediated ကိုပဲပြန်လည်ရယူခြင်းမရှိဘဲကောက်ယူနှင့်ဆဲလ်နံပါတ်များကိုအဆုံးစွန်သော technique ကိုနှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်ထက်နိမ့်ခဲ့ကြတယ်ခဲ့သည်။ သို့သော်တစ်ဦးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့မျှော်လင့်မထားတဲ့ပုံစံကဒီစမ်းသပ်မှုကနေပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ မှာပြထားတဲ့အတိုင်း ပုံ 5, DA ဆဲလ်အရေအတွက်သိသိသာသာပြိုလဲမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဒီအကဆြုံးအဆိုပါဝိသေသလိင်ခြားနားချက်ပေါ်ထွက်လာသည့်အခါတစ်နေ့တာ 65 ဖြင့်အမျိုးသမီးအတွက် Plateau ပုံရသည်။
Tyrosine hydroxylase ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အသက်အရွယ်တစ်လျှောက် sustia nigra ရှိ immunoreactive neuron ။ N ကို = 5-7 / အုပ်စုတစ်စု။ ANOVA သည်အသက်အရွယ်နှင့် p <၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် p <.001 ကိုပြသသည်။ အသက်အရွယ်×ကျား, မအပြန်အလှန်များအတွက် 01 ။
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် dopaminergic ဆဲလ်သေမင်း၏သိသာထင်ရှားသောလှိုင်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက်, ကြွက်များတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ apoptotic ဆဲလ်သေမင်း၏နှစျခုအစောပိုင်းကလှိုင်းတံပိုးညာဘက်မွေးပြီးနှင့် ပတ်သက်. PN14 (အပေါ်ပေါ်ပေါက်မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်-Lewis က et al ။ 2000; Burke က 2003; Burke က 2004) ။ က terminal ကိုဒေသများရှိ innervation သိပ်သည်းဆ (အထကျကိုကြည့်ပါ) ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းတစ်ချိန်တည်းကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်အဖြစ် dopaminergic function ကိုမှမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပြိုလဲခြင်းဆက်စပ်မှု, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ ဒါဟာ (apoptosis ခံယူသောဆဲလ်များကိုသင့်လျော်စွာနှင့်ဒါသူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်မရောက်နိုင်ဘူးသောပစ်မှတ်အာရုံခံထံမှ trophic input ကိုမခံမယူခဲ့ပါဘူးခဲ့ကြသည်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်et al ဦး။ 2003; Burke က 2004) ။ dopamine အာရုံခံဆဲလ်များအနေဖြင့်အပျိုဖော်ဝင်ပြီးနောက်လိင်ကွဲပြားမှုပေါ်ပေါက်လာခြင်းသည် estradiol ၏ trophic သက်ရောက်မှုများသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသောဘ ၀ တွင် dopaminergic neuron များကိုထိန်းသိမ်းရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဟူသောကျွန်ုပ်တို့၏ကန ဦး ယူဆချက်ကိုသာထောက်ခံသည်။ dopaminergic အာရုံခံဆဲလ်အရေအတွက်အပြောင်းအလဲများသည်ငါတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသော dopamine ထုတ်လွှတ်မှုအပေါ်ကိုကင်း၏သက်ရောက်မှုအပြောင်းအလဲနှင့်တူညီသည်မှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့လက်ရှိဆဲလ်ခန္ဓာကိုယ်နှင့် / သို့မဟုတ် terminal ကိုဒေသများရှိခန္ဓာဗေဒပြောင်းလဲမှုစွဲ -related အပြုအမူ၏ gonadal Steroid တစ်မျိုးစည်းမျဉ်းကိုအထောက်အကူပြုခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
စွဲလမ်းများအတွက် Forebrain Dopaminergic ရာထူးအမည်အတွက်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပြောင်းအလဲများ၏အရေးပါမှု
အဆိုပါ dorsal striatum အတွက် dopaminergic function ကိုယင်း၏နောက်ဆုံးရငျ့မြီးကောင်ပေါက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အဖြစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ function ကိုရန် "နောက်ကျော pruning" ကနောက်တော်သို့လိုက်ခြင်းကိုသည်းခံပြပွဲအထက်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်အဆိုပါလေ့လာမှုများသော။ dopaminergic function ကိုနှင့် dopamine နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်အပြုအမူတွေအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုဤအချိန်ဘောင်အတွင်းမှာပေါ်လာပါသည်။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုအမျိုးသမီးအတွက် dopaminergic function ကိုတိုးပွားဖို့ estradiol ၏လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်သက်ရောက်မှုများစတင်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ယောက်ျားအတွက် dopaminergic function ကိုဖိနှိပ်ထားတဲ့အန်ဒရိုဂျင်တစ်ခုစည်းရုံးရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံးကိုထင်ဟပ်တဲ့ပုံပဲ။ ပုံ6ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်ကိုရှင်းပြနိုင်ဦးတည်းအလားအလာအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်။ လက်ဝဲမှလက်ျာဘက်, ထိုကိန်းဂဏန်း dopaminergic အာရုံခံဆဲလျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်သုံးဆင့်ပြသသည်။ အဆိုပါ leftmost panel က dopamine neurogenesis ပြသထားတယ်။ အလယ်မှာ panel ကို postnatal ဘဝစဉ်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကတဆင့်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပစ်မှတ်၏ axon outgrowth နှင့် innervation ၏ကာလသရုပ်ဖော်သည်။ dopaminergic အာရုံခံဆဲလျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် receptors "တံစဉ်များကို" နောက်ကျောသကဲ့သို့, ညာဘက် panel ကိုအပေါ်ပုံဖော်နေပါတယ်။ Dopaminergic အာရုံခံ (လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးမျိုးရှိသမျှအဆင့်မှာရှုံးနိမ့်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာဒေတာအပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်ယခင်ကထုတ်ဝေနေကြBurke က 2003; Burke က 2004) ။ ကျနော်တို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းယင်း midbrain အတွက် dopaminergic အာရုံခံ၏ apoptotic ဆဲလ်သေမင်း၏နောက်ဆုံးအဆင့်အန်ဒရိုဂျင်များကလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး estradiol ၏ trophic သက်ရောက်မှုများကထေမိကြောင်း hypothesize ။ ဤသည်ယောက်ျားများအတွက်အလယ်တန်းနှင့်ညာဘက် panel ကိုအတွက်နည်းပါးလာဆဲလ်များကညွှန်ပြလျက်, အောက်ခြေ panel ကိုတစ်ဦးမီးခိုးရောင်အာရုံခံဆဲလျအမျိုးသမီးအတွက် estradiol ခြင်းဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားအာရုံခံ၏လူဦးရေကိုညွှန်းသည်။ ကျနော်တို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အစအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားမှု detect မပြုခဲ့ပေမယ့်ယဉ်ကျေးမှု၌လေ့လာမှုများ, အမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အစောပိုင်းအဆင့်မှာပိုပြီးအာရုံခံရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုသကဲ့သို့တစ်ဦးကမီးခိုးရောင်အာရုံခံဆဲလျမြားကိုလညျး (က, leftmost panel ကိုများတွင်ပါဝင်သည်Beyer et al ။ 1991) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် / အပျိုဖော်ဝင်များ၏အဆုံးအသုံးပြုပုံအမျိုးသမီးကျနော်တို့အမျိုးသမီးအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိလိင်တိုးမြှင် dopamine function ကိုမှပံ့ပိုးမှုများ hypothesize ပေးသောပိုပြီး dopaminergic အာရုံခံ, ရှိသည်။ သို့သော် dopaminergic ဆဲလ်အသေကောင်များ၏အရေအတွက်အပေါ်ရှိသူများထက်ကျော်လွန်အပိုဆောင်းသက်ရောက်မှုဖွယ်ရှိ dopaminergic function ကိုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုများပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အထောက်အကူ။ အလားအလာရှိသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက် DAT နှင့် receptors အပေါ် estradiol ၏သိသိသက်ရောက်မှု၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်အဖြစ်အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုပါဝင်ပတ်သက် cortical အာရုံကြောဆားကစ်ပေါ်မှာအန်ဒရိုဂျင်၏လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်သက်ရောက်မှုများပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, afferent input ကို (ညာဘက်အောက် panel ကိုအတွက်ညွှန်ပြ dopaminergic အာရုံခံအပေါ်ဖြစ်ကောင်း GABAergic တုံ့ပြန်ချက်) လည်းအမျိုးသမီးအတွက် dopaminergic လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏အပိုဆောင်းစည်းမျဉ်းကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
estradiol နှင့် testosterone ဟော်မုန်း forebrain dopamine စနစ်များ၏ ontogeny သြဇာလွှမ်းမိုးမည်သို့မသိဘဲရမ်းမေးတဲ့ပုံစံ။
စွဲဤတွေ့ရှိချက်များ၏ဆက်စပ်မှုပြန်ဆိုအတွက်တဦးတည်းအတွက်အသိပေးချက်ရှိပါသည်။ ကျနော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိကြ dopaminergic function ကိုအတွက်အဓိကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများကို dorsal striatum အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ နျူကလီးယပ် accumbens ဖို့ VTA ထံမှပရောဂျက်သော dopaminergic အာရုံခံ (မူးယစ်ဆေးအားဖြည့်များ၏ကနဦးအဆင့်အဘို့ သာ. အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်Koob 1996; McBride et al ။ 1999; di Chiara 2002) ။ သို့သော် dorsal striatum အတွက် dopamine တိုး (စွဲလမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အလေ့အထသင်ယူမှုမှတာမိမိဆန္ဒအလျောက်မူးယစ်ဆေးကနေအကူးအပြောင်း, တစ်ဦးအလွန်အရေးပါအဆင့်များအတွက်အရေးပါသောဖြစ်ထင်နေကြတယ်Vanderschuren နှင့် Everitt 2004; Volkow et al ။ 2006; et al ကိုကြည့်ပါ။ 2007; Dalley နဲ့ Everitt 2009) ။ ဤအတွေ့ရှိချက်တစ်ခုမှာဆိုလိုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းတစ်ပုံစံတည်း သာ. ကြီးမြတ်မကျမည်အကြောင်းစဉ်အပြုအမူများစွဲလမ်းပုံစံများဖို့အကူးအပြောင်းအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအသုံးပြုဖို့သူတွေကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။
dopaminergic function ကိုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုများပေါ်ပေါက်လာပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ် superimposed ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာနှစ်ဦးစလုံးလိင်၏မြီးကောင်ပေါက်နှင့်အတူစမ်းသပ်နှင့်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်သို့မှီခိုဖြစ်လာပိုမိုအန္တရာယ်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့မြီးကောင်ပေါက်ရင့်ကျက်အဖြစ်ကျား, မ-တိကျတဲ့ကိစ္စရပ်များကိုလည်းပေါ်ထွက်လာကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းတို့သည် epidemiological စာပေနှင့်အတူနောက်တဖန်တသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။ ယောက်ျားအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးသော attenuation dopaminergic function ကို၏အမူအကျင့်အရေးပါမှုအရေးပါသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုနေဆဲဖြစ်သည်။ ကတိုးနဲ့ဆက်စပ်သို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှအားနည်းချက်လျော့နည်းသွားသလဲ? epidemiological လေ့လာမှုများ (ယောက်ျားအတွက် pubertal ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အစအဦးမှာအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှိ) သောအစောပိုင်းကမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုစတင်အနာဂတ်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခို၏ သာ. အန္တရာယ်ကိုညွှန်ပြလုပ်ပါ။ ဘယ်လိုအပြုအမူတွေကိုယူပြီး testosterone ဟော်မုန်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမူးယစ်ဆေးမြင့်တက်သနည်း? testosterone ဟော်မုန်းသူ့ဟာသူအန်ဒရိုဂျင်နှင့်အီစထိုဂျင်နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်ကြောင်းလုပ်ရပ်များမှတဆင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်လေ့လာမှုများ (သေးသွင်ပြင်လက္ခဏာရသေးကြောင်းအန်ဒရိုဂျင်များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုသစ်သား 2004; Sato et al ။ 2008; သစ်သား 2008) ။ prepubertal သင်းကိုလက်ခံရရှိကြောင်းယောက်ျားအတွက်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးစူးစမ်းလေ့လာထားတဲ့တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများဤမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ကူညီလိမ့်မည်။
non-Dopaminergic စနစ်များအပေါ် endocrine သွဇာ
အားဖြည့်များ၏စည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက် dopaminergic အာရုံခံ၏ရငျ့: ဤသုံးသပ်ချက်ကိုစွဲလမ်းမှဆီလျော်မှုသက်သေပြခဲ့သည်ကြောင်းစွဲလမ်း၏တဦးတည်းရှုထောင့်အာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ သို့သော်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှအရေးပါအာရုံကြော function ကို၏အခြားဒြပ်စင်လည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပြောင်းပေးပါ။ ပြင်းထန်စွာအပြုအမူများ၏အာရုံစိုက်မှုနှင့်တားစီးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်သော noradrenergic နှင့် serotonergic လွှမ်းမိုးမှုအပါအဝင်တိုကျရိုကျ cortex အတွက်အလုပ်အမှုဆောင် function ကို၏ရင့်ကျက် (ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏အဓိကအဖြစ်အပျက်များဖြစ်ကြသည်ကုန်သည်များ et al ။ 2003) ။ ကျနော်တို့အန်ဒရိုဂျင်တိုကျရိုကျ cortex dopaminergic ဆားကစ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသက်သေအထောက်အထားအထက်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်။ အပျိုဖော်ဝင်စစဉ်အတွင်း testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုမြင့်တက်တုံ့ပြန်မှုတားစီးနဲ့တူတိုကျရိုကျ cortex လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ပေမယ့်ဒီအရေးပါသောဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာမှ pubertal ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများအလှူငွေဖြစ်စေသောလူသားမြားသို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်လေ့လာခဲ့ကြပြီမဟုတ်။
စွဲအားနည်းချက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်မြင့်မားသည်။ ဒီအားနည်းချက်တစ်ခုသိသာထင်ရှားသောအစိတ်အပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဇာတ်စင်မဟုတ်လိင်ထင်ဟပ်။ လူ့လေ့လာမှုများအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအသုံးပြုဖို့သူအနှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းလူကြီးများအဖြစ်စတင်ပါသောသူထက်စွဲမြင့်မားအန္တရာယ်ရှိသည်ပြသပါ။ ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းလူကြီးသို့ရင့်ကျက်အဖြစ်ကျနော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းကင်း-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်သိသိသာသာပြိုလဲ forebrain dopaminergic စနစ်များအတွက်အရေးကြီးသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ဦးလိင်-လွတ်လပ်သောလမ်းအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ သို့သော်ငါတို့သည်လည်း dopaminergic function ကိုကောင်းစွာဖော်ပြထားလိင်ကွဲပြားမှုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပေါ်ထွက်လာကြောင်းပြပြီး, ဖွယ်ရှိသောလူသားမြားနှောင်းပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပေါ်ထွက်လာကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပုံစံများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
NIDA ထောက်ပံ့ငွေ DA019114 နှင့် 009079 အားဖြင့်ပံ့ပိုးမှုကျေးဇူးတင်လျက်အသိအမှတ်ပြုသည်။ အားလုံးတိရစ္ဆာန်အစမ်းသပ်ချက်ဟာ Duke တက္ကသိုလ် IACUC ကအတည်ပြုတိရိစ္ဆာန် protocols များနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
Adler တစ်ဦးက, Vescovo P ကို, ရော်ဘင်ဆင် JK, Kritzer MF ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသက်တာ၌ Gonadectomy အဆိုပါ prefrontal cortex အတွက် tyrosine hydroxylase immunoreactivity တိုးပွါးနှင့်အထီးကြွက်များတွင်ပွင့်လင်းသောလယ်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းစေပါသည်။ neuroscience ။ 1999;89(3): 939-54 ။ [PubMed]
Adriani W က, Impulse နှင့် D-စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူလျှော့သောအရပ်အေးစက်၏ Laviola G. အဓာတ်လှေကားအဆင့်ဆင့်: ကြွက်တွေမှာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှစ်ခုအမူအကျင့် features တွေ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2003;117(4): 695-703 ။ [PubMed]
Adriani W က, Macri S က, Pacifici R ကိုစောစောမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းကြွက်တွေမှာနီကိုတင်းပါးစပ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှ Laviola G. အထူးခြားသောအားနည်းချက်။ Neuropsychopharmacology ။ 2002;27(2): 212-24 ။ [PubMed]
Ahmed က EI, Zehr JL, Schulz KM, Lorenz BH, DonCarlos ll, Sisk CL ။ Pubertal ဟော်မုန်းလိင် dimorphic ဦးနှောက်ဒေသများအသစ်ဆဲလ်များ၏ထို့အပြင် modulate ။ နတ် neuroscience ။ 2008;11(9): 995-7 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Andersen က SL, Gazzara RA ။ neostriatal dopamine လွှတ်ပေးရေး apomorphine-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲ၏ ontogeny: အလိုအလျောက်လွှတ်ပေးရေးအပေါ်သက်ရောက်မှု။ J ကို Neurochem ။ 1993;61(6): 2247-55 ။ [PubMed]
Andersen က SL, Thompson ကအေပီ, Krenzel အီး, Teicher MH ။ gonadal ဟော်မုန်းအတွက် Pubertal အပြောင်းအလဲများကိုဆယ်ကျော်သက် dopamine အဲဒီ receptor overproduction အခြေခံကြပါဘူး။ Psychoneuroendocrinology ။ 2002;27(6): 683-91 ။ [PubMed]
Andersen က SL, Thompson က AT, Rutstein M က, Hostetter JC, Teicher MH ။ ကြွက်များတွင် periadolescent ကာလအတွင်း prefrontal cortex အတွက် Dopamine အဲဒီ receptor တံစဉ်များကို။ synapses ။ 2000;37(2): 167-9 ။ [PubMed]
Astle DE, Scerif G. အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကိုထိန်းချုပ်လေ့လာဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိမြင်မှုမှ neuroscience အသုံးပြုခြင်း။ dev Psychobiol ။ 2009;51(2): 107-18 ။ [PubMed]
Badanich Ka, Adler KJ, Kirstein CL ။ မြီးကောင်ပေါက်နျူကလီးယပ်အတွက် preference ကိုနှင့်ကိုကင်း-သွေးဆောင် dopamine septi accumbens ကင်းသောအခြေအနေများအရပျ၌လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနား။ EUR J ကို Pharmacol ။ 2006;550(1-3): 95-106 ။ [PubMed]
Baladas က F, Torrubia R ကို, Arque JM ။ ကျန်းမာသောလူ့အမျိုးသမီးအတွက်အာရုံခံစားမှုရှာခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ Gonadal ဟော်မုန်း Correlate ။ Neuropsychobiology ။ 1993;27(2): 91-6 ။ [PubMed]
Balda MA, Anderson က KL, Itzhak Y. ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်ကင်းရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်တံ့အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းဇွဲ: အ nNOS ဗီဇ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Neuropharmacology ။ 2009;56(3): 709-15 ။ [PubMed]
Balidreschi M, Di Carlo A, Rocca WA, Vanni P, Maggi S, Perissinotto E, Grigoletto F, Amaducci L, Inzitari D. Parkinson ရောဂါနှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါများသည်အမျိုးသားများတွင်နှစ်ဆပိုမိုမြင့်မားသောလေ့လာမှုတွင်။ ILSA လုပ်ငန်းအဖွဲ့။ အိုမင်းခြင်းအပေါ်အီတလီ longitudinal လေ့လာမှု။ အာရုံကြော။ 2000;55(9): 1358-63 ။ [PubMed]
Becker က JB ။ striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopaminergic function ကိုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1999;64(4): 803-12 ။ [PubMed]
Becker က JB ။ လှုံ့ဆျောမှု၏လိင်ကွဲပြားခြားနားမှု: တစ်ဝတ္ထုယန္တရား? Horm ပြုမူနေ။ 2009;55(5): 646-54 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Becker က JB, အာနိုးက AP, Berkley KJ, Blaustein JD, Eckel LA က, Hampson အီး, Herman JP, Mart က S, Sadee W က, Steiner M က, တေလာ J ကို, Young ကအီးမဟာဗျူဟာနှင့်ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူများတွင်လိင်ကွဲပြားမှုအပေါ်သုတေသနပြုဘို့နည်းလမ်းများ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2005;146(4): 1650-73 ။ [PubMed]
Becker က JB, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်ဟူအမ်လိင်ကွဲပြားမှု။ တပ်ဦး Neuroendocrinol ။ 2008;29(1): 36-47 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Becker က JB, Ramirez VD ။ အဆိုပါစိတ်ကြွဆေးအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုစသည်တို့အတွက်ကြွက် striatal တစ်ရှူးများထံမှ catecholamines ၏လွှတ်ပေးရန်နှိုးဆွ။ ဦးနှောက် Res ။ 1981b;204(2): 361-72 ။ [PubMed]
Becker က JB, ရော်ဘင်ဆင် TE, Lorenz Ka ။ လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်စိတ်ကြွဆေး-ရူးနှမ်းလှည်အပြုအမူအတွက် estrous သံသရာများပါတယ်။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1982;80(1): 65-72 ။ [PubMed]
Becker က JB, တေလာဂျေ လှုံ့ဆျောမှုအတွက်လိင်ကွာခြားချက်များ။ အောက်စဖို့, ဗြိတိန်: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 2008 ။
ခေါင်းလောင်း RL, Rodd-Henricks ZA, Kuc Ka, Lumeng L ကိုလီ TK, မာဖီ JM, McBride WJ ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို periadolescent အရက်- သာ. နှစ်သက် (P), ကြွက်အားဖြင့်အီသနော၏စားသုံးမှုအပေါ်တစ်ခုတည်းအာရုံစူးစိုက်မှုသို့မဟုတ်အီသနောမျိုးစုံကိုပြင်းအားမှတစ်ပြိုင်တည်းပါ access ကိုသက်ရောက်မှု။ အရက်။ 2003;29(3): 137-48 ။ [PubMed]
ခေါင်းလောင်း RL, Rodd ZA, Sable HJ, Schultz ဂျာ Hsu CC ကို, Lumeng L ကို, Murphy က JM, McBride WJ ။ အနီးအနားဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအရက်- သာ. နှစ်သက် (P), ကြွက်များတွင်သောက်သုံးအီသနော၏နေ့စဉ်ပုံစံများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2006;83(1): 35-46 ။ [PubMed]
Belluzzi JD, Lee က AG က, Oliff HS, Leslie FM ရေ။ locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကြွက်အခြေအနေများအရပျကို preference ကိုပေါ်နီကိုတင်း၏အသက်အရွယ်-မှီခိုသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2004;174(3): 389-95 ။ [PubMed]
ဗင်္ယောနသန် N ကိုတစ်ဦး prolactin အဖြစ် Hnasko R. Dopamine (PRL) inhibitor ။ Endocr ဗျာ 2001;22(6): 724-63 ။ [PubMed]
Beyer ကို C, Pilgrim ကို C, mesencephalic နှင့် diencephalic ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုအတွက် Reisert ဗြဲ Dopamine အကြောင်းအရာနှင့်ဇီဝြဖစ်: လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်လိင် steroids ၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို neuroscience ။ 1991;11(5): 1325-33 ။ [PubMed]
Bonsall RW, Zumpe D ကိုမိုက်ကယ် RP ။ အမျိုးသမီးမျောက်တွေကို၏အော်ပရေတာအပြုအမူအပေါ်ရာသီစက်ဝန်းလွှမ်းမိုးမှု။ J ကို comp Physiol Psychol ။ 1978;92(5): 846-55 ။ [PubMed]
Bourgeois JP, Goldman-Rakic ​​PS, Rakic ​​P. Synaptogenesis မျောက်တွေကို၏ prefrontal cortex ၌တည်၏။ Cereb Cortex ။ 1994;4(1): 78-96 ။ [PubMed]
Bowman ကို BP, Blatt B, Kuhn CM ။ နာတာရှည်ကင်းပြီးနောက် dopamine agonists ဖို့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု Ontogeny ။ Psychopharmacology (Berl) 1997;129(2): 121-7 ။ [PubMed]
Brady KT, Grice DE, Dustan L ကို, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်အတွက် Randall C. ကျားကွဲပြားခြားနားမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1993;150(11): 1707-11 ။ [PubMed]
Brady KT, Randall CL ။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်အတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ စိတ်ရောဂါ Clin မြောက်မိပါတယ်။ 1999;22(2): 241-52 ။ [PubMed]
Brecht ML, O'Brien A, von Mayrhauser C, Anglin MD ။ စိတ်ကြွဆေးသုံးစွဲခြင်းနှင့်ကျားမကွဲပြားခြင်း။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2004;29(1): 89-106 ။ [PubMed]
Brenhouse HC, Andersen က SL ။ လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, မျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်ကင်းသောအခြေအနေများအရပျကို preference ကို၏အားကောင်း reinstatement နှောင့်နှေး။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2008a;122(2): 460-5 ။ [PubMed]
Broaddus WC, Bennett က JP ။ , striatal dopamine function ကို၏ Jr Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ဗြဲ D1 နှင့် D2 receptors ၏စာမေးပွဲ, adenylate cyclase စည်းမျဉ်းများနှင့် presynaptic dopamine အမှတ်အသားများ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1990;52(1-2): 265-71 ။
Broaddus WC, Bennett က JP ။ , striatal dopamine function ကို၏ Jr Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ II ကို။ မွေးကင်းစကလေးများ 6-hydroxydopamine D1 နှင့် D2 receptors အပေါ်ကုသမှု, adenylate cyclase လှုပ်ရှားမှုနဲ့ presynaptic dopamine function ကိုသက်ရောက်မှု။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1990;52(1-2): 273-7 ။
ဘရောင်းလုပ် SA, McGue M က, Maggs J ကို, Schulenberg J ကို, Hingson R ကို, Swartzwelder S ကမာတင်ကို C, Chung T က, Tapert SF, Sher K ကို Winters KC, Lowman ကို C, အရက်နှင့်လူငယ်အချို့ 16 အပေါ် Murphy ကအက်စ်တစ်ဦးကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရှုထောင့် 20 နှစ် အသက်အရွယ်၏။ ကလေးအထူးကု။ 2008;121 4: S290-310 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Brunell SC, လှံ LP ။ pair တစုံ-သျောဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ဒူအီသနောဖြေရှင်းချက်များ၏ဆန္ဒအလျောက်စားသုံးမှုအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အရက် Clin Exp Res ။ 2005;29(9): 1641-53 ။ [PubMed]
Burke က RE ။ Postnatal ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ dopamine အာရုံခံအတွက်ဆဲလ်အသေခံပရိုဂရမ်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2003;991: 69-79 ။ [PubMed]
Burke က RE ။ အဆိုပါ nigrostriatal စနစ် Ontogenic ဆဲလ်အသေခံ။ cell တစ်ရှူး Res ။ 2004;318(1): 63-72 ။ [PubMed]
Butkovic တစ်ဦးက, Bratko ဃမျိုးဆက်ကျောင်းသားများနှင့်အာရုံခံစားမှုရှာအတွင်းလိင်ကွဲပြားမှု: မိသားစုလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို။ အမြင် Mot ကျွမ်းကျင်မှု။ 2003;97(3 Pt 1): 965-70 ။ [PubMed]
ကာဣန SB, Bowen တို့, CA, ယု, G, Zuzga: D, Negus အက်စ်အက်စ်, Mello NK ။ gonadectomy နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနှင့်အထီးကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ် gonadal ဟော်မုန်းအစားထိုး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2004;29(5): 929-42 ။ [PubMed]
ကမ့်ဘဲလ် Jo, Wood က RD, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကင်းနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်ရာအရပျအေးစက်။ Physiol ပြုမူနေ။ 2000;68(4): 487-93 ။ [PubMed]
Carlezon WA, Jr ကသောမတ်စ် MJ ။ ဆုလာဘ်များနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ဇီဝအလွှာ: တစ်နျူကလိယ accumbens လှုပ်ရှားမှုယူဆချက်။ Neuropharmacology ။ 2009;56 1: 122-32 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ME Carroll, Batulis DK, Landry KL, မော်ဂန်အေဒီ။ မျောက်တွေကိုအတွက် FR နှင့် PR စနစ်အချိန်ဇယားအောက်မှာပါးစပ် phencyclidine ၏တင်းမာမှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု (PCP) Self-အုပ်ချုပ်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2005;180(3): 414-26 ။ [PubMed]
ကာရိုး ME, Lynch WJ, Roth ME, မော်ဂန်အေဒီ, Cosgrove KP ။ လိင်နှင့်အီစထိုဂျင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ။ 2004;25(5): 273-9 ။ [PubMed]
ကာရိုး ME, မော်ဂန်အေဒီ, Anker JJ, ပယ်ရီ JL, Dess NK ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုတိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အဖြစ် differential ကို saccharin စားသုံးမှုများအတွက်ရွေးချယ်မွေးမြူရေး။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 2008;19(5-6): 435-60 ။ [PubMed]
ကာဇီ BJ, Giedd ဖြစ်မှု, သောမတ်စ် KM ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်း။ Biol Psychol ။ 2000;54(1-3): 241-57 ။ [PubMed]
Caster JM, Walker က QD, Kuhn CM ။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်ထပ်ခါတလဲလဲ-ထိုးကင်းဖို့ Enhanced အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2005;183(2): 218-25 ။ [PubMed]
Caster JM, Walker က QD, Kuhn CM ။ ကိုကင်းတဲ့တစ်ခုတည်းသောအမြင့်ဆုံးထိုးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးသီးခြားအပြုအမူတွေကိုလုပ်ဖို့ differential ကိုာင်းဖြစ်ပေါ်သည်။ Psychopharmacology (Berl) 2007;193(2): 247-60 ။ [PubMed]
Castner လုပ် SA, Becker က JB ။ ကြွက် dorsal striatum အတွက်ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇစကားရပ်အပေါ်စိတ်ကြွဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1996;712(2): 245-57 ။ [PubMed]
Castner လုပ် SA, Xiao L ကို, Becker က JB ။ striatal dopamine အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု: Vivo microdialysis နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ၌တည်၏။ ဦးနှောက် Res ။ 1993;610(1): 127-34 ။ [PubMed]
ကုန်သည်များ RA, တေလာ JR, Potenza MN ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurocircuitry: စွဲအားနည်းချက်၏အရေးပါသောကာလ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;160(6): 1041-52 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Chaudhri N ကို, Caggiula AR, Donnie EC, Booth က S, Gharib MA, Craven LA က, Allen ကအက်စ်အက်စ်, Sved AF, Perkins Ka ။ ကြွက်များတွင်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှနီကိုတင်းနှင့် nonpharmacological လှုံ့ဆော်မှုများ၏အလှူငွေအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Psychopharmacology (Berl) 2005;180(2): 258-66 ။ [PubMed]
ချန် H ကို, Matta စင်ကာပူဒေါ်လာ, Sharp က BM ။ မူးယစ်ဆေးဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာ access ကိုပေးသည်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသိမ်းယူမှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2007;32(3): 700-9 ။ [PubMed]
Cheronis JC, Erinoff L ကို, Heller တစ်ဦးက, Hoffman ဟာ PC မှာ။ အဆိုပါ nigrostriatal dopaminergic အာရုံခံ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ ontogeny ၏ Pharmacological ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဦးနှောက် Res ။ 1979;169(3): 545-60 ။ [PubMed]
Clark က DB, Kirisci L ကို, Tarter RE ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူစတင်ခြင်းနှင့်ယောက်ျားပေါင်းအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနှိုင်းယှဉ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေး။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1998;49(2): 115-21 ။ [PubMed]
Coccaro EF, Beresford B, Minar P ကို, Kaskow J ကို, Geracioti တီ CSF testosterone ဟော်မုန်း: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါနှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားအတွက်ကျူးကျော်ရန်ဆက်ဆံရေး Impulse နှင့် venturesomeness ။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ 2007;41(6): 488-92 ။ [PubMed]
Collins SL, Izenwasser အက်စ်နာတာရှည်နီကိုတင်း differential ဆယ်ကျော်သက် vs. အရွယ်ရောက်ပြီးသူသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်ကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုပွောငျးလဲ။ Neuropharmacology ။ 2004;46(3): 349-62 ။ [PubMed]
Collins SL, Montano R ကို, Izenwasser အက်စ်နီကိုတင်းကုသမှု periadolescent အထီးမဟုတ်အမျိုးသမီးသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေး-နှိုးဆွ locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းမြဲတိုးထုတ်လုပ်သည်။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 2004;153(2): 175-87 ။
ကှတျချ B, Hegstrom CD ကို, Villeneuve LS, Breedlove သည် SM ။ အဆိုပါကျောရိုးရှိသတ္တဝါကဦးနှောက်၏လိင်ကွဲပြားခြားနားမှု: အခြေခံမူများနှင့်ယန္တရားများ။ တပ်ဦး Neuroendocrinol ။ 1998;19(4): 323-62 ။ [PubMed]
Coulter CL, Happe ဟောင်ကောင်, Murrin LC ။ postnatal ကြွက် striatum အတွက် Dopamine Transporter ဖှံ့ဖွိုးတိုး: [3H] WIN 35,428 နဲ့ autoradiographic လေ့လာမှု။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1997;104(1-2): 55-62 ။
ကွိုင်း JT, ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ Axelrod ဂျေ tyrosine hydroxylase: ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ။ J ကို Neurochem ။ 1972;19(4): 1117-23 ။ [PubMed]
ယာဉ် RM ။ လိင် analgesic အတွက်ကွဲပြားမှု, အားဖြည့်, ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများနှင့် opioids ၏မော်တော်ဆိုးကျိုးများ။ Exp Clin Psychopharmacol ။ 2008;16(5): 376-85 ။ [PubMed]
Creutz LM, Kritzer MF ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များ၏ midbrain အတွက် estrogen receptor-beta ကို immunoreactivity: ဒေသဆိုင်ရာငျဒသေများနှင့်ဆယ်လူလာကိုဒေသခံတွေ A10, A9 နှင့် A8 dopamine ဆဲလ်အုပ်စုများဖြစ်သည်။ J ကို comp Neurol ။ 2002;446(3): 288-300 ။ [PubMed]
Creutz LM, Kritzer MF ။ Mesostriatal နှင့် midbrain အာရုံခံ၏ mesolimbic စီမံချက်များကြွက်များတွင်အီစရိုဂျင် receptor beta ကိုသို့မဟုတ်အန်ဒရိုဂျင် receptor များအဘို့ immunoreactive ။ J ကို comp Neurol ။ 2004;476(4): 348-62 ။ [PubMed]
သင်္ဘောသားက F, သူ J ကို, Hodge C. ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် cortical ဖှံ့ဖွိုးတိုး: စွဲဘို့အားနည်းချက်၏အရေးပါသောကာလ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2007;86(2): 189-99 ။ [PubMed]
သင်္ဘောသား FT, Boettiger CA. စွဲလမ်းများအတွက် Impulse, တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးများနှင့်စွန့်စားမှု။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2009;93(3): 237-47 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Cropsey KL, Linker ဂျာချောင်းမြောင်း DE ။ တစ်ဦးလူငယ်ပွုပွငျအလယ်ဗဟိုတွင်မြီးကောင်ပေါက်အကြားဆေးလိပ်များအတွက်လူမျိုးရေးနှင့်လိင်ကွဲပြားမှုတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2008;92(1-3): 156-63 ။ [PubMed]
Cruz FC အသင်း, Delucia R ကို, Planeta CS ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ထပ်ခါတလဲလဲနီကိုတင်း၏ differential အမူအကျင့်များနှင့် neuroendocrine ဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2005;80(3): 411-7 ။ [PubMed]
Czoty PW, Riddick NV, Gage, HD, Sandridge M က, Nader SH, Garg က S, ခညျြနှောငျ M က, Garg PK, Nader, MA ။ အမျိုးသမီး cynomolgus မျောက်တွေကို dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအပေါ်ရာသီစက်ဝန်းအဆင့်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2009;34(3): 548-54 ။ [PubMed]
Dakof GA ။ comorbidity နှင့်မိသားစုလုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စရပ်များ: ဆယ်ကျော်သက်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်ကျားမကွဲပြားမှုကိုနားလည်ခြင်း။ J ကို Psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါး။ 2000;32(1): 25-32 ။ [PubMed]
Dalley JW, Everitt BJ ။ သင်ယူမှု, မှတ်ဉာဏ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ် circuitry အတွက် Dopamine receptors ။ seminal ဆဲလ် Dev မှ Biol ။ 2009;20(4): 403-10 ။ [PubMed]
Dawes MA, Antelman သည် SM, Vanyukov MM, Giancola P ကို, Tarter RE, Susman EJ, Mezzich တစ်ဦးက, Clark က DB ။ ဆယ်ကျော်သက်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်ဖို့တာဝန်ယူမှုအတွက်အပြောင်းအလဲ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2000;61(1): 3-14 ။ [PubMed]
de ဝမ်း MD, Keshavan က MS, ဘီယာ SR, ခန်းမ J ကို, Frustaci K ကို Masalehdan တစ်ဦးက, Noll J ကို, Am Boring ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ရငျ့အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Cereb Cortex ။ 2001;11(6): 552-7 ။ [PubMed]
Dewing P ကို, ချင်းမိုင် CW, Sinchak K ကို Sim H ကို, Fernagut စာတိုက်, ကယ်လီက S, Chesselet MF, Micevych PE, အဲလ်ဘရက်ခ် KH, Harley VR, ယောက်ျား-တိကျတဲ့အချက် SRY အားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကဦးနှောက် function ကို၏ Vilain အီးတိုက်ရိုက်စည်းမျဉ်း။ Curr Biol ။ 2006;16(4): 415-20 ။ [PubMed]
di Chiara G. အနျူကလိယ shell ကိုနှင့်အဓိက dopamine accumbens: အပြုအမူများနှင့်စွဲလမ်းအတွက် differential ကိုအခန်းကဏ္ဍကို။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2002;137(1-2): 75-114 ။ [PubMed]
di Chiara, G, Bassareo V ကို, Fenu S က, De Lucas, MA, Spina L ကို, Cadoni ကို C, Acquas အီး, Carboni အီး, Valentini V ကို, Lecca ဃ Dopamine နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲ: အနျူကလိယ shell ကိုကွန်နက်ရှင် accumbens ။ Neuropharmacology ။ 2004;47 1: 227-41 ။ [PubMed]
Diala CC ကို, Muntaner ကို C, Walrath C. ကျား, လုပ်ငန်းခွင်များနှင့်အမေရိကန်, ကျေးလက်မြို့ပြနှင့်မြို့ပြနေထိုင်သူများအကြားအရက်သေစာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏လူမှုစီးပွားရေး Correlate ။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ 2004;30(2): 409-28 ။ [PubMed]
Dickinson SD, Kashawny SK ကို, Thiebes KP, ချားလ်စ် Dy ။ conditional ရာအရပျ preference ကိုတိုင်းတာအဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်အီသနောဆုလာဘ်မှ sensitivity ကိုလျော့နည်းသွားသည်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2009;33(7): 1246-51 ။ [PubMed]
Dominguez JM, Hull က EM ။ Dopamine က, medial preoptic ဧရိယာနှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2005;86(3): 356-68 ။ [PubMed]
Donnie EC, Caggiula AR, Rowell PP, Gharib MA, Maldovan V ကို, Booth က S, Mielke MM, ဟော့ဖ်မန်းတစ်ဦးက, ကြွက်များတွင် McCallum အက်စ်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး: estrous သံသရာသက်ရောက်မှု, လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်နီကိုတင်းအဲဒီ receptor ကိုစညျး။ Psychopharmacology (Berl) 2000;151(4): 392-405 ။ [PubMed]
Doremus TL, Brunell SC, Rajendran P ကို, လှံ LP ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်မှဆယ်ကျော်သက်ဆွေမျိုးအတွက်မြင့်မားသောအီသနောစားသုံးမှုလွှမ်းမိုးအချက်များ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2005;29(10): 1796-808 ။ [PubMed]
နိုင်ကြောင်း SL, Akil M က, Levey AI အ, Lewis က DA ။ မျောက် rostral entorhinal cortex အတွက် tyrosine hydroxylase- နှင့် dopamine Transporter-immunoreactive axon ၏ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ Cereb Cortex ။ 1998;8(5): 415-27 ။ [PubMed]
Erinoff L ကို, nigrostriatal အာရုံခံ၏ Heller အေ Functional ontogeny ။ ဦးနှောက် Res ။ 1978;142(3): 566-9 ။ [PubMed]
Ernst M က, Fudge JL ။ လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurobiological မော်ဒယ်: အ triadic node များ၏ခန္ဓာဗေဒ, ဆက်သွယ်မှုနဲ့ ontogeny ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2009;33(3): 367-82 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ernst M က, Mueller SC ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်: အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging သုတေသနကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ dev Neurobiol ။ 2008;68(6): 729-43 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ernst M က, ထင်းရူး DS, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်အပြုအမူများ၏ neurobiology ၏ Hardin အမ် Triadic မော်ဒယ်။ Psychol Med ။ 2006;36(3): 299-312 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Estroff TW, Schwartz RH အ, Hoffman ဟာ Ng ။ ဆယ်ကျော်သက်ကင်းအလွဲသုံးစားမှု။ စွဲလမ်းအလားအလာ, အမူအကျင့်များနှင့်စိတ်ရောဂါဆိုးကျိုးများ။ Clin ကလေး (Phila) 1989;28(12): 550-5 ။ [PubMed]
အီဗန်သည် SM ။ လူသားများတွင်စိတ်ကြွဆေး၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္သက်ရောက်မှုပြောင်းလဲပစ်အတွက် estradiol နှင့်အဓိကချို့ယွင်း၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Exp Clin Psychopharmacol ။ 2007;15(5): 418-26 ။ [PubMed]
အီဗန်သည် SM, Haney M က, Foltin RW ။ အမျိုးသမီးတွေအတွက်ရာသီစက်ဝန်း၏ follicular နှင့် luteal အဆင့်စဉ်အတွင်းသောက်သည်ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှုများ။ Psychopharmacology (Berl) 2002;159(4): 397-406 ။ [PubMed]
Everitt BJ, ဘီးလင်း: D, Economidou: D, Pelloux Y ကို, Dalley JW, Robbins TW ။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာအလေ့အထများနှင့်စွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့အားနည်းချက်အခြေခံအာရုံကြောယန္တရားများ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008;363(1507): 3125-35 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Faraday MM, Elliott သည် BM, Grunberg NE ။ ဆယ်ကျော်သက်ကြွက် vs. အရွယ်ရောက်ပြီးသူနာတာရှည်နီကိုတင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှ biobehavioral တုံ့ပြန်မှုအတွက်ကွာခြား။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2001;70(4): 475-89 ။ [PubMed]
Feltenstein မဂ္ဂါဝပ်, Byrd တို့ပါပဲ EA ၏, Henderson AR, ကြည့်ရှု RE ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အဓိကချို့ယွင်းကုသမှုအားဖြင့်ကိုကင်း-ရှာ၏ attenuation ။ Psychoneuroendocrinology ။ 2009;34(3): 343-52 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Feltenstein မဂ္ဂါဝပ်, ကြည့်ရှု RE ။ လွတ်လပ်စွာ estrous သံသရာတစ်လျှောက်အမျိုးသမီးကြွက်စက်ဘီးအတွက် plasma ချို့ယွင်းသောအဆင့်ဆင့်နှင့်ကိုကင်း-ရှာ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2007;89(2-3): 183-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Festa ED, Jenab S က, Weiner J ကို, Nazarian တစ်ဦးက, Niyomchai T က, Russo SJ, Kemen LM, Akhavan တစ်ဦးက, Wu HB, D1 အဲဒီ receptor activation အတွက် Quinones-Jenab V. ကင်း-သွေးဆောင်လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်လူတန်းစားကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုအပြီးအဆင့်ဆင့်ကိုစညျး။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 2006;68(4): 277-84 ။ [PubMed]
Forgie ML, အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်း Stewart ကဂျေလိင်ကွဲပြားမှု: အမွေးကင်းစကလေးများကာလအတွင်း testosterone ဟော်မုန်းထိတွေ့မှု၏အခန်းကဏ္ဍ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1993;46(3): 637-45 ။ [PubMed]
Forgie ML, အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ် prepubertal ovariectomy ၏ Stewart ကဂျေ Effect ။ Horm ပြုမူနေ။ 1994;28(3): 241-60 ။ [PubMed]
Frantz KJ, O'Dell LE, Parsons LH ။ periadolescent နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကင်းရန်အမူအကျင့်များနှင့် neurochemical တုံ့ပြန်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2007;32(3): 625-37 ။ [PubMed]
Fuchs RA, အီဗန် Ka, ထာ RH အ, ဖြစ်ရပ်မှန် JM, ကြည့်ရှု RE ။ ကြွက်များတွင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏အေးစက် cue-သွေးဆောင် reinstatement အပေါ်လိင်နှင့် estrous သိသိ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Psychopharmacology (Berl) 2005;179(3): 662-72 ။ [PubMed]
Gazzara RA, Fisher က RS, Howard စင်ကာပူဒေါ်လာ။ ကြွက်များ၏ caudate-putamen အတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ရာ ontogeny ။ ဦးနှောက် Res ။ 1986;393(2): 213-20 ။ [PubMed]
Geier ကို C, Luna ခမက်လုံးပေးအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏ရငျ့။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2009;93(3): 212-21 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gelbard HA, Teicher MH, Faedda, G, Baldessarini RJ ။ ကြွက် striatum အတွက် dopamine D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor ဆိုဒ်များ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1989;49(1): 123-30 ။
Gerra, G, Angioni L ကို, Zaimovic တစ်ဦးက, Moi, G, Bussandri M က, Bertacca S က, Santoro, G, Gardini S က, Caccavari R ကို, Nicoli MA ။ High-ကျောင်းမှကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားဥစ္စာအသုံးပြုမှု: စိတ်ထားနှင့်အတူဆက်ဆံရေးကို, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ, မိဘစောင့်ရှောက်မှုသညာ။ Subst အသုံးပြုမှုလွဲအသုံးပြုခြင်း။ 2004;39(2): 345-67 ။ [PubMed]
Giedd ဖြစ်မှု, Clasen LS, Lenroot R ကို, Greenstein: D, Wallace GL, Ordaz S က, Molloy EA ၏, Blumenthal JD, Tossell JW, Stayer ကို C, Samango-Sprouse, CA, Shen: D, Davatzikos ကို C, Merke: D, Chrousos မိသားစုဆရာဝန်။ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်အပျိုဖော်ဝင်-related လွှမ်းမိုးမှု။ Mol ဆဲလ် Endocrinol ။ 2006;254-255: 154-62 ။ [PubMed]
Giedd ဖြစ်မှု, Lalonde FM ရေ, Celano MJ, White, SL, Wallace GL, Lee ကရော်ဘာ, Lenroot RK ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏ခန္ဓာဗေဒဦးနှောက်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009;48(5): 465-70 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gilmore JH, လင်း W က, Prastawa မဂ္ဂါဝပ်, Looney သမဝါယမ, Vetsa YS, Knickmeyer RC, အီဗန် DD, စမစ် JK, Hamer-RM, Lieberman ဂျာဟာမွေးကင်းစကလေးများသည်ဦးနှောက်အတွင်းရှိ Gerig G. အဒေသဆိုင်ရာမီးခိုးရောင်ကိစ္စကြီးထွားမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism နှင့်ဦးနှောက် asymmetry ။ J ကို neuroscience ။ 2007;27(6): 1255-60 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Giorgi အို De Monty, G, Porceddu ML, Mele-S က, Calderini, G, Toffano, G, Biggio G. အ Developmental နှင့် D1-dopamine receptors နှင့်ကြွက် striatum အတွက် dopamine အကြောင်းအရာအတွက်အသက်-related အပြောင်းအလဲများကို။ ဦးနှောက် Res ။ 1987;432(2): 283-90 ။ [PubMed]
Goldman-Rakic ​​PS, Brown က RM ။ မျောက်တွေကို၏နှောက် cortex အတွက် monoamine အကြောင်းအရာနှင့်ပေါင်းစပ်၏ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ဦးနှောက် Res ။ 1982;256(3): 339-49 ။ [PubMed]
Ka, Johanson အဒေီပေးသနား။ အခမဲ့-နို့တိုက်ကျွေးမှုမျောက်တွေကိုအတွက်ခံတွင်းအီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှု။ အရက် Clin Exp Res ။ 1988;12(6): 780-4 ။ [PubMed]
Grimm JW, RE ကိုကြည့်ပါ။ ovariectomized ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး, အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်အားဖြင့်ခန့်မှန်း 17-beta ကို estradiol အားဖြင့် attenuated နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောလိင်အင်္ဂါ cytology နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Physiol ပြုမူနေ။ 1997;61(5): 755-61 ။ [PubMed]
Haycock JW, Becker က L ကို, အန်း L ကို, Furukawa Y ကို, Hornykiewicz အိုကိရှ SJ ။ dopamine အတွက်အသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများနှင့်လူ့ striatum အခြား presynaptic dopaminergic အမှတ်အသားများအကြားကွာဟမှုမှတ်သား။ J ကို Neurochem ။ 2003;87(3): 574-85 ။ [PubMed]
Higuera-မာတာတစ်ဦးက, Botreau က F, Miguens M က, Del Olmo N ကို, Borcel အီး, ဖာရ-Alvarez L ကို, Garcia က-Lecumberri ကို C, Ambrosio အီးနာတာရှည် periadolescent cannabinoid ကုသမှုအထီး Wistar ကြွက်များတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ hippocampal PSA-NCAM စကားရပ်ပိုကောင်းစေပါတယ်သာမဖြစ်စလောက်ရှိပါတယ် စိုးရိမ်စိတ်, သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2009;93(4): 482-90 ။ [PubMed]
Higuera-မာတာတစ်ဦးက, Soto-မွန်တီနီဂရိုး ML, del Olmo N ကို, Miguens M က, တောရက်စ်ငါ Vaquero JJ, Sanchez J ကို, Garcia က-Lecumberri ကို C, Desco M က, ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်များတွင်ပြောင်းလဲဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်၏ Ambrosio အီးတိုးပွားဝယ်ယူ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးသော်လည်းမမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းတစ် cannabinoid agonist ထိတွေ့အထီးကြွက်များ။ Neuropsychopharmacology ။ 2008;33(4): 806-13 ။ [PubMed]
Holdstock L ကို, ရာသီစက်ဝန်း၏လေးအဆင့်မှာအီသနောဒက de ကျေးအိပ်ချ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2000;150(4): 374-82 ။ [PubMed]
ဟူ M က, Becker က JB ။ ကြွက်များတွင်ကင်းရန်အမူအကျင့်ာင်းအပေါ်လိင်နှင့်အီစရိုဂျင်၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို neuroscience ။ 2003;23(2): 693-9 ။ [PubMed]
ဟူ M က, Crombag HS, ရော်ဘင်ဆင် TE, Becker က JB ။ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းရန် propensity အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု၏ဇီဝအခြေခံ။ Neuropsychopharmacology ။ 2004;29(1): 81-5 ။ [PubMed]
ဟူ M က, Watson ဟာ CJ, ​​ကနေဒီ RT ကို, Becker က JB ။ Estradiol ကြွက် striatum အတွက် extracellular ဂါဘမြို့သားအတွက် K + -induced တိုး attenuates ။ synapses ။ 2006;59(2): 122-4 ။ [PubMed]
Hull က EM, Lorraine DS, ဒူ J ကို, Matuszewich L ကို, Lumley LA က, Putnam SK ကို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထိန်းချုပ်မှုမောရှေဂျေဟော်မုန်း-neurotransmitter interaction က။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1999;105(1): 105-16 ။ [PubMed]
Huttenlocher PR စနစ်။ လူ့တိုကျရိုကျ cortex အတွက် Synaptic သိပ်သည်းဆ - ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများနှင့်အိုမင်း၏သက်ရောက်မှုများ။ ဦးနှောက် Res ။ 1979;163(2): 195-205 ။ [PubMed]
Isralowitz R ကို, ဣသရေလအမျိုး၌အမြင့်ဆုံးစွန့်စားမှုမြီးကောင်ပေါက်အကြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ပျံ့နှံ့မှုအတွက် Rawson R. ကျားကွဲပြားခြားနားမှု။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2006;31(2): 355-8 ။ [PubMed]
Itzhak Y ကို, Anderson က KL ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်အီသနော-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်း: အ nNOS ဗီဇ၏အခန်းကဏ္ဍ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2008;32(10): 1839-48 ။ [PubMed]
ကြွက်များ၏ substia nigra ၏ dopaminergic အာရုံခံအတွက် Jackson-Lewis က V ကို, Vila M, Djaldetti R ကို, Guegan ကို C, Liberatore, G, Liu J ကို, O'Malley KL, Burke ကို RE, Przedborski အက်စ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဆဲလ်သေ။ J ကို comp Neurol ။ 2000;424(3): 476-88 ။ [PubMed]
ဂျွန်ဆင်က M, နေ့တစ်ဦးက, ဟိုကို C, Walker က QD, Franics R ကို, Kuhn CM ။ အန်ဒရိုဂျင်ကြွက် midbrain အတွက် dopamine အာရုံခံရှင်သန်မှုလျော့နည်းစေပါသည်။ ဂျေဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2009b တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
ဂျွန်ဆင်က M, ဟိုကို C, နေ့တစ်ဦးက, Walker က QD, Franics R ကို, Kuhn CM ။ estrogen receptor ကြွက် midbrain အတွက် dopamine အာရုံခံရှင်သန်မှုမြှင့်တင်ရန်။ ဂျေဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2009a တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
Johnston LD, Bachman JG, O'Malley pm တွင်။ အနာဂတ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း။ လူနေမှုပုံစံနှင့်စံနှုန်းများကိုဆက်လက်လေ့လာခြင်း 2007
ရေ့စ်ဂျေ, ကြွက်များတွင်အတင်းအကျပ်နှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်စားသုံးမှုစဉ်အတွင်းအရက်သေစာသောက်သုံးပုံစံများအတွက် Barrios က de Tomasi အီးလိင်ကွဲပြားမှု။ အရက်။ 1999;19(1): 15-22 ။ [PubMed]
Kalivas PW, ဆန္ဒပြ neuroplasticity တစ်ဦးရောဂါဗေဒအဖြစ် O 'Brien C. မူးယစ်ဆေးစွဲ။ Neuropsychopharmacology ။ 2008;33(1): 166-80 ။ [PubMed]
Kalsbeek တစ်ဦးက, Voorn P ကို, Buijs RM, ရေကူးကန် CW, Uylings HB ။ ကြွက်များ၏ prefrontal cortex အတွက် dopaminergic innervation ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ J ကို comp Neurol ။ 1988;269(1): 58-72 ။ [PubMed]
Kantak KM, Goodrich CM, ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်လိင်, estrous သံသရာနှင့်မူးယစ်ဆေး-စတင်ခြင်းအသက် Uribe V. သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (Rattus norvegicus) Exp Clin Psychopharmacol ။ 2007;15(1): 37-47 ။ [PubMed]
Kerstetter Ka, Kantak KM ။ လှုံ့ဆော်မှု-ဆုလာဘ်သင်ယူမှုအပေါ်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းများ differential ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 2007;194(3): 403-11 ။ [PubMed]
Kirksey DF, Slotkin က TA ။ ကြွက်ဦးနှောက်ဒေသများတွင် [3H] -dopamine နှင့် [3H] -5-hydroxytryptamine လွှာမှစနစ်များ Concomitant ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ br J ကို Pharmacol ။ 1979;67(3): 387-91 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kolbinger W က, Trepel M က, Beyer ကို C, Pilgrim ကို C, Reisert ဗြဲစသည်တို့နှင့် Vivo အတွက် diencephalic dopaminergic အာရုံခံ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုအပေါ်မျိုးရိုးဗီဇလိင်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1991;544(2): 349-52 ။ [PubMed]
Kolta MG, Scalzo FM ရေ, အလီ SF, Holson RR ။ စိတ်ကြွဆေး-pretreated ကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေးဖို့တိုးမြှင့်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု Ontogeny ။ Psychopharmacology (Berl) 1990;100(3): 377-82 ။ [PubMed]
Koob gf ။ Hedonic valence, dopamine နဲ့လှုံ့ဆျောမှု။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1996;1(3): 186-9 ။ [PubMed]
Korenbrot CC ကို, Huhtaniemi အိုင်တီ, Weiner RI က။ အထီးကြွက်များတွင် pubertal ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ပြင်ပနိမိတ်လက္ခဏာအဖြစ် Preputial ခွဲခြာ။ Biol Reprod ။ 1977;17(2): 298-303 ။ [PubMed]
Kota D ကိုမာတင် BR, ရော်ဘင်ဆင် SE, Damaj MI ။ နီကိုတင်းမှီခိုနှင့်ဆုလာဘ်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်အကြားကွဲပြားခြားနား။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2007;322(1): 399-407 ။ [PubMed]
Kritzer MF ။ ရွေးချယ်သည့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ intracellular gonadal ဟော်မုန်း receptors နှင့် tyrosine hydroxylase များအတွက် immunoreactivity ၏ colocalization, substantia nigra, နှင့်ကြွက်များတွင် retrorubral လယ်ကွင်း။ J ကို comp Neurol ။ 1997;379(2): 247-60 ။ [PubMed]
Kritzer MF ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များတွင်နှောက် cortex ၏ catecholamines innervation အပေါ်စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည် gonadectomy ၏ဆိုးကျိုးများ: axon ၏အာရုံမခံစားနိုင်သော gonadal steroids မှ dopamine-beta-hydroxylase များအတွက် immunoreactive နှင့်သားအိမ်နှင့် testicular ဟော်မုန်းမှ tyrosine hydroxylase များအတွက် immunoreactive axon ၏ sensitivity ကို differential ။ J ကို comp Neurol ။ 2000;427(4): 617-33 ။ [PubMed]
Kritzer MF ။ ရေရှည် gonadectomy အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များ၏ medial prefrontal cortical အတွက် tyrosine hydroxylase- သော်လည်းမ dopamine-beta-hydroxylase-, choline acetyltransferase- သို့မဟုတ် serotonin-immunoreactive axon ၏သိပ်သည်းဆသက်ရောက်သည်။ Cereb Cortex ။ 2003;13(3): 282-96 ။ [PubMed]
Kritzer MF, Adler တစ်ဦးက, Bethea CL ။ အဆိုပါမျောက် Corpus striatum အတွက် tyrosine hydroxylase နှင့် serotonin များအတွက် immunoreactivity ၏သိပ်သည်းဆအပေါ်သားအိမ်ဟော်မုန်းလွှမ်းမိုးမှု။ neuroscience ။ 2003;122(3): 757-72 ။ [PubMed]
Kritzer MF, ဘရူတစ်ဦးက, Montalmant က F, Davenp သို့မဟုတ် t M က, ရော်ဘင်ဆင် JK ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များတွင် prefrontal cortical function ကိုတိုင်းတာခြင်းအော်ပရေတာလုပ်ငန်းများကိုအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် gonadectomy ၏ဆိုးကျိုးများ။ Horm ပြုမူနေ။ 2007;51(2): 183-94 ။ [PubMed]
Kritzer MF, Creutz LM ။ ကြွက်များတွင် mesocortical စီမံကိန်းများတွင် intracellular အီစရိုဂျင်နှင့်အန်ဒရိုဂျင် receptor များအဘို့မဲဆန္ဒနယ် dopamine အာရုံခံခြင်းနှင့် immunoreactivity အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်လိင်ကွဲပြားမှု။ J ကို neuroscience ။ 2008;28(38): 9525-35 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kritzer MF, Kohama စင်ကာပူဒေါ်လာ။ သားအိမ်ဟော်မုန်းဟာ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, အရွယ်ရောက်ပြီးသူမျောက်တွေကို၏ dorsolateral prefrontal cortex အတွက် tyrosine hydroxylase immunoreactive axon ၏သိပ်သည်းဆကိုသြဇာလွှမ်းမိုး။ J ကို comp Neurol ။ 1998;395(1): 1-17 ။ [PubMed]
Kritzer MF, McLaughlin PJ, Smirlis T က, ရော်ဘင်ဆင် JK ။ Gonadectomy အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက် T-ဝင်္ဝယ်ယူချို့ယွင်း။ Horm ပြုမူနေ။ 2001;39(2): 167-74 ။ [PubMed]
Kuhn CM, Walker က QD, Kaplan Ka လီ ST ။ လိင်, steroids နှင့်လှုံ့ဆော် sensitivity ကို။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2001;937: 188-201 ။ [PubMed]
Lancaster FE, Brown က TD, Coker KL, Elliott သည်ဂျာ Wren SB ။ အရက် preference ကိုသောက်ခြင်းပုံစံများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုအစောပိုင်း postpubertal ကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်လာကြသည်။ အရက် Clin Exp Res ။ 1996;20(6): 1043-9 ။ [PubMed]
Lancaster FE, Spiegel KS ။ အရက်သောက်၏ပုံစံအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ အရက်။ 1992;9(5): 415-20 ။ [PubMed]
Lauder က JM, Bloom FE ။ အဆိုပါ locus coeruleus, Raphe အရေးပါနှင့်ကြွက်များ၏ substantia nigra အတွက် monoamine အာရုံခံ၏ Ontogeny ။ ဗြဲဆဲလ်အမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားခြင်း။ J ကို comp Neurol ။ 1974;155(4): 469-81 ။ [PubMed]
Laviola, G, Adriani W က, Terranova ML, လူ့ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်တိရစ္ဆာန်အမော်ဒယ်များအတွက် psychostimulants မှအားနည်းချက်များအတွက် Gerra G. အ Psychobiological အန္တရာယ်အချက်များ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 1999;23(7): 993-1010 ။ [PubMed]
Laviola, G, Gioiosa L ကို, Adriani W က, Palanza P. D-စိတ်ကြွဆေး-ဆက်စပ်အားဖြည့်သက်ရောက်မှုအီစထိုဂျင် endocrine disruptors မှမွေးဖွားမီထိတွေ့ကြွက်များတွင်လျှော့ချနေကြသည်။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 2005;65(3): 235-40 ။ [PubMed]
Laviola, G, Macri S က, Morley-ဖလက်ချာက S, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင် Adriani ဒဗလျူအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူ: psychobiological ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အစောပိုင်းဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2003;27(1-2): 19-31 ။ [PubMed]
Laviola, G, Pascucci T က, Pieretti အက်စ် Striatal dopamine ာင်း periadolescent D-စိတ်ကြွဆေးမှမဟုတ်ဘဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များဖြစ်သည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2001;68(1): 115-24 ။ [PubMed]
သည် Le Moal က M ရှိမုန်အိပ်ချ် Mesocorticolimbic dopaminergic ကွန်ယက်ကို: functional ဖြစ်စေခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းအခန်းကဏ္ဍ။ Physiol ဗျာ 1991;71(1): 155-234 ။ [PubMed]
Lee က VW တို့, မွေးဖွားထံမှက de Kretser DM, Hudson B, အထီးကြွက်များတွင်သွေးရည်ကြည် FSH, LH နှင့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အတွက်ဝမ် C. အပြောင်းအလဲတွေဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်ရန်။ J ကို Reprod ဓာတ်မြေသြဇာ။ 1975;42(1): 121-6 ။ [PubMed]
Lenroot RK, Giedd ဖြစ်မှု။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: ခန္ဓာဗေဒသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2006;30(6): 718-29 ။ [PubMed]
Leranth C, Roth RH, Elsworth JD, Naftolin F, Horvath TL, Redmond DE ။ Jr Estrogen သည် nigrostriatal dopamine neuron များကိုမျောက်ဝံများရှိထိန်းသိမ်းရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်မှတ်ဥာဏ်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2000;20(23): 8604-9 ။ [PubMed]
Levesque: D, နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ပြီးနောက် Di Paolo တီ Dopamine အဲဒီ receptor ပြန်ပေါ်လာ: ovariectomized ကြွက်များ၏နာတာရှည် estradiol ကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှု။ Mol Pharmacol ။ 1991;39(5): 659-65 ။ [PubMed]
Levin ED, လောရင့်အက်စ်အက်စ်, Petro တစ်ဦးက, Horton ကငွေကျပ်, Rezvani AH, Seidler FJ, Slotkin က TA ။ အထီးကြွက်များတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-စတင်ခြင်းနီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး vs. ဆယ်ကျော်သက်: အကျိုးသက်ရောက်၏ကြာချိန်နှင့် differential ကိုနီကိုတင်းအဲဒီ receptor Correlate ။ Neurotoxicol Teratol ။ 2007;29(4): 458-65 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Levin ED, Rezvani AH, Montoya: D, နှင်းဆီ je, Swartzwelder HS ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လုပ်ပါတယ်ဆယ်ကျော်သက်-စတင်ခြင်းနီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2003;169(2): 141-9 ။ [PubMed]
လီကို C, Frantz KJ ။ periadolescence စဉ်အတွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားအထီးကြွက်များတွင်ရှာကြံကင်း၏ attenuation ပေါက်ဖွား။ Psychopharmacology (Berl) 2009;204(4): 725-33 ။ [PubMed]
Lin က MY, Walters က DE ။ ကြွက်များတွင် Dopamine D2 autoreceptors အသက်အပြုအမူ 21 မှာအလုပ်လုပ်တဲ့သော်လည်းမ 10 ရက်ပေါင်းဖြစ်ကြသည်။ Psychopharmacology (Berl) 1994;114(2): 262-8 ။ [PubMed]
Long က SF, ဒဲနစ် LA က, စယ် RK, Benson Ka, Wilson က MC ။ testosterone implantation ကိုကင်းများ၏မော်တာဆိုးကျိုးများလျော့နည်းစေသည်။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 1994;5(1): 103-106 ။ [PubMed]
လိုပက်ဇ်က M, Simpson: D, White က N ကို, Randall C. Age- နှင့်အရက်ထဲမှာလိင်-related ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့် C57BL / 6J ကြွက်တွေမှာနီကိုတင်းဆိုးကျိုးများ။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2003;8(4): 419-27 ။ [PubMed]
Lynch WJ ။ မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှအားနည်းချက်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Exp Clin Psychopharmacol ။ 2006;14(1): 34-41 ။ [PubMed]
Lynch WJ ။ သိမ်းယူမှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု: လိင်၏ဆိုးကျိုးများနှင့် gonadal ဟော်မုန်း။ Psychopharmacology (Berl) 2008;197(2): 237-46 ။ [PubMed]
Lynch WJ ။ လိင်နှင့်သားအိမ်ဟော်မုန်းကြွက်များတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းနီကိုတင်းအဘို့အအားနည်းချက်နှင့်လှုံ့ဆျောမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုး။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 2009
Lynch WJ, Roth ME, ကာရိုး ME ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုများတွင်လိင်ကွဲပြားမှု၏ဇီဝအခြေခံ: preclinical နှင့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများ။ Psychopharmacology (Berl) 2002;164(2): 121-37 ။ [PubMed]
MacLusky NJ, ဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏ Naftolin အက်ဖ်လိင်ကွဲပြားခြားနားမှု။ သိပ္ပံ။ 1981;211(4488): 1294-302 ။ [PubMed]
Marinelli M က, Rudick CN, Hu XT, အဖြူရောင် FJ ။ dopamine အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်: မော်ဂျူနှင့်ဇီဝကမ္မအကျိုးဆက်များ။ CNS Neurol disorders မူးယစ်ဆေးပစ်မှတ်။ 2006;5(1): 79-97 ။ [PubMed]
မာတင်, CA, ကယ်လီ TH, Rayens MK, Brogli B, Himelreich K ကို Brenzel တစ်ဦးက, Bingcang CM, အိုမာအိပ်ချ် Sensation ရှာကြံနှင့်နှောင့်အယှက်ရောဂါလက္ခဏာတွေ: အစောပိုင်းအတွက်နီကိုတင်း, အရက်နှင့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့နှင့်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်။ Psychol ကိုယ်စားလှယ်။ 2004;94(3 Pt 1): 1075-82 ။ [PubMed]
မာတင်, CA, ကယ်လီ TH, Rayens MK, Brogli BR, Brenzel တစ်ဦးက, စမစ် WJ, အိုမာ HA ။ Sensation ရှာ, အပျိုဖော်ဝင်နှင့်နီကိုတင်း, အရက်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;41(12): 1495-502 ။ [PubMed]
Mathews IZ, မက်ကော်မစ် CM ။ နှောင်းပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်အမျိုးသမီးနှင့်အထီးကြွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူများထံမှကွဲပြားပေမယ့်မပေးစိတ်ကြွဆေးအဘို့အခွအေနမြေားရာအရပျ preference ကိုပါ။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 2007;18(7): 641-50 ။ [PubMed]
မက်က်အာ S က, McHale အီး, Gillies GE ။ midbrain dopaminergic လူဦးရေ၏အရွယ်အစားနှင့်ဖြန့်ဖြူးအမြဲတမ်းအတွက်တစ် sex- ဒေသနှင့်အချိန်-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌ perinatal glucocorticoid ထိတွေ့မှုအားဖြင့်ပြောင်းလဲနေကြသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2007;32(7): 1462-76 ။ [PubMed]
McBride WJ, မာဖီ JM, ဦးနှောက်အားဖြည့်ယန္တယား၏ Ikemoto အက်စ် Localization: intracranial Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် intracranial ရာအရပျ-အေးစက်လေ့လာမှုများ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1999;101(2): 129-52 ။ [PubMed]
McCutcheon je, Marinelli အမ်ခေတ်ကိစ္စရပ်များ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2009;29(5): 997-1014 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
McDougall လုပ် SA, Duke MA, Bolanos, CA, ခရော CA. ကြွက်များတွင်အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်း Ontogeny: တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက် dopamine agonists ၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 1994;116(4): 483-90 ။ [PubMed]
McQuown SC, Dao JM, Belluzzi JD, Leslie FM ရေ။ ကြွက်များတွင်ကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူ plasticity အပေါ်အနိမ့်ထိုးနီကိုတင်းကုသမှုအသက်အရွယ်-မှီခိုသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2009
Meco, G, Rubino A, Caravona N, Valente အမ်ပါကင်ဆန်ရောဂါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု။ ပါကင် Related disorders ။ 2008;14(6): 451-6 ။ [PubMed]
Mello NK, Knudson ထားတဲ့ IM, Mendelson JH ။ လိင်နှင့် cynomolgus မျောက်တွေကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးတက်သောအချိုးအစားအတိုင်းအတာအပေါ်ရာသီစက်ဝန်းဆိုးကျိုးများ။ Neuropsychopharmacology ။ 2007;32(9): 1956-66 ။ [PubMed]
Meng SZ, Ozawa Y ကို, Itoh M က, Takashima အက်စ် Developmental နှင့်အသက်အရွယ်-related dopamine ပို့ဆောင်ရေးစသောအပြောင်းအလဲနှင့်လူ့ Basal ganglia အတွက် dopamine D1 နှင့် D2 receptors ။ ဦးနှောက် Res ။ 1999;843(1-2): 136-44 ။ [PubMed]
Meyer EM, Jr က Lytle ld ။ လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ကြွဆေး၏ဇီဝကမ္မသဘောများတွင်ကွဲပြားမှုနှင့်ကြွက်အတွက်၎င်း၏ metabolites ။ proc အနောက် Pharmacol Soc ။ 1978;21: 313-6 ။ [PubMed]
Milesi-Halle တစ်ဦးက, Hendrickson HP က, Laurenzana EM, Gentry သည့် WB, Owen သည် SM ။ (+) ၏ pharmacokinetics နှင့် pharmacodynamics အတွက် Sex- နှင့်ထိုး-မှီခို - စိတ်ကြွဆေးနှင့်၎င်း၏ metabolite (+) - ကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေး။ Toxicol Apple က Pharmacol ။ 2005;209(3): 203-13 ။ [PubMed]
ဂူ DM, Lawler က CP, စာပို့သမား RB, Gilmore JH ။ လူ့ caudate နှင့် putamen အတွက် dopamine D1 အဲဒီ receptor ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း။ Neuropsychopharmacology ။ 1999;21(5): 641-9 ။ [PubMed]
Morissette M က, Biron: D, ကြွက် striatal dopamine လွှာမှက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင် estradiol နှင့်အဓိကချို့ယွင်း၏ Di Paolo တီ Effect ။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 1990;25(3): 419-22 ။ [PubMed]
Morissette M ကို, ဦးနှောက် dopamine လွှာမှက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင် ovariectomized ကြွက်များ၏နာတာရှည် estradiol နှင့်အဓိကချို့ယွင်းကုသမှု၏ Di Paolo တီ Effect ။ J ကို Neurochem ။ 1993;60(5): 1876-83 ။ [PubMed]
Morissette M က, Di Paolo တီလိင်နှင့်ကြွက် striatal dopamine လွှာမှဆိုဒ်များ estrous သံသရာများပါတယ်။ Neuroendocrinology ။ 1993;58(1): 16-22 ။ [PubMed]
Morissette M ကအမျိုးသမီး hemiparkinsonian မျောက်များ၏ striatal dopamine လှုပ်ရှားမှုအပေါ် estradiol ၏ Di Paolo တီ Effect ။ J ကို neuroscience Res ။ 2009;87(7): 1634-44 ။ [PubMed]
Morissette M၊ Le Saux M, D'Astous M, Jourdain S, Al Sweidi S, Morin N, Estrada-Camarena E, Mendez P, Garcia-Segura LM, Di Paolo T. Estrogen receptor alpha နှင့် beta တို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဦး နှောက်ထဲမှာ estradiol ။ J ကို Steroid တစ်မျိုးထဲကဓာတုပစ်စညျး Mol Biol ။ 2008;108(3-5): 327-38 ။ [PubMed]
မောရစ်ဂျာယော်ဒန်မြစ် CL, Breedlove သည် SM ။ အဆိုပါကျောရိုးရှိသတ္တဝါနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏လိင်ကွဲပြားခြားနားမှု။ နတ် neuroscience ။ 2004;7(10): 1034-9 ။ [PubMed]
Munro, CA, McCaul ME, Oswald LM, Wong က DF, Zhou Y ကို, Brasic J ကို, Kuwabara H ကို, Kumar ကတစ်ဦး, အလက်ဇန်းဒါးက M, သငျတို့သ W က, Wand GS ။ အရက်၏ Striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်မိသားစုသမိုင်း။ အရက် Clin Exp Res ။ 2006;30(7): 1143-51 ။ [PubMed]
Munro, CA, McCaul ME, Wong က DF, Oswald LM, Zhou Y ကို, Brasic J ကို, Kuwabara H ကို, Kumar ကတစ်ဦး, အလက်ဇန်းဒါးက M, သငျတို့သ W က, Wand GS ။ ကျန်းမာလူကြီးများအတွက် striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;59(10): 966-74 ။ [PubMed]
Myers DP, Andersen က AR ။ ဆယ်ကျော်သက်စွဲ။ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်။ J ကိုကလေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု။ 1991;5(2): 86-93 ။ [PubMed]
NHSDUH ။ ကနျြးမာရေးနှင့်လူ့န်ဆောင်မှုများ၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဦးစီးဌာန။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲ။ အသုံးချလေ့လာရေးရုံး။ မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုမှုနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ်အမျိုးသားစစ်တမ်း, 2007 2007
အရက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြဿနာများအတွက်အန္တရာယ်အချက်များနှင့်အကျိုးဆက်များအတွက် Nolen-Hoeksema အက်စ်ကျားကွဲပြားခြားနားမှု။ Clin Psychol ဗျာ 2004;24(8): 981-1010 ။ [PubMed]
Nomura Y ကို, Naitoh က F, postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတစဉ်အတွင်းကြွက်ဦးနှောက်၏ monoamine အကြောင်းအရာနှင့်လွှာမှအတွက် Segawa တီဒေသဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို။ ဦးနှောက် Res ။ 1976;101(2): 305-15 ။ [PubMed]
O'Dell LE, Bruijnzeel AW, Ghozland S, Markou A, Koob GF ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အရွယ်ရောက်ကြွက်များတွင်နီကိုတင်းဆုတ်ခွာ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004;1021: 167-74 ။ [PubMed]
O'Dell LE, Bruijnzeel AW, Smith က RT ကို, Parsons LH, Merv ML, Goldberg BA, ရစ်ချတ်ဆန် HN, Koob gf, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင် Markou အေလျော့နီကိုတင်းဆုတ်ခွာ: စွဲမှအားနည်းချက်များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Psychopharmacology (Berl) 2006;186(4): 612-9 ။ [PubMed]
O'Dell LE, တောရက်စ် OV, Natividad LA က, Tejeda HA ။ ဆယ်ကျော်သက်နီကိုတင်းထိတွေ့အထီးကြွက်များတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနီကိုတင်းထိတွေ့မှုမှဆုတ်ခွာဆွေမျိုးများ၏လျော့နည်းထိခိုက်စေအစီအမံထုတ်လုပ်သည်။ Neurotoxicol Teratol ။ 2007;29(1): 17-22 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ojeda SR, Andrews က WW, Advis JP, White ကအက်စ်အက်စ်။ အပျိုဖော်ဝင်များ၏ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်တွင်လတ်တလောတိုးတက်မှုတွေ။ Endocr ဗျာ 1980;1(3): 228-57 ။ [PubMed]
Ojeda SR, Urbanski HF, Ahmed ကအဒေီ။ အမျိုးသမီးအပျိုဖော်ဝင်စတင်ခြင်း: ကြွက်များတွင်လေ့လာမှုများ။ မကြာမီကပရိုဂရမ် Horm Res ။ 1986;42: 385-442 ။ [PubMed]
ဦး TF, Kholodilov N ကို, Burke က RE ။ Vivo အတွက် striatal glial ဆဲလ်လိုင်း-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်အားဖြင့် substantia nigra ၏ dopaminergic အာရုံခံသဘာဝဆဲလ်သေမင်း၏စည်းမျဉ်း။ J ကို neuroscience ။ 2003;23(12): 5141-8 ။ [PubMed]
Ovtscharoff W က, Eusterschulte B, Zienecker R ကို, Reisert ငါကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြွက် striatum အတွက် dopaminergic အမျှင်များနှင့် GABAergic အာရုံခံ၏သိပ်သည်းဆ Pilgrim C. လိင်ကွဲပြားမှု။ J ကို comp Neurol ။ 1992;323(2): 299-304 ။ [PubMed]
Palmer က RH အ, Young က SE, Hopfer CJ, Corley RP, တင်းကုပ် MC, Crowley တီဂျေ, ဝစ် JK ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီးအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါ: အထွေထွေအန္တရာယ်များ၏အထောက်အထား။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2009;102(1-3): 78-87 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Pandolfo P ကို, Vendruscolo LF, Sordi R ကို, Takahashi RN ။ အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ၏ကောက်ကာငင်ကာသွေးတိုးရောဂါကြွက်-တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက် Cannabinoid-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို။ Psychopharmacology (Berl) 2009;205(2): 319-26 ။ [PubMed]
သိပ်မရှိပါဘူး RG, Agmo အေ dopamine လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ဇီဝကမ္မအခန်းကဏ္ဍရှိပါသလား အထောက်အထား၏တစ်ဦးကဝေဖန်သုံးသပ်မှု။ prog Neurobiol ။ 2004;73(3): 179-226 ။ [PubMed]
Parylak SL, Caster JM, Walker က QD, Kuhn CM ။ Gonadal steroids ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးကင်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျားအတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်အပြောင်းအလဲများကိုဖျန်ဖြေ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008;89(3): 314-23 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
pause T က, Keshavan M က, Giedd ဖြစ်မှု။ အဘယ်ကြောင့်အများအပြားစိတ်ရောဂါမမှန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပေါ်ထွက်လာသလဲ? နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2008;9(12): 947-57 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Peper JS, Brouwer RM, Schnack HG, ဗန်ဗာလဘုရား GC, ဗန် Leeuwen က M, ဗန်တွင်း Berg က SM, Delemarre-ဗန်က de Waal HA, Boomsma ပစ, Kahn သည် RS, Hulshoff Pol HE ။ pubertal ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအတွက် sex စတီရွိုက်နှင့်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ။ Psychoneuroendocrinology ။ 2009;34(3): 332-42 ။ [PubMed]
Perkins Ka, Donnie အီး, Caggiula AR ။ နီကိုတင်းဆိုးကျိုးများနှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု: လူ့နှင့်တိရစ္ဆာန်အထောက်အထားပြန်လည်သုံးသပ်။ နီကိုတင်းတောဘ Res ။ 1999;1(4): 301-15 ။ [PubMed]
ပယ်ရီ JL, အန်ဒါဆင်ဟာ MM, နယ်လ်ဆင် SE, ကာရိုး ME ။ ရွေးချယ်မြင့်အနိမ့် saccharin စားသုံးမှုများအတွက်မွေးမြူဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များတွင်ဃကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသိမ်းယူမှု။ Physiol ပြုမူနေ။ 2007;91(1): 126-33 ။ [PubMed]
ပယ်ရီ JL, ကာရိုး ME ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုများတွင်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Psychopharmacology (Berl) 2008;200(1): 1-26 ။ [PubMed]
Philpot RM, Badanich Ka, Kirstein CL ။ အေးစက် Place: အရက်၏အကျိုးနှင့်အဆန္ဒရှိဆိုးကျိုးများအတွက်အသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများကို။ အရက် Clin Exp Res ။ 2003;27(4): 593-9 ။ [PubMed]
Pitt DK, Freeman က AS, Chiodo LA က။ Dopamine အာရုံခံဆဲလျ ontogeny: electrophysiological လေ့လာမှုများ။ synapses ။ 1990;6(4): 309-20 ။ [PubMed]
Porcher W က, ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ catecholamines biosynthesis ၏ Heller အေဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်။ J ကို Neurochem ။ 1972;19(8): 1917-30 ။ [PubMed]
SD, Gunnar MR, Dahl RE Benning Quevedo KM ။ အပျိုဖော်ဝင်စစတင်ခြင်း: ခုခံကာကွယ်ခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ psychophysiology အပေါ်သက်ရောက်မှု။ dev Psychopathol ။ 2009;21(1): 27-45 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Quinones-Jenab V. အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကကင်းအလွဲသုံးစားသည့်အခါဗီးနပ်စ်နှင့်အင်္ဂါဂြိုဟ်ကနေယောက်ျားကနေအမျိုးသမီးတွေကိုရှိပါသလဲ ဦးနှောက် Res ။ 2006;1126(1): 200-3 ။ [PubMed]
Rao က PA ဆိုပြီး, Molinoff PB, Joyce ဖြစ်မှု။ ကြွက် Basal ganglia အတွက် dopamine D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor Subtype ၏ Ontogeny: တစ်အရေအတွက် autoradiographic လေ့လာမှု။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1991;60(2): 161-77 ။
Riccardi P ကို, Zald: D လီ R ကို, ပန်းခြံက S, အန်ဆာရီက MS, Dawant B ကို, အန်ဒါဆင်က S, Woodward N ကို, Schmidt က D:, Baldwin R ကို, striatal အတွက် [(18) က F] fallypride ၏စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ရွှေ့ပြောင်းခံရအတွက် Kessler R. လိင်ကွဲပြားမှု နှင့် extrastriatal ဒေသများ: တစ်ပေလေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;163(9): 1639-41 ။ [PubMed]
ဆန်: D, Baron အက်စ်, ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏အဘို့အားနည်းချက်၏ Jr ဝေဖန်ကာလ: လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည်သက်သေအထောက်အထား။ ပတ်ဝန်းကျင်ကနျြးမာရေးရှုထောင့်။ 2000;108 3: 511-33 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ridenour က TA, Lanza ST, Donnie EC, Clark က DB ။ ဆယ်ကျော်သက်ပစ္စည်းဥစ္စာပါဝင်ပတ်သက်မှုတိုးတက်မှုအတွက်ကြိမ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအရှည်။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2006;31(6): 962-83 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Romeo RD ။ အပျိုဖော်ဝင်စ: neurobehavioural ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း၏စည်းရုံးရေးနှင့်လှုပ်ရှားမှုများသက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံး၏ကာလ။ J ကို Neuroendocrinol ။ 2003;15(12): 1185-92 ။ [PubMed]
Romeo RD, ရစ်ချတ်ဆန် HN, Sisk CL ။ အပျိုဖော်ဝင်နှင့်အထီးဦးနှောက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ရငျ့: တစ်အပြုအမူအလားအလာ recasting ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2002;26(3): 381-91 ။ [PubMed]
Rosenberg က DR, Lewis က DA ။ နှောင်းပိုင်းတွင် postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းမျောက် prefrontal cortex ၏ dopaminergic innervation အတွက်အပြောင်းအလဲများ: တစ် tyrosine hydroxylase immunohistochemical လေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994;36(4): 272-7 ။ [PubMed]
Rosenberg က DR, Lewis က DA ။ မျောက် prefrontal နှင့်မော်တာ cortical ရဲ့ dopaminergic innervation ၏ Postnatal ရငျ့: တစ် tyrosine hydroxylase immunohistochemical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ J ကို comp Neurol ။ 1995;358(3): 383-400 ။ [PubMed]
ရော့စ်သူ, Glasser FB, အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာများနှင့်အတူလူနာအတွက်စိတ်ရောဂါမမှန်များ၏ပျံ့နှံ့မှုအတွက် Stiasny အက်စ်လိင်ကွဲပြားမှု။ br J ကိုစွဲလမ်း။ 1988;83(10): 1179-92 ။ [PubMed]
Sato သည် SM, Schulz KM, Sisk CL, Wood က RI က။ မြီးကောင်ပေါက်နှင့်အန်ဒရိုဂျင်, receptors နှင့်ဆုလာဘ်။ Horm ပြုမူနေ။ 2008;53(5): 647-58 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Schmidt က PJ, Steinberg EM, Negro PP, Haq N ကို, Gibson က C, Rubinow DR ။ Pharmacologically ကျန်းမာနုပျိုအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက် hypogonadism နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုသွေးဆောင်။ Neuropsychopharmacology ။ 2009;34(3): 565-76 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Schramm-Sapyta NL, Pratt AR, Winder DG ။ ကြွက်တွေမှာကင်းအေးစက်သောအရပ် preference ကိုနှင့်မော်တာာင်းအပေါ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကိုကင်းထိတွေ့မှုသာရှိပြီးပြည်ပမှ periadolescent ၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 2004;173(1-2): 41-8 ။ [PubMed]
Schramm-Sapyta NL, Walker က QD, Caster JM, Levin ED, Kuhn CM ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်ထက်မူးယစ်ဆေးစွဲဖို့ပိုအားနည်းချက်ဖြစ်ပါသလား တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည်သက်သေအထောက်အထား။ Psychopharmacology (Berl) 2009
Schulz KM, Molenda-Figueira HA, Sisk CL ။ သို့ပြန်သွားရန်အနာဂတ်ကို: အဆိုပါစည်းရုံးရေး-Active အယူအဆအပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှအဆင်ပြေအောင်။ Horm ပြုမူနေ။ 2009;55(5): 597-604 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Schulz KM, Sisk CL ။ Pubertal ဟော်မုန်းသည်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်လူမှုရေးအပြုအမူများ၏ရငျ့: ဆီးရီးယားဟမ်းစတားကနေသင်ခန်းစာ။ Mol ဆဲလ် Endocrinol ။ 2006;254-255: 120-6 ။ [PubMed]
Schwandt ML, ဘား CS, Suomi SJ, Higley JD ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုစမ်းသပ်တာမျိုးမျောက်များ (Macaca mulatta) တွင်စူးရှသောအီသနောအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါအပြုအမူအတွက်ခေတ်-မှီခိုအပြောင်းအလဲ အရက် Clin Exp Res ။ 2007;31(2): 228-37 ။ [PubMed]
Schwandt ML, Higley JD, Suomi SJ, Heilig M က, ဘား CS ။ အီသနော-နုံဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုစမ်းသပ်တာမျိုးမျောက်များအတွက်လျင်မြန်စွာသည်းခံစိတ်နှင့် locomotor ာင်း။ အရက် Clin Exp Res ။ 2008;32(7): 1217-28 ။ [PubMed]
RE, Elliott သည် JC, Feltenstein မဂ္ဂါဝပ်ကိုကြည့်ပါ။ ကြွက်များတွင်ကြာရှည်နေကြပြီးကင်း-ရှာကြံအပြုအမူအတွက် ventral striatal လမ်းကြောင်း vs dorsal ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Psychopharmacology (Berl) 2007;194(3): 321-31 ။ [PubMed]
neuroscience အတွက် Seeman P. ပုံများ။ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု, X ကို: ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်း pruning ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999;156(2): 168 ။ [PubMed]
Shahbazi M က, Moffett လေး, Williams က BF, Frantz KJ ။ Age- နှင့်ကြွက်များတွင်လိင်-မှီခိုစိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2008;196(1): 71-81 ။ [PubMed]
Shram MJ, Funk: D လီ Z ကိုက Le အေဒီ။ နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များတွင်တုံ့ပြန်သုဉ်းခြင်းနှင့် reinstatement: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းနီကိုတင်းစွဲလမ်းတစ်ဇီဝအားနည်းချက်ဆန့်ကျင်သက်သေအထောက်အထား။ Neuropsychopharmacology ။ 2008;33(4): 739-48 ။ [PubMed]
Shram MJ, Le အေဒီ။ ဆယ်ကျော်သက်အထီး Wistar ကြွက်အရပျကိုအေးစက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်သွေးကြောသွင်းအုပ်ချုပ်နီကိုတင်း၏အေးစက်ကြိုးသက်ရောက်မှုမှအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များထက်ပိုပြီးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြသည်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 2009
Shram MJ လီ Z ကိုက Le အေဒီ။ အထီး Wistar နဲ့ Long-အီဗန်ကြွက်များတွင်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏အလိုအလျောက်ဝယ်ယူအတွက်ခေတ်ကွဲပြားခြားနားမှု။ Psychopharmacology (Berl) 2008;197(1): 45-58 ။ [PubMed]
Shram MJ, Siu EC အလီ Z ကို, တင်ဒေး RF, Le အေဒီ။ အထီး Wistar ကြွက်များတွင် mecamylamine-precipitated နှင့်အလိုအလျောက်အခြေအနေများအောက်တွင်အသက်အရွယ်နှင့်နီကိုတင်းဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုများအကြားဆက်သွယ်မှုသည်။ Psychopharmacology (Berl) 2008;198(2): 181-90 ။ [PubMed]
Sisk CL, Schulz KM, Zehr JL ။ အပျိုဖော်ဝင်စ: အထီးလူမှုရေးအပြုအမူများအတွက်ပြီးကျောင်းတွင်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2003;1007: 189-98 ။ [PubMed]
Sisk CL, Zehr JL ။ Pubertal ဟော်မုန်းဟာဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူစည်းရုံး။ တပ်ဦး Neuroendocrinol ။ 2005;26(3-4): 163-74 ။ [PubMed]
Sofuoglu M က, Babb DA, Hatsukami DK ။ အမျိုးသမီးတွေအတွက်သောက်သည်ကိုကင်းတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အဓိကချို့ယွင်းကုသမှုဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2002;72(1-2): 431-5 ။ [PubMed]
Sofuoglu M က, Dudish-Poulsen S က, နယ်လ်ဆင်: D, Pentel PR စနစ်, Hatsukami DK ။ လိင်နှင့်လူသားတွေအတွက်သောက်သည်ကိုကင်းကနေပုဂ္ဂလဒိဋ္ဆိုးကျိုးများအတွက်ရာသီစက်ဝန်းကွဲပြားခြားနားမှု။ Exp Clin Psychopharmacol ။ 1999;7(3): 274-83 ။ [PubMed]
Sofuoglu M က, Mitchell ကအီး, Kosten TR ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ကိုကင်းတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အဓိကချို့ယွင်းကုသမှုဆိုးကျိုးများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2004;78(4): 699-705 ။ [PubMed]
လှံကို LP ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အသက်အရွယ်-related အပြုအမူသရုပ်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2000;24(4): 417-63 ။ [PubMed]
Stamford ဂျေအေ။ အစာရှောင်ခြင်းသိသိ voltammetry နှင့်အတူလေ့လာကြွက် nigrostriatal dopamine စနစ်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အိုမင်း။ J ကို Neurochem ။ 1989;52(5): 1582-9 ။ [PubMed]
Steinberg L ကိုအဲလ်ဘတ်က D, Cauffman အီး, Banich M က, ဂရေဟမ်က S, Woolard ဂျေခေတ်အပြုအမူနှင့် Self-အစီရင်ခံစာအားဖြင့်ရည်ညွှန်းအဖြစ်အာရုံရှာခြင်းနှင့် Impulse အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု: တစ် dual-စနစ်များမော်ဒယ်သက်သေအထောက်အထား။ dev Psychol ။ 2008;44(6): 1764-78 ။ [PubMed]
Styne DM, Grumbach MM ။ အပျိုဖော်ဝင်စ: ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်၏ Williams ဟာဖတ်စာအုပ်ထဲမှာ Ontogeny, Neuroendocrinology, ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့် Disorders ။ Saunders; 2008 ။
Tarazi FI, Baldessarini RJ ။ dopamine: D (1) ၏နှိုင်းယှဉ် postnatal ဖွံ့ဖြိုးရေး, D ကို (2) နှင့် D ကို (4) ကြွက် forebrain အတွက် receptors ။ int J ကို Dev မှ neuroscience ။ 2000;18(1): 29-37 ။ [PubMed]
Tarazi FI, Tomasini EC, Baldessarini RJ ။ ကြွက် caudate-putamen နှင့်နျူကလိယအတွက် dopamine နှင့် serotonin ပို့ဆောင်ရေး Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ septi accumbens ။ neuroscience လက်တ။ 1998;254(1): 21-4 ။ [PubMed]
Tarazi FI, Tomasini EC, Baldessarini RJ ။ ကြွက် cortical နှင့် striatolimbic ဦးနှောက်ဒေသများတွင် dopamine D1 ကဲ့သို့ receptors ၏ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုး: An autoradiographic လေ့လာမှု။ Dev မှ neuroscience ။ 1999;21(1): 43-9 ။ [PubMed]
Teicher MH, Andersen က SL, Hostetter JC ။ , striatum အတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြား dopamine အဲဒီ receptor တံစဉ်များကိုအဘို့အ Jr အထောက်အထားသော်လည်းမ accumbens nucleus ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1995;89(2): 167-72 ။
Teicher MH, ဘာဘာ ni, Gelbard HA, Gallitano AL, ကမ့်ဘဲလ်တစ်ဦးက, နားမှာအီး, Baldessarini RJ ။ စူးရှသော nigrostriatal နှင့် haloperidol မှ mesocorticolimbic စနစ်ကတုံ့ပြန်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု။ Neuropsychopharmacology ။ 1993;9(2): 147-56 ။ [PubMed]
Tepper JM, Trent က F, ကြွက် nigrostriatal dopaminergic အာရုံခံ၏လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှု Nakamura အက်စ် Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ဦးနှောက် Res Dev မှဦးနှောက် Res ။ 1990;54(1): 21-33 ။
Terner JM, က de ကျေးအိပ်ချ်ရာသီလာခြင်းသံသရာအဆင့်နှင့်လူသားအတွက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှတုံ့ပြန်မှု။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2006;84(1): 1-13 ။ [PubMed]
တယ်ရီမက္ကလတ် YM၊ O'Malley PM, Johnston LD ဆေးခြောက်ကိုငြင်းခြင်း - အမေရိကန်လူငယ်များအဘယ်ကြောင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း၊ J ကိုလုံးအရက်မူးယစ်ဆေးဝါး။ 2008;69(6): 796-805 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tetrault JM, Desai က RA, Becker က WC, Fiellin DA, Concato J ကို, Sullivan က LE ။ ကျားနှင့်ဆေးညွှန်း opioids ၏ Non-ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှု: တစ်အမျိုးသားရေးအမေရိကန်စစ်တမ်းကနေရလဒ်တွေကို။ စွဲလမ်း။ 2008;103(2): 258-68 ။ [PubMed]
Tirelli အီး, Laviola, G, အမူအကျင့်ထိခိုက်စေဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များတွင် psychostimulants အားဖြင့်သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို၏ Adriani ဒဗလျူ Ontogenesis ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2003;27(1-2): 163-78 ။ [PubMed]
တောရက်စ် OV, Tejeda HA, Natividad LA က, O'Dell LE ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကာလအတွင်းနီကိုတင်း၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှအားနည်းချက် Enhanced ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008;90(4): 658-63 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tseng KY၊ D1-NMDA ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် prefrontal cortical တက်သည့်ပြည်နယ်များအား O'Donnell P. Post-pubertal ပေါ်ပေါက်လာခြင်း။ Cereb Cortex ။ 2005;15(1): 49-57 ။ [PubMed]
Tseng KY, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း prefrontal cortical interneurons ပြောင်းလဲမှုများ O'Donnell P. Dopamine မော်ဂျူ။ Cereb Cortex ။ 2007;17(5): 1235-40 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ujike H ကို, Tsuchida K ကို Akiyama K ကို Fujiwara Y ကို, အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်း Kuroda အက်စ် Ontogeny ကင်းရန်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1995;50(4): 613-7 ။ [PubMed]
ဗန် Etten ML, Neumark ကိုက်, အန်သိုနီ JC ။ မူးယစ်ဆေးပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အစောဆုံးအဆင့်အထီး-အမျိုးသမီးကွဲပြားခြားနားမှု။ စွဲလမ်း။ 1999;94(9): 1413-9 ။ [PubMed]
ဗန် Luijtelaar EL, Dirksen R ကို, Vree တီဘီ, နဂိုအတိုင်းနှင့် castrated ယောက်ျားနှင့်နဂိုအတိုင်းနှင့် ovariectomized အမျိုးသမီးကြွက်များတွင် EEG နှင့်အပြုအမူအပေါ်စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးဗန် Haaren အက်ဖ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 1996;40(1): 43-50 ။ [PubMed]
Vanderschuren LJ, Everitt BJ ။ မူးယစ်ဆေးရှာအချိန်ကြာမြင့်စွာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောဖြစ်လာသည်။ သိပ္ပံ။ 2004;305(5686): 1017-9 ။ [PubMed]
Vastola BJ, ဒေါက်ဂလပ် LA က, Varlinskaya EI, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်နီကိုတင်း-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို။ Physiol ပြုမူနေ။ 2002;77(1): 107-14 ။ [PubMed]
Vetter CS, Doremus-Fitzwater TL, လှံ LP ။ စဉ်ဆက်မပြတ်, မိမိဆန္ဒအလျောက်-access ကိုအခြေအနေများအောက်တွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်မှဆယ်ကျော်သက်ဆွေမျိုးအတွက်မြင့်မားသောအီသနောစားသုံးမှု၏အချိန်သင်တန်း။ အရက် Clin Exp Res ။ 2007;31(7): 1159-68 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Vivian ဂျာအစိမ်းရောင် HL, Young က je, Majerksy LS, သောမတ်စ် BW, Shively, CA, Tobin JR, Nader, MA, Grant က ka ။ cynomolgus မျောက်တွေကိုအီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေး induction နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (Macaca fascicularis): လိင်နှင့်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်များ၏ရေရှည်စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2001;25(8): 1087-97 ။ [PubMed]
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, Baler R ကို, Telang အက်ဖ် Imaging ကမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲလမ်းအတွက် dopamine ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ Neuropharmacology ။ 2009;56 1: 3-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Volkow ND, ဝမ် GJ, Telang က F, မုဆိုး JS, Logan J ကို, Childress AR, ဂြနျေး M က, Ma Y ကို, dorsal striatum အတွက် Wong က C. ကင်းတွေကိုနှင့် dopamine: ကိုကင်းစွဲထဲမှာတဏှာ၏ယန္တရား။ J ကို neuroscience ။ 2006;26(24): 6583-8 ။ [PubMed]
Walker က QD, Cabassa J ကို, Kaplan Ka လီ ST, ရွန်း J ကို, Spohr HA, Kuhn CM ။ ကိုကင်း-နှိုးဆွမော်တာအပြုအမူအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု: gonadectomy ၏မတူညီသောသက်ရောက်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2001;25(1): 118-30 ။ [PubMed]
Walker က QD, Kuhn CM ။ ကိုကင်းတိုးအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များထက် periadolescent ပိုမို dopamine လွှတ်ပေးရန်နှိုးဆွ။ Neurotoxicol Teratol ။ 2008;30(5): 412-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Walker က QD, Ray R ကို, Kuhn CM ။ ကြွက် striatum အတွက် dopaminergic မူးယစ်ဆေး neurochemical ဆိုးကျိုးများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2006;31(6): 1193-202 ။ [PubMed]
Walker က QD ရွန်နီကို MB, Wightman RM, Kuhn CM ။ အစာရှောင်ခြင်းသိသိ voltammetry ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် Dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်လွှာမှအထီးကြွက် striatum ထက်အမျိုးသမီးအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်။ neuroscience ။ 2000;95(4): 1061-70 ။ [PubMed]
Walker က QD, Schramm-Sapyta NL, Caster JM, Waller ST, Brooks အမတ်, Kuhn CM ။ အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင်ရွေ့လျားအပြုသဘောဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်ကင်းစားသုံးမိပါနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိ၏ စိုးရိမ်စိတ်လူကြီးများအတွက်ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2009;91(3): 398-408 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဝေါ်လဲန် K ကို Zehr JL ။ ဟော်မုန်းများနှင့်သမိုင်း: မျောက်အမျိုးသမီးလိင်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး။ J ကိုလိင် Res ။ 2004;41(1): 101-12 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဝမ် L ကို, Pitt DK ။ iontophoretic လေ့လာမှုများ: nigrostriatal dopamine အာရုံခံဆဲလျ autoreceptors ၏ Ontogeny ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1995;272(1): 164-76 ။ [PubMed]
Waylen တစ်ဦးက, Wolke ဃလိင် 'n' မူးယစ်ဆေးဝါးများ 'n' ရော့ခ် 'n' လိပ်: အဓိပ္ပာယ်နှင့် pubertal အချိန်ကိုက်၏လူမှုရေးအကျိုးဆက်များ။ EUR J ကို Endocrinol ။ 2004;151 3: U151-9 ။ [PubMed]
အနောက် MJ, Slomianka L ကို, Gundersen HJ ။ အဆိုပါ optical အစိတ်အပိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးကြွက် hippocampus ၏ thesubdivisions အတွက်အာရုံခံ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်၏ဘက်မလိုက် stereological ခန့်မှန်းချက်။ Anat ဖမ်းယူရေး။ 1991;231(4): 482-97 ။ [PubMed]
White က DA, Michael CC ကို, Holtzman စင်ကာပူဒေါ်လာ။ Periadolescent အထီးပေမယ့်အမျိုးသမီးမဟုတ်ပါဘူးကြွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်လုပ်ပေးထက်မော်ဖင်းအကိုက်တုံ့ပြန်အဆင့်မြင့်မော်တော်လှုပ်ရှားမှုရှိသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008;89(2): 188-99 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wiley JL၊ O'Connell MM, Tokarz ME, Wright MJ ။ , Delta (9) -tetrahydrocannabinol ၏ဆယ်ကျော်သက်နှင့်အရွယ်ရောက်ကြွက်များတွင်အုပ်ချုပ်မှု၏ဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2007;320(3): 1097-105 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wilmouth အီး, လှံ LP ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်နာတာရှည်နီကိုတင်းကနေဆုတ်ခွာ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2006;85(3): 648-57 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Windle M က, လှံ LP သို့ Fuligni AJ, Angold တစ်ဦးက, Brown က JD, ထင်းရူး D ကို, Smith က GT ကို, Giedd J ကို, Dahl RE ။ အသက် 10 နှင့် 15 နှစ်အကြားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ယန္တရားများ: အသက်မပြည့်သေးခြင်းနှင့်ပြဿနာအရက်သောက်သို့အသွင်ကူးပြောင်းမှု။ ကလေးအထူးကု။ 2008;121 4: S273-89 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
သစ်သား RI က။ အန်ဒရိုဂျင်၏ရှုထောင့်အားဖြည့်။ Physiol ပြုမူနေ။ 2004;83(2): 279-89 ။ [PubMed]
သစ်သား RI က။ ဟို-အန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးမှီခို? တိရစ္ဆာန်များနှင့်လူသားထံမှ Insights ။ တပ်ဦး Neuroendocrinol ။ 2008;29(4): 490-506 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wooten GF၊ Currie LJ, Bovbjerg VE, Lee JK, Patrie J. အမျိုးသားများသည်ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုများပြားပါသလား။ J ကို Neurol Neurosurg စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004;75(4): 637-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wooters TE, Dwoskin LP သို့ Bardo MT ။ မြင့်မားခြင်းသို့မဟုတ်အနိမ့်အသစ်အဆန်းနအဖြစ်ခွဲခြားကြွက်များတွင်ထပ်ခါတလဲလဲ methylphenidate ၏ locomotor အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ခေတ်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှု။ Psychopharmacology (Berl) 2006;188(1): 18-27 ။ [PubMed]
Xu ကို C, Coffey ll, Reith ME ။ dopamine ့စနှင့်ကြွက် striatal synaptosomal ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအတွက်တူညီအခြေအနေများအောက်တွင်တိုင်းတာ2beta ကို-carbomethoxy-3 beta- (4-fluorophenyl) tropane (WIN 35,428) ၏ binding ။ အမျိုးမျိုးသော blockers အားဖြင့်တားစီး။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Pharmacol ။ 1995;49(3): 339-50 ။ [PubMed]
Yararbas, G, Keser တစ်ဦးက, Kanit L ကို, ကြွက်များတွင် Pogun အက်စ်နီကိုတင်း-သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို: လိင်ကွဲပြားမှုနှင့် mGluR5 receptors ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Neuropharmacology 2009
Young က SE, Corley RP, တင်းကုပ် MC, Rhee SH, Crowley တီဂျေ, ဝစ် JK ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခို: ပျံ့နှံ့, လက္ခဏာ profile များကိုများနှင့်ဆက်စပ်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2002;68(3): 309-22 ။ [PubMed]
Zakharova အီး, Wade: D, Izenwasser အက်စ်ထိခိုက်လွယ်မှုကင်းအေးစက်ဆုလာဘ်မှလိင်နှင့်အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပါသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2009;92(1): 131-4 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Zhang က Y ကို, Picetti R ကို, Butelman ER, Schlussman SD, ဟိုတစ်ဦးက, Kreek MJ ။ အမူအကျင့်များနှင့် oxycodone အားဖြင့်သွေးဆောင် neurochemical အပြောင်းအလဲများကိုဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်အကြားကွဲပြားခြားနား။ Neuropsychopharmacology ။ 2009;34(4): 912-22 ။ [PubMed]